ခံရခကျလသေညျ – My Blog
မိုးအောငျသူ မှာ မကွာသေးမှီက မှ သခြာင်္ အဓိက နူငျ့ ကြောငျးပွီး ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ထုံးစံအတိုငျး ဘာလုပျစားရမညျမှနျး မသိ၊ နဂိုလျ ထဲက သူ့ အကို ကိုမောငျဟနျ တို့ လို စာလညျး မတျော၊ ရသညျ့အမှတျနဲ့ ရရာ မဂြော ယူ လိုကျရတော့ ဘာမှနျး မသိသညျ့ သခြာင်္ အဓိက နူငျ့ ကြောငျးပွီး ခဲ့သညျ၊ ကြောငျးတကျတုနျးက လညျး ဟေးလားဝါးလားနူငျ့ အခြိနျကုနျခဲ့ ရသညျ၊ အခု ကြောငျးလညျး ပွီးရော အဖကေ အစိုးရဝနျထမျး ရုံးစာရေး လောကျ အဆငျ့က နေ အငွိမျးစားယူ၊ အမကေ နဂိုလျထဲက ဘာအလုပျမှ မလုပျဖူးဘူး၊ အဖေ တယောကျလုပျစာနူငျ့၊ သူတို့ မိသားစု အလြှငျမှီ အောငျစားသောကျ နရေသညျ၊ သူ့အကို မောငျဟနျက စာတျောသညျ၊ အာအိုငျတီ ရောကျသှားသညျ၊ သူ့ အဖေ ညီ ဦးလေး တျောသူ က ထောကျပနျ့ ပေးရှာလို့သာ မောငျဟနျ ကြောငျးတကျ နိူငျသညျ၊ အခု သူ့ အဖလေညျး အငွိမျးစား၊ သိတဲ့ အတိုငျး လစာက ဘာမှ ကို ပွောပလောကျစရာ မရှိ၊ မောငျဟနျက အလုပျထဲ ရောကျနေ တော့ ဝငျငှလေေး ရှိလာလို့ တျောတော့သညျ၊ သူလညျး ကြောငျးပွီးတော့ ယောငျခွာခွာ မဖွဈခငျ မောငျဟနျက သူ့ အထကျအရာရှိ ဒျေါမြိုးမမ ၏ ညီမ ဒျေါဝငျးပပ အလုပျမှာ ချေါခိုငျးဖို့ သှငျးပေးထားလိုကျ၏၊
ပထမ ကတော့ မောငျဟနျ့ မကျြနှာနူငျ့ မို့ တိုလီမှုတျစ ခိုငျးရုံသာ ရညျရှယျပွီး ချေါထားခွငျး ဖွဈသျောလညျး၊ လုပျရညျ ကိုငျရညျလေး ရှိ၊ ကြိုးကြိုးနှံနှံ လညျး ရှိတော့၊ အခု ကိုတငျထှတျသှား နရေသော ဒသေ ဆိုငျရာ တာဝနျခံမြိုး လုပျခိုငျး လြှငျရမညျ့ အခွအေနရှေိတော့၊ ဒျေါဝငျးပပ က စပွီး သငျပေးလာ၏၊ အဆငျပွလေို့ မကျြနှာလှဲ ရလြှငျ၊ ကိုတငျထှတျ ကို ရုံးခြူပျ ပွနျချေါထားပွီး မိုး အောငျသူ ကို အစား လှတျ ဖို့ ရညျရှယျထားလသေညျ။ ထိုကဲ့ သို့ အနီးကပျ အလုပျအတူတူ လုပျ နရေတော့ လူပြို လူလှတျ မိုးအောငျသူ တယောကျ စိတျတှေ ဖေါကျပွနျလာ၏၊
မဖေါကျပွနျပဲ လညျး ခံနိူငျမလား၊ ရုပျရညျကလညျး ခြောမော၊ဘျောဒီကလညျး မယျဘှဲ့ ရဘူးသူ အမနေူငျ့ အပွိုငျ တောငျ့တောငျ့ ထှားထှား၊ သူဌေးသမီး ငယျငယျထဲက အလုပျကွမျးကွမျး တမျးတမျး ပငျတခါမှ မလုပျဘူး၊ ရှငျးရှငျးပွောရလြှငျ ဘတျဈကားတောငျတခါမှ တိုးမစီးဘူးခဲ့ လို့ နုဖတျနတေဲ့ အသားအရညျ နဲ့ ကွှရေုပျကလေး လိုလှသူ၊ ဒီကုမ်ပဏီ တခုလုံး၏ ဒုတိယ အကွီးဆုံး၊ ဘိုလိုမှုတျရရငျ၊ ဗွူတီ အနျ ပါဝါ တှဲထားတော့ တှတေဲ့ ယောကျကြားတှအေဖို့ အရမျးကို ဆကျဆီဖွဈနတေဲ့သူ၊ ထိုကဲ့ သို့သျော အမြိုးသမီး နူငျ့ နူဈယောကျထဲ ရုံးခနျးတခုထဲ မှာ တခါတရံ လူတှေ အမြားကွီး နဲ့ တခါတခါ လူတှေ တယောကျမှ မရှိတော့တဲ့ အခြိနျအထိ၊တပူးတှဲတှဲ လုပျနရေတော့၊ ကာမ စိတျတှကေ အမွဲ တကျကွှနခေဲ့ရသညျ။
ရှမှေ့ာတော့ ပျေါတငျ မကွညျ့ရဲ၊ ခိုးခိုးပွီး ကွညျ့ပွီးတော့သာ တံတှေးတှေ မွိုမွိုခြ နရေသညျ၊ အိမျပွနျရောကျရငျတော့၊ မကျြစထေဲ့ မှတျမိသမြှ ပုံဖျေါပွီး မှနျးထုတော့သညျ။ တခါတရံ ညဖကျအိပျယာဝငျ ခြိနျ လုပျပွီးတာတောငျ မနကျ ရုံးသှားကာနီး ရခြေိုးခနျးထဲ ဆှဲတတျသေးသညျ၊ သုတျရညျတှေ ထှကျပွီးကာစ လောကျမှာ စိတျငွိမျ သှားသျောလညျး အလုပျထဲ ရောကျလို့ ပွနျတှရေ့တာနဲ့ သူ့ကောငျကွီးက အတှငျးခံ ဘောငျးဘီအောကျမှာ မာတငျး နေ တတျသညျ၊ တနေ့ ထကျတနေ့ ရောဂါက မသကျသာပဲ ပိုပိုဆိုးလာခဲ့ရသညျ။ဝငျးပပ အလုပျသှားခါနီး အခနျးထဲ က ကိုယျလုံးပျေါ မှနျထဲ မှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ တပတျပွနျလှညျ့ ကွညျ့လိုကျသညျ၊ လကျစက ရငျစေ့ ကျောလာတိုတို လေး နူငျ့ ခတျေပျေါ စတိုငျ အသား ပါးပြော့ပြော့အင်ျကြီ က သူမ ရှရေငျ အစုံ ကို မပိုမလို၊ အမို့ အဖောငျး တိတိကကြ လေး ပွထားသလိုဖွဈနသေညျ၊
အရောငျတူ ထမိနျ အသားပြော့ပြော့ ကို သေးကငျြသော ခါးလေး မှာ တငျးတငျး ကပျြကပျြ စညျး ဝတျလိုကျတော့ ကားစှံ့ တဲ့ တငျလုံးကွီး တှကေ ဖှံ့ဖှံ့ ထှားထှား မို့မောကျထနသေညျ၊ အောကျက အတှငျးခံက ယောကျကြားလေး အတှငျးခံ စတိုငျ၊ ကတျသလောကျထဲ က အချေါကတော့ဘှိုငျးရှော့ ဆိုလား၊ နိူငျငံခွားရောကျ တူမလေး တယောကျက ဝတျလို့ ကောငျးသညျ ဆိုလို့ မှာပွီး ဝယျထားလိုကျတာ အရောငျစုံ၊ ဝတျလို့လညျး တကယျကောငျးသညျ၊ အသားကလညျး ပြော့အိနသေညျမှာ ဝတျလို့ ဝတျထားမှနျးပငျမသိရ၊ နောကျခြူပျရိုး ပြောကျ သူတို့ အချေါတော့ စငျး(မ)လကျဈ ဆိုလား၊ ဆိုတော့ ထမိနျ တငျးတငျးဝတျလို့တောငျ ဘောငျးဘီ အနား မပျေါ၊
အတှငျးခံ ဝတျထားသညျလို့ ပငျ မထငျရ၊ မိမိ တငျပါးဆိုငျ မြား၏ ကွှားကွှားဝငျ့ဝငျ့ ရှိမှု ကို မှနျအတှငျး နောကျပွနျကွညျ့ပွီး ကနြေပျသှားမှ ရှနဲဖိုကျ ရမှေေးလေးကို လညျတိုငျ၊ နဲ့ လကျကောကျဝတျတှေ မှာ ဖွနျး လိုကျတယျ၊ နောကျတော့ ဗိုကျကလညျး ဆာလာတာနဲ့ အောကျက မီးဖိုခြောငျရှိရာ ကိုဆငျးလာခဲ့သညျ၊ ဝငျးပပ က မနကျဆို အိပျယာထ တာနူငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသညျ၊ မယျဘှဲ့ ရ ခဲ့ဘူးသညျ့မမေေ က မိနျးခလေး ဆိုတာ ကိုယျလုံးကိုယျထညျ အခြိုးကြ ဖို့က အရေးကွီး သလို လှယျလှယျနဲ့ မရနိူငျဟု၊ သူတို့ ညီအမ ကို ငယျငယျထညျးက ပွောဆိုပွီး သူနူငျ့ အတူတူ လကေ့ငျြ့စသေညျ၊ ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျးကို မမေေ ကိုယျတိုငျ သငျပေးသညျ။
သူတို့ မှာလညျး ပစ်စညျးကိရိယာ အစုံအလငျ ရှိသညျ၊ အပြို ဘ၀ ထဲ က နစေ့ဉျလိုလို လုပျလာခဲ့တော့လညျး အကငျြ့ပါနပွေီ မနကျအိပျယာထ လို့ လကေ့ငျြ့ခနျး မလုပျလိုကျရရငျတောငျ ညှောငျးညာ သလို ဖွဈနတေတျသညျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး မှနျမှနျလုပျတဲ့ အကြိုး ကြေးဇူးကတော့ တကယျခံစားရသညျ၊ တခွား မိနျးခလေး တှနေူငျ့ ယှဉျလိုကျလြှငျ ယောကျကြားတှေ ရဲ့ မကျြလုံးက သူ့ အပျေါမှာ အမြားဆုံးရောကျနတော ကို အမွဲတမျး သတိထားမိနသေညျ၊ လူကလညျး အမွဲတမျး လနျးဆနျးနသေလို၊ ယောကျကြားမြား၏ အာသာငမျးငမျး အကွညျ့တှကေို လညျး သာယာမိသညျ၊
သှေးသား လှုပျရှားမှုအား ကောငျးသလို ကာမဆန်ဒ နိူးကွှမှု မှာလညျး အားမသေး ခွေ၊ သူ နူငျ့ ကိုတငျထှတျ အိမျထောငျကြ ပွီး ကထဲက ည တိုငျးလိုလို အလုပျဖွဈခဲ့ကွသညျ၊ ကိုတငျထှတျ အလုပျကိစ်စ နူငျ့ ခရီး ထှကျရသညျ့ အခါ၊ ပထမ ဆုံး အကွိမျက တခါမှ မခှဲ ဘူးတော့ တျောတျောလေး ခံစားရသညျ၊ သို့သျောလညျး တဖွေးဖွေး တော့အသားကြ သှားသညျ၊ ဒါပမေဲ့ တပတျလောကျဆိုရငျ မနနေိူငျတော့ သူ့ဘာသာ သူ လကျနူငျ့ အယားဖြောကျ ပဈရသညျ၊ အခု တခေါကျက တော့ တျောတေျာ့ ကိုကွာသညျ၊ ရာသီက လညျးပွောငျးတော့ပစ်စညျး ကောကျရတာ နောကျကြ ပွီး အလြှငျမမှီ ၍ ကိုတငျထှတျ လိုအပျတာထကျ ပိုပွီး နနေရေတော့ ဝငျးပပ အဖို့ နှရောသီ က သဈရှကျခွောကျလို မီးဖှားကြ တာ နူငျ့ မီးထလောငျနိူငျသညျ့အခွအေနရေောကျ နေ သညျ၊ ညအိပျရာဝငျ တိုငျး သူမ လကျခလေး နူငျ့ အစေ့ လေးကို နာနာ ပှတျ ရငျး တခြီလောကျပွီး မှ ပဲ အိပျလို့ ပြျောတော့သညျ။
အလုပျထဲ မှာကလညျး ဖဖေေ က လှဲလြှငျ သူက အကွီးဆုံးမဟုတျလား၊ ဖဖေေ ကလညျး အထိနျးအကှပျ ရရုံ လောကျ နာမညျသာ ခံထားတော့သညျ၊ သူကသာ အရာရာ ဆုံးဖွတျ လုပျကိုငျနေ ရခွငျးကွောငျ့ ဝနျထမျး အကုနျလုံးက ကွောကျရှံ့ ရိုသေ ကွရသညျ၊ နောကျပွီး ကြောငျးမပွီး မှီထဲက စ အလုပျထဲ ခွစေုံပဈ ဝငျခဲ့ ရသဖွငျ့ သူ့မှာက အလုပျနူငျ့ ပတျသကျသော အသိုငျးအဝိုငျး က ပိုကွီးစိုးခဲ့သညျ၊ အတိုခြူပျပွော ရလြှငျ သူ့ဘ၀ လောလော ဆယျမှာ အိမျ၊ အလုပျ၊ နူငျ့ ကိုတငျထှတျ ပဲ ရှိသညျ။ အလုပျနဲ့ ပတျသကျ ၍ တှဆေုံ့ ဆကျဆံ နခေဲ့ ရသော ယောကျကြားသနာ တှကေလညျး သူ့ကို လနျ့ကွသဖွငျ့ လိငျဆှဲဆောငျမှုရှိသော မိနျးမတယောကျဖွဈသညျဆိုတာကို အသိအမှတျပွုရဲ့ သားဖွငျ့ သူမသိအောငျ ဖုံးကှယျထားကွသညျ။
အငျး ဒီကောငျလေး တယောကျပဲ၊ ဝငျးပပ အတှေးထဲမိုးအောငျသူ ဝငျလာသညျ၊ မိုးအောငျသူ ကို မမြိုး ပွောပေး၍ ခနျ့လိုကျပွီးမှ လုပျရညျကိုငျရညျလေး သဘောကပြွီး အဆငျ့ဆငျ့ တိုးပေးရနျ ရညျရှယျထားခဲ့သညျ၊ ထိုအခါမှ စ၍ သူ့ကို အဓိက အရေးကွီးလုပျငနျး အရေးအရာ မြားကို ဝငျပါစေ ပွီး ထရိမျနငျ သဘောမြိုးမောငျး လာခဲ့သညျ၊ မိုးအောငျသူ ကလညျး အခြိနျပိုတှေ ဘာတှေ အဓိက မထား လိုအပျလြှငျ လိုအပျသလို ခိုငျးသမြှ လုပျပေးလရှေိ့တော့ဝငျးပပ လညျး သဘောကလြာခဲ့သညျ၊ ကိုတငျထှတျ နရောကို လှတျပွီး ကိုတငျထှတျကို သူ့ အနားပွနျချေါထား တော့ မညျဟုတှေးထားသညျ၊ သို့ သျော အခု တလော သူပဲ စိတျထငျလို့ လား မသိကောငျလေး အကွညျ့တှကေ နညျးနညျး ဆနျးသလိုလို၊ သူက မသိခငျြယောငျ ဆောငျပွီး မှနျထဲ မှ ဖွဈဖွဈ မကျြလုံး ဒေါငျ့ကပျပဲ ဖွဈဖွဈ တခါ တလေ ကွညျ့လိုကျလြှငျ သူ့ ကို ခိုးခိုး ကွညျ့နတေတျတာ သတိထားမိနေ၏။
ပထမတော့ သူ့ စိတျထဲ မှာ တမြိုး ဖွဈနသေျောလညျး နောကျပိုငျး သာယာသလို ဖွဈမိ၏၊ တခါတလေ မကျြလုံး စူးစူး တှကေ သူ့ ရငျကို ပါ ဖိုလာစေ၏၊ အခုလို၊ ကိုတငျထှတျ အဝေးသှား နပွေီး သူ့ အလိုဆန်ဒ တှေ လဈဟာနသေော အခြိနျမှာ ဆိုလြှငျ၊ ထိုအကွညျ့ နောကျ ကှယျ မှာ ဘာတှေ တှေးနမေလဲ ဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ရငျး သူ့ ရတနာ ရှကွေုပျလေး မှာ စိုတိုတို ဖွဈလာရသညျ။ ဒီနေ့ အောကျဆငျးလာတော့ မနျော တယောကျထဲ မီးဖိုခြောငျမှာ တှရေ့သညျ၊ ဒျေါဒျေါမွ နမေကောငျး ဟု ဆိုသညျ၊ မနျော တယောကျထဲ အလုပျမြားနေ တာတှတေ့ော့၊ နလေညျစာ မထညျ့ခိုငျးတော့၊ဒီနေ့ တော့ ဝယျစား လိုကျမညျဟုတှေးသညျ၊ နောကျ အလုပျလညျး ဒီနေ့ မြားအုနျးမှာဆိုတော့ ညနစော ပါ သူ့ အတှကျမလုပျနဲ့တော့ လို့ မှာထားခဲ့လိုကျသညျ။
မိုးအောငျသူ စိတျထဲ မှာ ဒျေါဝငျးပပ တယောကျ ဒီနေ့ ပိုလှနတေယျလို့ တှေး နမေိပွီး ၊သူ ပုဆိုးခွုံအောကျ မှ လီးကလညျး မမာတမာ ဖွဈနသေညျ၊ အခု မနကျကလေးကတငျ ထုလာသေးတယျ ရှီး၊ လို့သူ့ကိုယျသူ အပွဈ တငျရမလို ဂုဏျယူရလို ဝခှေဲ မရ ဖွဈနရေသညျ၊ သူက တကယျတော့ ကာမ ကိစ်စ မှာ ဖြံ မဟုတျပမေဲ့ လညျး အရိုငျးလေး တော့ မဟုတျပေ၊ ၁၀ တနျး ကြောငျးသား ဘ၀ တုနျးကက ကြူရှငျ ယူဖို့ ငှကွေေးလညျး မတတျနိူငျ တော့ သူ့ အဖေ ရုံးက တပညျ့ တယောကျ ၏၊ သမီး အပြိုကွီး ကြောငျးဆရာမ အားသညျ့ အခြိနျ ထိုအိမျသို့ သှား စာလုပျရသညျ၊ ထိုအပြို ကွီးမှာ အလယျတနျးပွသာ ဖွဈ သဖွငျ့ ခလေးမြားကို ကြူရှငျပေးသညျ၊ မိုးအောငျသူ က ဝိုငျးကူ သငျပေးရငျး သူ့စာကို သူကကျြသညျ၊ မသိတာ ကို အပြိုကွီး မမမွတျ ကရှငျးပွပေးသညျ၊ တကယျတော့ မြားသော အားဖွငျ့ အခြိနျတှမှော သူတို့ အိမျမှာက လူမပွတျခွေ၊ ကြူရှငျလာသော ခလေးတှနေူငျ့ မမမွတျ အမကေလညျး အိမျမှာပဲ ခကျြပွုတျရငျး ရှိနတေတျသညျ၊
မိုးအောငျသူ လူပြိုပေါကျပီပီ ဂှငျးထု တတျတော့မိနျးမ မွငျဘူးသမြှ မှနျး တော့ နီးနီး စပျစပျ နရေသညျ့ မမမွတျက လညျး ဘယျလှတျမလဲ ၊ မှနျးပွီးတော့ သာ ထု နတော တကယျဖွဈလာလိမျ့မညျဟု မတှေးမိခဲ့၊ တနေ့ မှာ ဘာမှနျး မမှတျမိတော့ ခလေးတှေ ကြောငျးပိတျလို့လား ဘာလားမသိ ကြောငျးသား တယောကျမှ မရှိ၊ မမမွတျ အမေ ကလညျး မရှိ နယျပွနျသှားတာလား ဘာလား မသိ၊ မမမွတျ အဖကေ အလုပျသှားသညျ၊ ရုပျရှငျတှထေဲကလို ပဲ ဇာတျလမျးက ဖွဈခငျြတော့ မိုးကလညျး စဲလိုကျ သညျးလိုကျ ရှာနသေညျ၊ မမမွတျကလညျး သူ့ ကို တံခါးဖှငျ့ပေးပွီး ခေါငျးနညျးနညျး နှောကျလို့ ဆိုပွီး အိပျယာထဲ ဝငျလှဲနသေညျ၊ ဖိုနဲ့မ နူဈယောကျ ထဲ လှတျလပျ နတေော့ မိုးအောငျသူ စိတျရိုငျး ဝငျပွီ၊ မမမွတျ လှဲ နသေော အိပျခနျးထဲ လိုကျဝငျပွီး မမမွတျ ကိုယျပူနသေလား ဘာညာ နဖူးစမျး ပါးစမျးရငျ ဖကျနမျး တော့သညျ၊
မမမွတျကလညျးနဂိုလျထဲက ပြော့ခငျြနသေော ဖယောငျးလေးမို့ မီးနားကပျလိုကျတော့ ပြျောကသြှားသညျ၊ အို့ မကောငျးပါဘူးကှယျ၊ ဘာညာ ကနေ မ ကိုသနားပါအုနျး မောငျမိုးရယျ၊ ကနေ၊ အားအငျ့အငျ့ မောငျမိုး ဖွဈသှားရသညျ၊ မမမွတျက အပြိုကွီးသာပွောသာ အသကျ အစိတျလောကျပဲ ရှိသေးသညျ၊ မိုးအောငျသူက အသကျ ၁၈ နူဈပငျ မပွညျ့သေး၊ နူဈဦး စလုံး၏ ပထမ ဆုံး အတှေ့ အကွုံ မြား ဖွဈကွသညျ၊ထိုနေ့ က လို လှတျလပျမှု မြိုးမှာ တျောတျော နူငျ့ ပွနျမပျေါတော့၊ မမမွတျ အမကေ အမွဲ ရှိနသေညျ၊ တခါတော့ မမမွတျ အမေ မရှိ ကြောငျးသားတှေ ရှိနသေညျ၊ ခလေးတှကေို သခြာင်္ပုစ်ဆာတှေ ပေးခဲ့ ပွီး အခနျးထဲ ဝငျကာ လုပျဖွဈကွသညျ၊ မိုးအောငျသူ ၁၀တနျးအောငျ သှားတော့ မရောကျဖွဈတော့ပွီ၊ မမမွတျလညျး အိမျက ပေးစားတဲ့ သူနဲ့ အိမျထောငျပွုလိုကျသညျ၊ မိုးအောငျသူ တက်ကသိုလျရောကျတော့ အိမျနားက ခြာတိတျမ မွီးကောငျပေါကျစ လေးနူငျ့ ရီးစားဖွဈသညျ၊ ကောငျမလေးက ကိုးတနျးပဲ ရှိသေးသညျ။
တက်ကသိုလျ ကြောငျးသား ဆိုတော့ အထငျကွီး သညျ၊ ရီးစားစာ တစောငျနူငျ့ ပငျ သမီးရီးစား ဘဝရောကျခဲ့ ကွသညျ၊ ထိုကောငျမလေးကို တော့ မိုးအောငျသူ ပါကငျ ဖှငျ့လိုကျရသညျ၊ ကောငျမလေး အိမျမှာ လူကွီးတှေ မရှိခြိနျ အိမျနောကျဖေး ပေါကျက ပတျဝငျပွီး ကောငျမလေး ကို အခနျးထဲအတငျးဆှဲချေါ ဖကျနမျးရငျး ပါကငျဖှငျ့လိုကျ သညျ၊ နောကျ တော့ လဈရငျလဈ သလို ဝငျဝငျဆှဲသညျ၊ သိပျ အကွာကွီးတော့ မခံလိုကျ၊ ကောငျမလေး မိသားစု နယျပွောငျးသှားတော့ ဝေးသှားကွရသညျ၊ တက်ကသိုလျတကျ နတေုနျး ထိုကဲ့ သို့ အိမျဘေးမှ ကောငျမလေး နူငျ့ ညိနေ သဖွငျ့ မိုးအောငျသူ တယောကျ ကြောငျးမှာ ရီး စား မထားဖွဈလိုကျခွေ၊ တယောကျနူဈယောကျ စမျးလိုကျသျောလညျး အဆငျမပွေ၊ အိမျဘေးမှာ စားစရာက လညျး ရှိနတေော့ သိပျလညျး မကြိုးစားခငျြတော့ တာလညျး ပါလိမျ့မညျထငျပါသညျ။
ကြောငျးပွီးသှားတော့ လညျး သူမြား တှလေိုဟေးလားဝါးလား လုပျဖို့ အခြိနျမရ တော့ အိမျက စီးပှားရေး အခွအေနကွေောငျ့ ရသညျ့ အလုပျကလေး ကို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျနရေ သဖွငျ့ ရီးစားသနာလညျး မထားဖွဈသေး၊ လောလော ဆယျ သူ့ရောဂါကတော့ သူ့ လကျရှိ ဘောစိ၊ သူ့သူဌေးမ ဒျေါဝငျးပပ ကိုသာ အသားကုနျ လုပျခငျြ နသေညျ။ ဝငျးပပ အလုပျထဲ ရောကျတော့ ဒီနေ့ ခေါကျရိုးကြ ရှပျအငျးကြီ သပျသပျယပျယပျနဲ့ ပလကေပျ ပုဆိုး အပြော့ ၊ နဲ့ သားနားနသေော မိုးအောငျသူ ကိုတှလေို့ကျရ ၏၊ ဆံပငျရှညျရှညျ ဂုတျဝဲ လေးနူငျ့ နုပြိုသေးသော မကျြနှာလေး နူငျ့ စူးရဲသော မကျြလုံး အစုံက သူ့ရငျ တခကျြဖိုသှားသညျ၊ အငျး ငါလညျး ကိုတငျထှတျ နဲ့ ဝေးနရေတာ ကွာလို့ထငျတယျ၊ စိတျတှေ လနေတေယျ၊ ဟု ကိုယျ့ဘာသာ သတိခြူပျ ရငျး အလုပျစလုပျတော့သညျ၊ စာရငျးတှပေေါငျး ဖုနျးတှေ ချေါစရာရှိတာတှေ ကွောငျ့ မိုးအောငျသူ ကို သူ့ရုံးခနျးထဲ လာပွီး ကူလုပျခိုငျးထားလသေညျ။ ..ဟောတော့ ထမငျးစားခြိနျတောငျ လှနျနပွေီ၊ မောငျမိုးအောငျသူ ရော ဆောရီးနျော ဗိုကျဆာနပေလား.. …ရတယျ မမဝငျး ဒီလောကျလဲ မဟုတျသေးပါဘူး.. …မငျး ထမငျးဘူး ပါလာလား၊
ဒီနေ့ မပါဘူး မမဝငျး..ကနြျော ဒီနားပဲ ထှကျစားမလားလို့.. ..အျောဟုတျလား မမ လညျး ဒီနေ့ အိမျက ဘာမှ မပါလာဘူး ထှကျစားရအောငျ မမ တို့နဲ့ လိုကျခဲ့.. ရှစေငျ..ရေ..ဟေ့ ရှစေငျ တို့ တခုခု သှားစားရအောငျဟေ့.. ဒျေါဝငျးပပ က တဆကျတညျး သူနဲ့ အဖျေါလိုကျနကွေ ကောငျမလေး တယောကျကို လှမျးချေါလိုကျသညျ။ …ဟငျ..မမ က ကွိုမပွောထားလို့ ရှစေငျ အိမျက ပါလာတဲ့ ထမငျးဘူး စားလိုကျပွီ၊ အဟီး..လိုကျခဲ့မယျလေ မမ အဖျေါရအောငျ.. …အျောအျော အေး ငါလညျး မသှေ့ားလို့ ..စားပွီးရငျလညျး နခေဲ့တော့ မိုးအောငျသူလညျး ပါမှာပဲ မမ ခနထှကျသှားလိုကျအုနျးမယျ..ဟို လူတှဖေုနျးချေါရငျ…….. ဒျေါဝငျးပပ က မှာစရာရှိတာလေးတှေ မှာခဲ့ပွီး မိုးအောငျသူနဲ့ အတူ သူ့ကားလေး ရပျထားတဲ့နရောကို ဆငျးလာခဲ့ကွသညျ။ဒျေါဝငျးပပ မှာ ဒီနေ့ အလုပျတခု ပွီး ရငျ အလုပျက နညျးနညျး ပွနျ အားသှားမှာမို့ စိတျပေါ့ပါး နေ၏၊ မိုးအောငျသူ နူငျ့ စားသောကျဆိုငျတခု တှငျ ဝငျစား ကွရငျးက မှစကားစမွညျ ပွောဖွဈကွသညျ၊
..ဟူး ငါတို့ မှာလညျး အလုပျတှေ ပိနတောနဲ့ စကားတောငျ ကောငျးကောငျး မပွောဖွဈကွဘူးနျော.. …ဟုတျကဲ့ မမဝငျး..မမဝငျးက အလုပျတအားလုပျတာကိုး.. ..အဲလောကျလဲ ဟုတျပါဘူးကှာ ဖဖေေ က မကျြနှာလှဲထားတယျ ဆိုတော့ ကိုယျ့လကျထဲ မှာ မကဆြငျးသှားစခေငျြဘူးလေ..မောငျမိုး ရဲ့ အကူညီလညျး ပါပါတယျ၊ မောငျမိုးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ.. ..ဟာမဟုတျတာ မမဝငျးကလညျး မမဝငျး တို့ ကြေးဇူးကွောငျ့ ကနြျော ဒီအလုပျလုပျရတာပါ.. ..ကဲ ပါ အဲဒီအကွောငျးတှေ ပွောမနပေါနဲ့ ကဲ မငျး အကွောငျးလေး ဘာလေးပွောပါအုနျး.. ..ဟာ မမဝငျးက လညျး ကနြေျာ့ အကွောငျးက ဘာမှ စိတျဝငျစားစရာ မကောငျးပါဘူး၊ .. …အံမယျ မငျးလို အရှယျ ရုပျရညျမြိုးနဲ့ မြား၊ ပွောစမျးပါအုနျး ကောငျမလေး ဘယျနူဈယောကျ အသဲကှဲ ပွီးပလဲ.. ..အာ မမဝငျး ကလညျး လုပျပွီ၊ ကနြေျာ့မှာ ရီးစားတောငျ မရှိသေးပါဘူး..ပေါကျကရတှေ၊ ဟဲဟဲ.. …မယုံပါဘူးကှာ..ဘာလညျး ..ကွိုကျစရာကောငျး တာ မတှသေ့ေးလို့လား.. …ဟီးဟီး မမဝငျး ခွဖြေားလောကျမှီအောငျ ခြောတဲ့သူ တှရေ့ငျတောငျ ကနြျောက လိုကျမှာ.. ဟိုကျ..မိုးအောငျသူ တယောကျ သူ့ပါးစပျက စှပျရှတျထှကျသှားပွီးမှ ကိုယျ့ပါးကိုယျပွနျရိုကျခငျြစိတျ ပေါကျသှားသညျ၊ လခှီးမှ ပဲ ဒီစောကျပါးစပျနဲ့ တော့ အလုပျပွုတျတော့မှာပဲ၊ ဟုလနျ့သှားသညျ။
သို့သျော ဒျေါဝငျးပပ က အပွုံးမပကျြ ရီမောရငျး၊ …ကဲကဲ ..စားပါကှာ မမကြှေးပါ့မယျ ငါ့မောငျက ဒီလောကျတောငျ မွှောကျနစေရာမလိုပါဘူး၊ကှာ ဟငျးဟငျး… အဲတော့လညျး ခြျောလဲ ရာ ရောထိုငျလိုကျတာပေါ့။ …တကယျပွောတာ ပါ မမဝငျး ရဲ့ မမဝငျး လိုမြိုး ခြောပွီး ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ လှတဲ့သူမြိုး မိနျးခလေး တထောငျမှာ တယောကျရှာလို့တောငျ မတှနေိူ့ငျပါဘူး၊ …. ….တျောပါပွီ ကိုပိုရယျ ..ဟငျးတှေ အေးကုနျမယျ စားလိုကျပါအုနျး…ညနဘေကျ အလုပျဆငျးတော့ ဒျေါဝငျးပပ စာရှကျစာတမျး မြား ကို စက်ကူပုံးတလုံး နဲ့ ထညျ့ ပွီး မိုးအောငျသူ က ကားနား အထိလိုကျပို့ရငျးမှ …မမဝငျး ကနြျော အိမျအထိလိုကျပို့ပေးမယျလေ ကနြျော အဲဒီဖကျ ပိုငျးလညျး သှားစရာရှိတယျ၊ အဟီး မမဝငျးကားနဲ့ လိုကျရတော့ ဘတျဈကား တှယျ မစီးရတော့ဘူးပေါ့၊.. မိုးအောငျသူ က ဘာရယျမဟုတျ၊ ဒျေါဝငျးပပ နားကပျ ရမှေေးနံ့လေးရူ ၊သူ့ဘျောဒီကို မသိမသာ ခိုးကွညျ့ ရတာ ဖီးတကျနလေို့ ကွံဖနျ ရမယျရှာနတော၊ ဒျေါဝငျးပပ ကလညျးချေါသှားခဲ့သညျ။
ကောငျလေး ခိုးခိုးကွညျ့နတော လညျး သူသိသညျ၊ ဘာမှနျးမသိ သူ့ရငျမှာ ကနြေပျ ပီတိ ဖွဈရုံ မက သူပိပိ လေးမှာလညျး စိုထိုငျးထိုငျး ဖွဈနရေပါသညျ။ အိမျရောကျတော့ မနျော က တံခါးလာဖှငျ့ပေးရငျး၊ ..အဝငျး စားတော့ မလား မနျော ပွငျထားလိုကျ၇မလား.. ..မစားသေးဘူး မနျောရေ မနျော လုပျစရာရှိတာ လုပျပါ နောကျမှ ချေါလိုကျမယျ၊.. …အငျးအငျး ..ဒါဆို မနျော ရခြေိုးလိုကျအုနျးမယျ၊ ခနနရေငျ ကိုတငျ့ ပွနျရောကျတော့မှာပါ.. …အျော သူဇာနဲ့ ဖိုးသကျ ကို သှားကွိုတာလား…ကဲ မောငျမိုးရေ အဲဒီစက်ကူပုံးလေး တခါထဲ အပျေါထပျလိုကျတငျပေးပါအုနျး၊.. …ဟုတျကဲ့ မမဝငျး.. မိမိ ရှမှေ့ လှခေါးပျေါ တကျသှားသော ဒျေါဝငျးပပ ၏ နိမျ့တုနျ မွငျ့တုနျ တငျပဆုံနူငျ့ သေးကငျြသော ခါးက မိုးအောငျသူ ၏ ငတ ကို မာတငျးလာစပွေီး ဒူးတောငျ ညှတျခှကေခြငျြလာခဲ့ရသညျ။ အိမျကွီးတလုံးလုံးက လညျး တိတျဆိတျ နတေော့ မိုးအောငျသူ စိတျတှေ ထကွှလာခဲ့ရသညျ။
ဝငျးပပ မှာလညျး သူ့နောကျက နေ မိုးအောငျသူ တယောကျသရညျတမွှားမွှား ဖွဈနမေညျဆိုတာကို သိနသေညျ၊ သူကိုယျတိုငျက ပငျ ပွခငျြနသေညျ၊ သူ့ပိပိ လေးထဲမှ အရညျ တခြို့ ပငျ သူဝတျထားသော ပငျတီ ပျေါ စိုလာခဲ့သညျ၊ တ ကယျဆို ဒီစက်ကူ ပုံးကို အောကျမှာပဲ ထားခိုငျးပွီး နောကျမှ ဦးလေး တငျ့ကို တငျခိုငျးလိုကျလညျး ရသညျ၊ အခုတော့ သူကိုယျတိုငျက ပငျ ခပျကဲကဲ ဖွဈနသေလားမသိ၊ သူ့အခနျးတံခါးကို တှနျးဖှငျ့ ဝငျလိုကျတော့ ရငျတှေ တဒိတျဒိတျ ခုံနသေညျ၊ မိုးအောငျသူ မှာလညျး အိစကျညကျညောလှသညျ့ ဝငျးပပ တို့ လငျမယား ကုတငျကွီး ကိုတှရေ့တော့ ရငျတဒိနျးဒိနျးခုနျလာသညျ၊ ဒီအပျေါမှာသာ မမဝငျး ကို လိုးလိုကျရရငျ ဟူသောအတှေးဖွငျ့ လကျတှေ ပငျတုနျလာ၏၊ ဒျေါဝငျးပပ က ..ကွမျးမှာ ခနခထြားလိုကျပါအုနျးကှ မောငျမိုး ရဲ့ မလေးဘူးလား နအေုနျး ပွီးမှ ဒီနားမှာ တငျမလို့.. ဒျေါဝငျးပပ က တံခါး အနောကျဘကျနားက ဘီရိုတခုကို ဖှငျ့လို့ရအောငျတံခါးကို ပွနျစလေို့ကျသညျ၊
ထိုဘီရို အနားကို အသှား သူခွထေောကျက ကွမျးပွငျပျေါက ဒေါကျဖိနပျ တရံကိုသှားတကျနငျးမိပွီး ခွခေေါကျကာ ခြျောလဲ မလိုဖွဈသှား၏။ …အမေ့…အို… ခွမွေနျလကျမွနျ မိုးအောငျသူ တယောကျ လှမျးထိနျးကာ ပှလေို့ကျလို့ ကွမျးပွငျနူငျ့ မကျြနှာ မအပျမိခွငျး ဖွဈလသေညျ။ …မမဝငျး..ဘာဖွဈသှားလညျးဟငျ.. ..ခွခေေါကျသှားတယျ ထငျတယျ..အား…ခွထေောကျ နညျးနညျး နာ သှားတယျ.. ..ရတယျ မမဝငျး ခွမေထောကျနဲ့ ကနြျော ကုတငျပျေါ သှားတငျပေးမယျ.. မိုးအောငျသူ က သူ့ရငျခှငျထဲ အိစကျနသေော ဒျေါဝငျးမမ ကိုယျလုံးလေး ကို မလှတျခငျြလို့ အသာပှပွေီ့း ကုတငျဆီသယျလာခဲ့သညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ ရှကျသှေးဖွနျးပွီး လှခငျြတိုငျးလှနသေော မကျြနှာလေး ကိုငုံ့ ကွညျ့ရငျး မနနေိူငျတော့သော၊ မိုးအောငျသူ တယောကျ ဒျေါဝငျးပပ ကို ကုတငျပျေါ တငျလိုကျရငျး တဆကျထညျး နူတျခမျးနုနု လေးကိုငုံ့ကာ နမျးစုပျလိုကျမိတော့သညျ။
ဒျေါဝငျးပပ ၏ နူတျခမျးလေး မြားက အမွငျမှာတငျ အလှနျအမငျး လှ ရုံမက၊ သူ့နူတျခမျးနူငျ့ ဖိကပျလိုကျတော့ အတှေ့ မှာလညျး နူးညံ့ ပြော့ပွောငျးလှ ပွီး သူ့ပါးစပျထဲ အောကျနူတျခမျးလုံးလုံးလေး ကို ငုံခဲ လိုကျတော့ အရသာ မှာလညျး ခြိုမွိနျ လှပသေညျ ဟု မိုးအောငျသူ စိတျထဲ ထငျမိလသေညျ။ ဒျေါဝငျးပပ မှာ ရှကျလို့ လားမသိ မကျြလုံးလေး မှေး စငျးထားသျောလညျး၊ သူ့ နူတျခမျးတှကေတော့ မိုးအောငျသူ ရဲ့ အစုပျ အနမျးတှကေို ရမကျ ပွငျးပွငျးနဲ့ တုနျ့ပွနျ နလေရေဲ့၊ သူ့လကျတှကေလညျး မိုးအောငျသူရဲ့ လညျဂုတျ ကို တှဲလဲ ခိုဆှဲထားသညျ။ ဒျေါဝငျးပပ ရဲ့ ခါးကငျြကငျြလေး ကို ဖကျထားတဲ့ မိုးအောငျသူရဲ့ လကျတှကေလညျး အောကျဘကျ ကို လြောခြ ပွီး သူ့တငျပါးထှား အိအိ ကို ဆုပျကိုငျ ပှတျသပျပေးနမေိသညျ၊ မိုးအောငျသူ က ကပျြကပျြ ကလေး စညျးထားတဲ့ ဒျေါဝငျးပပ ထမိနျကို ဖွလြှေော့ ပွီး ခြှတျခလြိုကျတော့ ဒျေါဝငျးပပ အလိုကျသငျ့ ဖငျကွီး ကို ကွှပေးရှာ၏၊ ဒျေါဝငျးပပ ရဲ့ ပေါငျတနျ တှကေ ဆငျစှယျ နူဈခြောငျးလို အဆဈ အမွဈ မရှိ စငျးဖွောငျ့ ပွီး ဖွုဝငျး နသေညျ၊
မိုးအောငျသူ က အာသာ ငမျးငမျး နဲ့ ပေါငျတနျ ဖှေးဖှေး လေး တှကေို နရောမလပျ အောငျ နမျးရှုံ့ နမေိသညျ၊ ကုတငျပျေါ မှာ ပကျလကျကလေး ဒူးထောငျ ပေါငျကား ဖွဈနရှောတဲ့ ဒျေါဝငျးပပ ရဲ့ ပေါငျ နူဈလုံးကွား မိုးအောငျသူ တယောကျ ရောကျနရှောပေါ့၊ မိုးအောငျသူက သူ့ လကျဖဝါးလေး တှနေဲ့ ပေါငျ အောကျပိုငျး သားလေး တှကေို ပှတျသပျပေးနရေငျးက ဒျေါဝငျးပပ ရဲ့ ပေါငျ အတှငျး အရငျးကြ ဆုံး မိုးခိုသား လေး တှကေို ရကျပေးနမေိသညျ။ ( လူတှငျ မိုးခိုသား ဆိုသညျမှာ မိုးရှာထဲ မတျတပျ ရပျနပေါက မိုးရေ မစိုနိူငျသော နရော ကို ဆိုလိုပါသညျ၊ ဤကား စာရေးသူ၏ အတှေးဖွဈ၏။ ) ဒျေါဝငျးပပ မှာလညျး မိုးအောငျသူ ၏ နူးညံ့ ပူနှေးနှေး လြှာကွီးက သူ့ အတှငျးသားအကြ ဆုံးနရောတှကေို ရကျပေးနေ သဖွငျ့ ကွကျသညျး တဖွနျးဖွနျး ထ လောကျအောငျ အရသာထူး နူငျ့ တှနေ့ရေလရော၊ နဂိုလျ ထဲက စိမျ့နသေော စောကျရညျကွညျ မြားမှာ အခုတော့ အဖုတျအပွငျသို့ ပငျ လြှံကြ ကာ သူဝတျထားသော ဘှိုငျးရှော့ စတိုငျ ဗဈတိုးရီးယား စီးခရကျ အတှငျးခံ ဘေောငျးဘီလေး ကို ရှဲနဈ စပေါတော့သညျ။
စောကျရညျကွညျမြား စိုရှဲ နသေဖွငျ့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ လေးမှာ ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျ ကို ကပျလြှကျ အဖုတျ ကှဲကွောငျးရာ ကို ထငျးထငျး ကွီး မွငျနရေပရော၊ မိုးအောငျသူက သူ့လကျခြောငျး ထိပျကလေး ဖွငျ့၊ အကှဲကွောငျး တလြှောကျ ပှတျသပျပေးနမေိပွနျ ပါသညျ။ မိုးအောငျသူ က တဆငျ့တကျကာ ဒျေါဝငျးပပ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေး ကို ခါးသရေ မြှော့ကွိုး မှ တဘကျတခကျြ ဆှဲ ကိုငျ ခြှတျလိုကျရာ ဒျေါဝငျးပပ ကလညျး အလိုကျသငျ့ ဖငျကွီး ကို ကွှပေးလိုကျသဖွငျ့၊ အမှေးအမွှငျ ရိတျထား၍ ပွောငျနသေော အဖုတျ ကွီး မှာ ဖောငျးကားလြှကျ ပျေါလာတော့သညျ၊ စောကျရညျကွညျမြားဖွငျ့ ရှမျးပွောငျလကျ နသေော ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျကွီး ကို မိုးအောငျသူ တယောကျ အငမျးမရ သူ့ပါးစပျဖွငျ့ ဖိကပျကာ စုပျယူလိုကျရာ၊ ဒျေါဝငျးပပ ၏ ထူထဲထဲ အဖုတျနူတျခမျး တဖတျ မှာ သူ့ ပါးစပျတှငျးသို့ ပါလာခဲ့လသေညျ။
…အငျ့…အားးးး ..အို့ …အိုးးကှယျ….. ဒျေါဝငျးပပ မှာ သူ့ အဖုတျနူတျခမျးဖတျ လေးကို မိုးအောငျသူက သူ့ နူတျခမျးဖွငျ့ အသာဖိညှပျ ဆှဲ လိုကျရာ ထှနျ့ထှနျ့ လူးအောငျ ခံစားလိုကျရသဖွငျ့ အသံလေး ထှကျ ငွီး ရုံ မက မိုးအောငျသူ ၏ ခေါငျးမှ ဆံပငျမြားကို ပငျ အားမလို အားမရ ဆုပျကိုငျ ဆှဲ လိုကျ မိလတေော့သညျ။ မိုးအောငျသူ ကလညျး ဒျေါဝငျးပပ ၏ ကွောငျမ ကဲ့သို့ ငွီး သံလေးကွောငျ့ ပို စိတျ ထကျသနျလာပွီး သူ့ လြှာကို ရှညျနိူငျသမြှ ရှညျအောငျ ဆနျ့ ကာ ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျတှငျး ထုတျသှငျး ကစားလတေော့သညျ။ ဒျေါဝငျးပပ မှာ ပွတျနတော ကွာပွီ ဖွဈသော ကိုယျ ကွိုကျနူဈသကျလှသညျ့ အစာ ကို ပွနျအမွညျး စားလိုကျရ သူလို ဖွဈနပေရော အရသာ အထှတျအထိပျ ရောကျ ပွီး ပေါငျတနျလေး နူဈခြောငျး ဆနျ့တနျးလြှကျ တခြီ ပွီးသှားရရှာတော့သညျ။ ထိုအခါမှာ မိမိ လိငျတနျကွီး တခုလုံးကလညျး မခံ မရပျနိူငျအောငျ တငျးမာ နပွေီ ဖွဈသော မိုးအောငျသူ က ဒျေါဝငျးပပ ပေါငျနူဈလုံးကွားမြာ ဒူးထောကျ ထိုငျလြှကျ သူ့ ပုဆိုးကို ဖွညျခလြိုကျလသေညျ။
မိုးအောငျသူက ထောငျမတျ တငျးမာနသေော သူ့ လိငျတနျကွီး ကို ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျလှလှ အကှဲ ကွားမှာ အထဲ နားထိ ခေါငျးကို ဒဈမွုပျသညျ့ အထိ ထိုးသှငျးလိုကျပွီး ဒျေါဝငျးပပ မကျြနှာကို လှမျးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ဒျေါဝငျးပပ မှာ သူ့ လကျလကျနူဈဖကျကို မွှောကျကာ မကျြလုံးမြားပျေါ အုပျထားသညျကို တှလေို့ကျသညျ။ အငျး ဒီတခြီတော့ ရှိပါစေ ဦးပေါ့လေ၊ နောကျတခါဆိုရငျ တော့ အဲ လို နလေို့ မရတော့ဘူး ငါ့ဒုတျကွီး သူ့ အဖုတျထဲ ထညျ့နတောကို ကွညျ့ကို ကွညျ့ခိုငျးရမယျလို့ တေးထားလိုကျ၏၊ မိုးအောငျသူ မှာ အသား ညို သူဖွဈရာ သူ့ လိငျတနျ ညိုညို ကွီး က ဖှေးဖွူ ဥ နသေော ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျလေး ထဲ ဖွေးဖွေး ခွငျး တိုးဝငျ သှားသညျ မှာ ကွညျ့ရတာနူငျ့ ပငျ အရသာရှိသညျဟု ထငျမိလသေညျ။
မိုးအောငျသူ အဖို့ မှာ လပေါငျး မြားစှာ စိတျကူးနူငျ့ မှနျးခဲ့ ရပွီး ဒီတသကျတော့ ဖွဈနိူငျခွေ မရှိ ဟု ထငျထားခဲ့ ရသော သူ့ ဘောစိ မမ ကို လုပျနရေ ခွငျး ဆိုသညျ့ အတှေးက ပငျလြှငျ သုတျရညျမြား ခကျြခွငျး ပနျးထှကျ သှားရလှအောငျ စိတျလှုပျရှား မိနပေသေညျ၊ ထို့ အတှကျ ကွောငျ့လညျး တလကျမ ဆို တလကျမ တအိအိ တိုးဝငျ သှားသော သူ့ လိငျတနျ မှ ခံစားရသညျ့ အရသာ ကို အပွညျ့ အ၀ ခံစားနလေတေော့သညျ။ တခြီပွီး သှား ခဲ့ သညျ့ ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျ တှငျး မှ အရညျ မြားကွောငျ့ မိုးအောငျသူ၏ လိငျခြောငျးကွီး မှာ အခကျ အခဲ မရှိ တိုးဝငျ သှားသျောလညျး ၊ ခလေး လညျး မမှေး ဘူး၊ လငျ နဲ့ လညျး ဝေး နတော ကွာ၊ နပွေီ ဖွဈသော ဒျေါဝငျးပပ မှာ သူ့ အဖုတျတှငျး တငျးတငျး ကပျြကပျြ ပွညျ့နှကျ သှားသညျဟု ခံစားနရေလသေညျ။
မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျးကွီး သူ့ အဖုတျထဲ စေးစေးပိုငျပိုငျ တိုးဝငျလာတော့ သူ့ ဘိုကျမှာ နဈ နအေောငျ အရသာ ရှိလှပွီး ၊ မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျးကွီး သူ့ အဖုတျထဲ မှ ဆှဲ ထုတျလိုကျ ခြိနျ ရငျထဲ မှာ ဟာကနဲ ဖွဈ သှားရ၏၊ မိုးအောငျသူက သူ့ ပေါငျ နူဈလုံးကို ပုခုံးပျေါထမျး တငျပွီး အားရ ပါးရ ဆောငျ့သညျ့ အခြိနျမှာတော့ သူ့ အဖုတျ အတှငျးသား နံရံ မြားမှာ မိုးအောငျသူ ဒဈကွီး ပှတျသတျမှု ကွောငျ့ ကာမ ဆိပျ ဒီရလေို တကျလာပွီး သူ့ဖငျကွီး ကို ပါ ကွှကွှ ကော့ပေးနမေိတော့သညျ။ မိုးအောငျသူ ကလညျး လူငယျ ပီပီ ဖနျးကနဲ ဖနျးကနဲ နအေောငျ ပဈဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဒျေါဝငျးပပ ခမြာ အငျ့ ကနဲ အငျးကနဲ နအေောငျ ခံစားနရေလသေညျ၊ အခုတော့ ဒျေါဝငျးပပ တယောကျ မကျြစကေို့ စုံမှိတျလြှကျ သူ့လကျနူဈဘကျက အိပျယာခငျးကို ဆုပျဆှဲ ကာ မိုးအောငျသူ ၏ အလိုး အဆောငျ့ကို အံကွိတျခံစားနလေသေညျ၊
မိုးအောငျသူကလညျး သူ့ လီးကွီး ကို ဒဈပျေါခါနီး ထိ ဆှဲ ထုတျထုတျပွီး မှ အားရ ပါးရ ဖငျကော့ ကာ ဆောငျ့ဆောငျ့ခသြဖွငျ့ ဒျေါဝငျးပပ အိပျခနျးထဲ တှငျ တဖနျးဖနျး တပွှတျပွှတျ အသံ မြားဖွငျ့ ညံစီ နပေတေော့သညျ၊ မိုးအောငျသူမှာ မကွာခငျ ပွီးတော့မယျ ဆိုတာ သိသျောလညျး ဒျေါဝငျးပပ ကို သူနူငျ့ ပိုပှငျ့လငျး စလေိုသဖွငျ့ ဆောငျ့လိုးနရော မှ ခနနားလိုကျပွီး ဒျေါဝငျးပပ မကျြနှာလေး ကို ငုံနမျးလိုကျကာ၊ …မမဝငျး..ပွီးတော့ မလား ကနြျောတို့ ပွိုငျတူပွီးကွရအောငျလေ… ဟုကပျပွောလိုကျရာ၊ မကျြစလေ့ေး မှိတျကာ ကွိတျခံနရှောသော ဒျေါဝငျးပပ က မကျြလုံး မဖှငျ့ ပဲ ခေါငျးလေး ငွိမျ့ ပွီး …အငျး…ဟုသာ ဆိုလသေညျ။ မိုးအောငျသူ က အားမလို အားမရ ဖွငျ့ ဒျေါဝငျးပပ နူတျခမျး အစုံ ကို ဆှဲ ငုံ စုပျပဈလိုကျ လရော ဒျေါဝငျးပပ ခမြာ အဖုတျထဲ မှာလညျး ဆနျ့တငနျ့ငနျ့ နူငျ့ အရှိနျတကျ နတေုနျး မို့ မိုးအောငျသူ လညျကုတျ ကို သူ့ လကျမြားဖွငျ့ ဆှဲယူသိုငျး ဖကျပွီး ပွငျးပွသော ရမကျ အနမျးမြားဖွငျ့ တုနျ့ပွနျလာ တော့သညျ။ ဒျေါဝငျးပပ ပေါငျတနျ နူဈခြောငျးကလညျး မိုးအောငျသူ ခါးကို ညှပျကာ သူ့ခွကေငျြးဝတျခွငျးခွငျး မိုးအောငျသူ ဖငျအနောကျဖကျကို ခြိတျလြှကျ သူ့ အဖုတျဆီ မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျးကွီး အဆုံးထိဝငျနိူငျအောငျ ဆှဲ ယူ နလေတေော့သညျ။
မိုးအောငျသူ ကိုယျတိုငျကလညျး မအောငျ့ နိူငျတော့ပဲ အပွီး သတျခါနိး တိုကျသညျ့ မုနျတိုငျး လို တဖုနျးဖုနျး ပဈဆောငျ့နမေိတော့သညျ။ ..ဖှတျ..ဖတျ..ဖှတျ..ဖတျ.. ….ဗွှတျ..ဗြိ..စှတျ..ဖတျ…… ….အား…အား…. အိ..အိ… ဒျေါဝငျးပပ ကိုယျလုံးတခုလုံးလညျး တောငျ့တငျး တုနျခါ သှားပွီး မိုးအောငျသူ ကို တငျးတငျးကွီး ဖကျထားလိုကျသလို၊ ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျအတှငျး နံရံမြားက လညျး လှုပျစိလှုပျစိ ဖွငျ့ မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျး တခြောငျး လုံးကို ဖဈြညှဈ ပေးသလို ဖွဈနတေော့ ၊ မိုးအောငျသူ လိငျတနျကွီး မှာ မခံနိူငျတော့ပဲ ပွှတျကနဲ ပွှတျကနဲ သုတျရညျမြား ဒျေါဝငျးပပ စောကျခေါငျး အတှငျးသို့ ပနျးထညျ့ ပဈ နမေိလတေော့သညျ။
ဒျေါဝငျးပပ မှာ သူ့ အဖုတျထဲ သုတျရညျပူပူ နှေးနှေး မြားပနျးထုတျလိုကျပွီး တဖွးဖွေး ပြော့ သှားသော မိုးအောငျသူ လီး ကွီးကွောငျ့ အဖုတျ အတှငျး မှ အရညျမြား စီး ထှကျလာရာ အိပျယာပျေါကြ ပွီး ကှကျကုနျ မှာ စိုး၍ ထမိနျကို လုံးထှေး ကာ အဖုတျ ပျေါ အုပျလြှကျ ရခြေိုးခနျးဆီသို့ ပွေးထှကျခဲ့လသေညျ။ မိုးအောငျသူ မှာ ရခြေိုးခနျး ထဲ ပွေးဝငျသှားသော ဒျေါဝငျးပပ နောကျပိုငျး အလှ ကို ကွညျ့ ရငျး ရငျတှငျး မှာ ပီတိ တမြိုး ခံစားလိုကျ ရလသေညျ၊ အရငျက ထမိနျဝတျထား သော ဤ ဖငျလုံးကွီး မြား ကို ကွညျ့လြှကျ အံကွိတျ ခဲ့ ရသူ၊ အခုတော့ ဖငျပွောငျပွောငျ ကို မွငျနရေခွပွေီ၊ တခြီ တောငျ လိုးပွီး သှားပွီ ဆိုတော့ နောငျ အလားအလာ မြားက လညျး ကောငျးမညျ့ သဘောရှိနသေဖွငျ့၊ မိုးအောငျသူ တယောကျ သူ့ ကံ ကို ပငျ သူ မယုံနိူငျအောငျ ဖွဈရသညျ။
ဒျေါဝငျးပပ ရူးပေါကျ ပွီး သူ့ အဖုတျလေးကို ဆပျပွာ သုံး ရဆေေး သနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျသညျ၊ ထမိနျ ကတော့ အရညျတှေ ပေ နပွေီမို့ အဝတျလြှျောမညျ့ ခွငျးထဲ ပဈထညျ့ လိုကျသညျ၊ နောကျတော့ အမှေးပှ တဘကျတထညျ ဘစေငျအောကျ ဘီရိုလေး မှ ထုတျကာ ခါးအောကျပိုငျး ကို ပတျလိုကျပွီး ရခြေိုးခနျးထဲ မှထှကျလာခဲ့လသေညျ။ ဒျေါဝငျးပပ ထှကျလာတာမွငျ ၍မိုးအောငျသူ ကရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျ ပွီး သူ့ ကောငျကွီး ကိုလညျး ဆပျပွာမှေးဖွငျ့ ဆေးကွောသနျ့စငျလိုကျသညျ။ မိုးအောငျသူ ရခြေိုးခနျး ထဲ မှ အိပျခနျး အတှငျး သို့ ပွနျဝငျလာတော့၊ အဝတျ ဘီဒိုရှေ့ မှာ ဝတျစရာ တခုခု ရှာနသေော ဒျေါဝငျးပပ ကိုတှလေို့ကျရလသေညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ အပျေါပိုငျး မှာ အငျးကြီခြှတျထားပွီး အသားရောငျ ဘရာဇီယာ ပြော့လေး ကို ဝတျထားပွီး အောကျပိုငျး မှာတော့ အမှေးပှ သဘကျကွီး ကို ပတျထား၏၊ မိုးအောငျသူ ထှကျလာတာ တှလေို့ လှမျးကွညျ့လိုကျတော့၊ မိုးအောငျသူ မှာ ပုဆိုး မဝတျရသေးသဖွငျ့ လောလော လတျလတျ ရေ ဆေး ထားသော မိုးအောငျသူ ၏ လိငျခြောငျးကွီး မှာ မပြော့ မ မာဖွဈနသေ ဖွငျ့ လမျးလြှောကျလိုကျတိုငျး နာရီ ခြိနျသီး ကဲ့သို့ ရမျးရမျး ရမျးရမျး ဖွဈနသေညျ ကို တှလေို့ကျရလသေညျ။
…ဟေ့…လုံခညျြ ဝတျတော့ တခါထဲ အရှကျ ကို မရှိဘူး…. …ဟီး..အမဝငျး ကလညျး ဘယျသူရှိ တာမှတျလို့…ကနြျောတို့ ခညျြးပဲ ဟာကို.. …အေးလေ ငါရှိနလေို့ ပေါ့ မကျြစထေဲ့ မှာ ကိုးယိုး ကားယားကွီး…. မိုးအောငျသူ က ပွုံးလိုကျပွီး အဝတျဘီဒိုရှေ့ ရပျနသေော ဒျေါဝငျးပပ နောကျသှားရပျလိုကျသညျ။ ဒျေါဝငျးပပ တို့ အဝတျဘီဒို မြာ ခတျေမှီ လှသော ကလော့ဆကျ ဖွဈပွီး တံခါးမှာ ဘေးတိုကျ ရှောတှနျးပိတျရသော မှနျတံခါး ဖွဈလသေညျ၊ မိုးအောငျသူ က ဒျေါဝငျးပပ အနောကျ မှာ ကပျရပျပွီး ဘီဒိုတံခါးကို ကွညျ့လိုကျတော့ မှနျသားပွငျပျေါမှာ သူတို့ နူဈယောကျ မကျြလုံးခငျြး ဆုံမိကွလသေညျ၊ မိုးအောငျသူ က မှနျသားပျေါမှာ မွငျနရေသညျ့ ဒျေါဝငျးပပ ၏ အသားရောငျဖြော့ဖြော့ ဘရာဇီယာက အောကျက လြှံထှကျတော့ မလို မို့မေါကျ ထှားဖှံ့ လှသညျ့ ရငျသားအစုံ ကို အနောကျဘကျမှ သိုငျးဘကျ ကာ သူ့ လကျဝါး နူဈဘကျဖွငျ့ အုပျကိုငျလိုကျမိသညျ။
…ဟေး.. ဒျေါဝငျးပပ က မကျြခုံးလေး ပငျ့ပွီး ပွုံးစစေ့ေ့ ဖွငျ့ တခကျြလှမျးတား သလို အသံပေးရငျး မိုးအောငျသူ့ လကျကောကျဝတျနူဈဘကျကို ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ၊ သို့ သျောလညျး မိုးအောငျသူ ၏ လကျဝါး နူဈဘကျကတော့ အားရ ပါးရ ဆုပျနှယျနပွေီ ဖွဈရာ ဒျေါဝငျးပပ ပါးစပျ မှ ငွီးသံလေး တခကျြထှကျလာ ခဲ့သညျ၊ ဖွခေထြားသဖွငျ့ ဒျေါဝငျးပပ ခါးလညျခနျ့ ရောကျနသေညျ့ နကျမှောငျထူထဲ သော ဆံပငျအုပျကို မိုးအောငျသူ က သူ့မေးဖွငျ့ အသာ ဖယျပွီး ဒျေါဝငျးပပ လညျတိုငျလေး ကို ငုံနမျးလိုကျသညျ၊ သူ့ဖဝါး အောကျမှာလညျး မာတောငျထလာသော ဒျေါဝငျးပပ နိူ့သီးခေါငျး နူဈလုံး ပို သတိထား မိလိုကျ သညျနူငျ့ သူ့လိငျတနျကွီး ကလညျး တဖွညျးဖွညျး မာတငျး လာခဲ့ ပွနျပါလသေညျ၊ မှနျထဲ မှာ ဒျေါဝငျးပပ မကျြလုံးလေး စငျးနတော တှရေ့တော့ မိုးအောငျသူက ဒျေါဝငျးပပ ဘရာဇီယာကို ဂြိတျဖွုတျ ပွီး ပုခုံးနူဈဘကျမှ ကွိုးပါဖွုတျ ပွီး ကွမျးပျေါ ပဈခလြိုကျသညျ၊
အိုး လှလိုကျတာ နညျးတဲ့ နိူ့ကွီးတှေ မဟုတျဘူး၊ ဟု မိုးအောငျသူ စိတျထဲ မှာဖွဈသှားရသညျ၊ အခုမှ လှတျလှတျ လပျလပျ နိူ့ကွီး နူဈလုံးကို အားရပါးရ ဆုပျနှယျရငျး မာတောငျနသေော နိူ့သီးခေါငျး လေး မြားကို လကျဖြားလေး မြားဖွငျ့ ကဈြလိမျ့လိုကျတော့ ၊ ဒျေါဝငျးပပ ကွောငျမလေး ငွီးသံ မြိုး ငွီးလာပွီး သူ့ ခေါငျးကို လညျပွနျလှညျ့ကာ မိုးအောငျသူ နူတျခမျးမြား ကို အငမျးမရ ပွနျနမျးလာခဲ့သညျ၊ မိုးအောငျသူ က သူ့လကျတဘကျဖွငျ့ ဒျေါဝငျးပပ ခါးမှာပတျထားသညျ့ သဘကျကို ဖွခေလြိုကျသညျ၊ လုံးဝနျး စှံကား ဖေါငျးအိလှသညျ့ ဒျေါဝငျးပပ ဖငျလုံးကွီး နူဈခု ၏ အထိအတှကေ့ က အေးစကျ အိတငျးနသေဖွငျ့ သူ့ လိငျတနျကွီး မှာ အရမျး ကို မာတငျး လာခဲ့ရသညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ အဖို့ မှာလညျး ပူနှေးမာတောငျနသေညျ့ မိုးအောငျသူ ၏ လိငျခြောငျးကွီး သူ့ဖငျကွားမှာ တိုးဝငျလာခဲ့သဖွငျ့ အိုကနဲ ပငျ ဖွဈသှားရပွီး သူ့ အဖုတျတှငျး မှ အခုန ကထဲက စိုထိုငျးထိုငျး စဖွဈနရောက အခုတော့ အရညျလေးပငျ စီးကြ ခငျြလာခဲ့ရလတေော့သညျ။
မိုးအောငျသူ က သူ့ကြောပွငျလေး ကိုတှနျးလိုကျတော့ အတှေ့ အကွုံ ရှိသော ဒျေါဝငျးပပ က သူ့ ဘီဒို မှနျတံခါးကို သူ့လကျနူဈဘကျဖွငျ့ လှမျးထောကျ ပွီး သူ့ ဖငျကွီး ကို ကော့ပေးလိုကျလသေညျ၊ မိုးအောငျသူက လညျး ဒျေါဝငျးပပ ၏ ကားစှငျ့နသေော ဖငျကွီး နူဈလုံးကွား အောကျမှ ဖေါငျးမို့မို့ စောကျဖုတျကွီး အ၀ ကို သူ့ လိငျခြောငျးကွီး ကို တေ့ ကာ ဖိသှငျးလိုကျလသေညျ။ …အား..ကြှတျဈ..ကြှတျဈ.. ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျကွီးထဲ မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျးကွီး ဆှိ ကနဲ ဝငျသှားတော့ ဒျေါဝငျးပပ ဆီ မှ ငွီးသံလေး ထှကျလာခဲ့သညျ၊ နာလို့ မဟုတျ အရသာရှိလှလှနျးလို့ပဲ ဖွဈသညျ၊ ငတျနတော ကွာပွီမို့လား၊ မိုးအောငျသူ က ဒျေါဝငျးပပ ခါးကငျြကငျြလေး ကိုကိုငျကာ တခကျြခငျြး အားပါပါဖွငျ့ ဆောငျ့လတေော့သညျ၊ သူ ကော့ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ရမျးခါနသေော နိူ့ကွီး မြားကို သူတို့ ရှေ့ မှနျသားပွငျပျေါ မှာ တှနေ့ရေလရော၊ သူ့အတှကျတော့ ဗီဒီယို လညျးကွညျ့ ကိုယျတိုငျလညျးလုပျရသညျ့ အရသာ တှနေ့ရေလတေော့သညျ၊ ..စှီ…ဖတျ..ဖတျ..ဖှတျ.ဖတျ…ဖတျ… ..အား…အား…အငျ့…အငျ့….မိုးအောငျသူ ဒီနေ့ အလုပျ ကို အစောကွီး ရောကျ နသေညျ၊ အရငျ အပတျက သူ့ ဘောစိ ဒျေါဝငျးပပ နူငျ့ ရမကျနယျ လှနျ ကြှံ သှားခဲ့ ရပွီး ၊ ဒါ ပထမ ဆုံး အကွိမျ ပွနျတှေ့ ရမှာမို့ အရမျး ပြျောနသေညျ။
သူ့ ကောငျကွီး ကလညျး အတှငျးခံ ဘောငျးဘီ အောကျ မှာ အတငျးတိုးထောငျထ နသေဖွငျ့ ကပျြ ပွီး နလေို့ထိုငျလို့ မကောငျးဖွဈနရေသညျ၊ ဟောလာပါပွီ မမဝငျး၊ လှလိုကျတာ မမဝငျးရယျ လို့ မိုးအောငျသူ စိတျထဲ ရရှေတျမိလသေညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ လို့သာ ချေါနကွေတာ ဝငျးပပ က အသကျ ၃၀ သာ ရှိသေးသညျ၊ အလုပျထဲ မှာ လူကွီး ပုံပေါကျ အောငျ ဒီဂရီ သိပျမရှိသော လိပျခှံကိုငျး မကျြမှနျတလကျ ကို တတျထားရာ မိုးအောငျသူ မကျြစထေဲ့ မှာတော့ မကျြမှနျကွျောငွာတှထေဲ က မျောဒယျ နဲ့ တောငျ တူသေးတယျ လို့ တှေးမိသညျ၊ ရုံးခနျး ထဲ ဝငျလာတော့ နူတျဆကျကွတဲ့ သူတှေ ကို စကားပွောရငျး သူ့ အခနျးရှိရာ သူလြှောကျလာရငျး လမျးမှာ မိုးအောငျသူ နဲ့ မကျြလုံးခငျြး ဆိုငျမိ ပွီး မကျြနှာလေး ရဲ ကနဲ ဖွဈသှား၏၊ ..ဂှတျမောနငျး အမဝငျး.. …အေးအေး ဂှတျမောနငျး မောငျမိုး… ဟု ဆို ပွီး သုတျသုတျ သုတျသုတျ နူငျ့ သူ့ အခနျးထဲ ဝငျသှားတော့သညျ။
ဝငျးပပ ပေါငျခှဆုံ မှာတော့ စိုတိုတို ဖွဈလာခဲ့သညျ၊ တကယျတော့ တနင်ျဂနှေ တရကျလုံး အိမျမှာ တယောကျထဲ နရေငျး အိမျမှာ ဟိုနေ့ က မိုးအောငျသူနဲ့ ဖွဈခဲ့တာ ပွနျစဉျးစားရငျး သူ့ အဖုတျလေး သူ ပှတျနခေဲ့ မိသညျ၊ ကိုတငျထှတျ ဆီ ဖုနျးဆကျတော့ ကိုတငျထှတျတို့ ဆီ မမေေ ရောကျနသေညျ၊ မမေေ က သူတို့ မွို့ မှာ နရေတာ ပငျြးလို့ တဲ့ ဖဖေေ့ ကို ထားခဲ့ ပွီး ကိုတငျထှတျ ရှိရာမွို့ လာလညျ နသေညျတဲ့၊ နကေောငျးလား ဘာညာမေးပွီး ဖုနျးခလြိုကျသညျ၊ ဝငျးပပ အဖုတျလေး ကတော့ ရှစိရှစိ နဲ့၊ အရှိနျရ နပွေီလေ၊ ဟိုနေ့ က မိုးအောငျသူ ၃ ခြီ ဆှဲ လိုကျတာ ဝငျးပပ တောငျ တျောတျောလေး နူံးသှားသညျ၊ ဒါတောငျ ကိုယျတျောခြော က နှပျပွီး နောကျတခြီ လုပျဖို့ ကွံနသေေးသညျ၊ အိမျက လူတှေ ရိပျမိကုနျမှာ စိုးလို့ နှငျလှတျလိုကျရသညျ၊ လူပြို လူငယျ ဆိုတော့ တခြိနျလုံး မာနသေလား မသိ၊ ဝငျးပပ တောငျ တျောပါပွီ ဖွဈသှားရသညျ၊ သို့သျောလညျး မိုးအောငျသူ ပွနျသှားပွီး ခနနတေော့ သူ့ အဖုတျ က ပွနျ တောငျးဆိုလာပွနျသညျ၊ နောကျနေ့ စနေ အလုပျမသှားတော့ အိမျမှာပဲ နားလိုကျသညျ၊ သူ့ အလုပျက တော့ နတေ့ဝကျ ဖှငျ့သဖွငျ့ မိုးအောငျသူ ရောကျနမေယျ ဆိုတာ သိသညျ၊
ဒါပမေဲ့ ဘာလို့ မှနျးမသိ ရငျမဆိုငျခငျြ သေးတာရယျ၊ သူ့အတှကျ အလုပျရှငျ အလုပျသမား ဆိုတဲ့ ဆကျဆံရေး ကို ဘယျလို ဆကျထိနျး ရ မလဲ ဆိုတာ လညျး မစဉျးစားတတျ ဘူး ဖွဈနတောရယျ ပါသညျ၊ ဝငျးပပ မှာ ဒါမြိုး အတှေ့ အကွုံလညျး မရှိ၊ တခါမှ လညျး မဖေါကျပွနျဖူး၊ ကိုယျ့ ယောကျကြား ကလှဲရငျ၊ ဒါ ပထမဆုံး တစိမျး ယောကျကြား တယောကျနဲ့ လိငျဆကျဆံ ဖူးတာ ပဲ၊ အငျးလေ ကိုယျ့ဘာသာ ခတျတညျတညျ နရေငျ ကောငျလေး မစ ရဲ လောကျပါဘူးလို့တှေးရငျ သူ့ စားပှဲ ပျေါက စာရှကျစာတမျးတှေ လှနျလှောရငျး အလုပျထဲ စိတျမွုပျ ဖို့ ကွိုးစားနေ လိုကျသညျ။ …အမဝငျး..ဒီမှာ အမဝငျးအတှကျ ကျောဖီ.. ခေါငျးငုံ့ အလုပျလုပျနသေော ဝငျးပပ တယောကျ မိုးအောငျသူ အသံကွားတော့ မော့ကွညျ့မိသညျ၊
ဆံပငျရှညျရှညျ၊ ဂုတျထောကျနူငျ့ မကျြနှာနုနု မိုးအောငျသူ ကို တှလေို့ကျရတော့ ရငျထဲ လှပျကနဲ ဖွဈ သှားသညျ၊ ဒီနူတျခမျး တှေ ပဲ ဟိုနေ့ က သူ့ နိူ့သီးခေါငျး တှေ ကို အငမျးမရ စို့ ခဲ့တာ၊ သူ့ အဖုတျ ကိုလညျး ယုယုယယ နမျးရူံ့ရကျပေးခဲ့တာ ၊ ဝငျးပပ မကျြနှာ ပနျးရောငျ တခကျြ ဖွနျးသှားသညျ၊ …အေးအေး ကြေးဇူးပါကှယျ မောငျမိုး… ဝငျးပပ က သူ့အလုပျစားပှဲ ကွီးကိုပတျကာ သူ့ သားရကေုလားထိုငျ ဘေးနားလာရပျပွီး ကျောဖီခှကျကို စားပျေါပျေါလာခြ ပေးသော မိုးအောငျသူ ကို တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျ၏၊ သူ့လညျခြောငျး မှာ နညျးနညျး ကပျသလို ဖွဈသှားသဖွငျ့ လညျး ဟငျးဟငျး ဆိုပွီး လညျခြောငျးတခကျြ ရှငျးလိုကျမိသညျ။
သူကျောဖီခှကျကို ယူပွီး တငုံ သောကျလိုကျခြိနျထိ မိုးအောငျသူ မလှုပျမရှားရပျနသေေးတာ တှလေို့ကျရ ၍ မေျာ့ကွညျ့လိုကျ မိသညျ၊ ..အမဝငျး နကေောငျးလား.. …အငျး ကောငျးပါတယျ..ဘာဖွဈလို့လဲ ..မောငျမိုးရော… ….အငျး ဟိုနေ့ က အမဝငျးဆီက ပွနျလာပွီးကတဲ ကနလေို့ မကောငျးတော့ဘူး.. …ဟငျ ဟုတျလား…ဘာဖွဈလို့လဲ… ….ဒီမှာလေ ကွညျ့ပါလား..တခြိနျလုံး အဲလိုဖွဈနလေို့… …အို…. ဒျေါဝငျးပပ အိုဖွဈလောကျစရာပါပဲ၊ မိုးအောငျသူ ပွနတောက သူ့ ပုဆိုးအောကျ က ထိုးထောငျထ နသေော ဒုတျကွီး၊ ဝငျးပပ အာတောငျ ခွောကျသှားရသညျ၊ သူ့ ပေါငျခှဆုံ မှ စိုစှတျစှတျ က အခု တော့ ပိုရှဲလာသလို ဖွဈသှားရသညျ၊ ..ဟဲ့ မောငျမိုး..လူတှေ မွငျကုနျမယျနျော.. ..အမဝငျး ..ကနြျော ဖိုငျ စတိုခနျးမှာ စာရှကျသှားရှာမယျနျော အမဝငျး ခနလေး လိုကျခဲ့ ငါးမိနဈ ပဲ နျော .. မိုးအောငျသူက ပွောပွောဆိုဆို လှညျ့ထှကျသှား၏၊ ဝငျးပပ ဘာပွောရမှနျးပငျ မသိကွောငျပွီးကနျြခဲ့သညျ။ သူတို့ ရုံးဖိုငျစတိုခနျးမှာ ကဉျြးကဉျြး ရှညျရှညျနူငျ့ စာကွညျ့တိုကျ လို ဖိုငျတှကေို စငျတှနေဲ့ တငျထားသညျ၊
တျောရုံလူတှေ ဝငျခှငျ့မပေး အမွဲ သော့ခတျထားလရှေိ့သညျ၊ သူတို့ မိနျးအော့ဖဈ၏ အပျေါထပျ အလှာမှာ ရှိတော့ လူလဈ လို့ တယောကျခငျြးဝငျလြှငျ အထဲ မှာ လူရှိနမှေနျးပငျ မသိရပေ၊ မိုးအောငျသူ အတှငျးဘကျ ဖိုငျစငျတှေ ကွားထဲ မှာ တယောကျထဲ စောငျ့ရငျး ရငျတထိတျထိတျဖွဈနရေသညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ လာမှ လာပါ့မလား၊ စောငျ့နရေသညျမှာ သူ့အတှကျ ကွာလှသညျဟုထငျမိလသေညျ၊ နာရီကို ကွညျ့တော့ ၁၀ မိနဈတောငျ မရှိသေး တံခါးသံ ခကျြကနဲ ကွားပွီး လူဝငျလာသံ ကွားမှ သူ့ ကောငျကွီးလညျး ဒိနျးကနဲ ပွနျထောငျ ထလာသညျ၊ …မောငျမိုး..ဘယျမှာလဲ.. မိုးအောငျသူက အတှငျး ထောငျ့နား မှာ ဆိုတော့ ဝငျးပပ မမွငျရခွေ၊ သူ အတှငျးဘကျ လြှောကျဝငျလာမှ မိုးအောငျသူ ၏ ရုတျတရကျ သိမျးကြူံး ပှဖေ့ကျခွငျးကို ခံလိုကျရသညျ၊ သူတို့ နူဈဦးသား ၏ မှတျသိပျလှသော အနမျးတှေ က နူဈဦး စလုံးကို သှေးတှေ ဆူဝေ လာစခေဲ့သညျ၊ မိုးအောငျသူ က သူ့ ပုဆိုးကို ကှငျးလုံခြှတျခလြိုကျ သဖွငျ့ မတျထောငျနသေော လိငျခြောငျးကွီး က ဝငျးပပ ဗိုကျသားလေး ကို သှားထောကျမိသညျ၊
မိုးအောငျသူ လကျဖဝါးတှေ က ဒျေါဝငျးပပ ၏ မို့မို့ဖေါငျးဖေါငျး ရငျအုံပျေါ ကို ရောကျသှားတော့ ဝငျးပပ က လှမျးဆုပျကိုငျ ဖမျးထားလိုကျသညျ၊ …မလုပျနဲ့ မောငျမိုး အငျးကြီတှေ ကွကေုနျမယျ.. မိုးအောငျသူက မခငျြ့မရဲ နူငျ့ ဒျေါဝငျးပပ ထမိနျကို ဖွခြှေတျတော့ ဒျေါဝငျးပပ မငွငျး ပါ အသာဖွေ ခြှတျလိုကျပွီး ဘေးနားက ကုလားထိုငျတလုံး နောကျမှီပျေါ လှမျးတငျလိုကျသညျ၊ ဖွောငျ့စငျးပွိး လုံးကဈြ လှပလှသညျ့ ဒျေါဝငျးပပ ပေါငျတနျတှေ က ဝငျးကနဲ ပျေါလာပွီး အသားရောငျ ပငျတီလေးက ပေါငျခှကွားမှာ စို ကပျနေ၏၊ မိုးအောငျသူက ဒျေါဝငျးပပ ပငျတီလေး ကို သားရကွေိုးမှ ကိုငျကာ ဆှဲခြှတျတော့လညျး မငွငျးရှာပါ၊ အိုး လှလိုကျတဲ့ စောကျဖုတျလေး၊ မိုးအောငျသူ မကျြလုံးရှမှေ့ာ အမှေးအမွှငျ မရှိ ဖှေးနု ဖေါငျးမို့ နသေျောလညျး ညိုတိုတို နူတျခမျးအဖတျလေး ဟ နပွေီး ပနျးရောငျရငျ့ရငျ့ အတှငျးသားလေး စိုတိုတို ကို တစှနျးတစတှေ့ နရေသညျ။
မိုအောငျသူက ဒျေါဝငျးပပ ရှမှေ့ာ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျ လိုကျသညျ။ ဒျေါဝငျးပပ ခွထေောကျတဖကျကို မ ပွီး ဘေးနားက ကုလားထိုငျပျေါတငျလိုကျကာ ကားသှားသော ဒျေါဝငျးပပ ပေါငျခှဆုံ ကွား သူ့မကျြနာကို အပျ လိုကျတော့သညျ။ မိုးအောငျသူ ၏ လြှာကွီး သှူုအဖုတျနူတျခမျး ကို စိုစိုစှတျစှတျနဲ့ နှေးကနဲလာ ထိတော့ ဒျေါဝငျးပပ တကိုယျလုံး နှေး ကနဲဖွဈ သှားပွီး အကွောတှတေောငျတောငျ့သလို ဖွဈသှားခဲ့ရသညျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို လဲပွိုမသှားအောငျ မိုးအောငျသူ ဆံပငျကို ဆှဲဆုပျကာ ကိုငျထိနျးထား လိုကျမိပွီး မကျြလုံးကို လညျးတငျးတငျး ကွီး ပိတျထားမိ လတေော့သညျ။ မိုးအောငျသူ ကတော့ သူ သှားရညျ တမွှားမွှား ကခြဲ့ ရသော ဝငျးပပ ဖငျလုံးကွီး မြား ကို လကျဝါး နူဈဖကျက ဆုပျနှယျပွီး သူ့ လြှာကွီး က ဒျေါဝငျးပပ အဖုတျ ဖေါငျးဖေါငျး ကွီး ကို အားရ ပါးရ တပွတျပွတျ ကုနျးရကျနမေိလတေော့သညျ၊ ဒျေါဝငျးပပ မှာလညျး မိုးအောငျသူ ဘာဂြာ အပေးကောငျးမှုကွောငျ့ မကွာခငျပဲ တှနျ့တကျကာ ကာမ အရသာ အထှတျအထိပျ သို့ ရောကျသှားရလသေညျ၊
ဝငျးပပ က မိုးအောငျသူ ကို အသာ ဆှဲထူရငျး …မောငျမိုး ဒီထဲ မှာ တို့ သိပျကွာလို့ မရဘူး နျော… …ဟုတျ..အမဝငျး..ဟို စားပှဲ ကို လကျထောကျပွီး ကုနျးပေးမလား ကနြျော အနောကျက လုပျလိုကျမယျ နျော.. ဒျေါဝငျးပပ စကား ဆကျမရှညျတော့ပါ၊ မိုးအောငျသူ ကို ကြောပေးပွီး စားပှဲခုံစှနျးလေး ကို လကျနူဈဘကျဖွငျ့ ထောကျကိုငျကာ သူ့ ဖငျ ကွီးကို အနောကျဖကျ ကော့ပေးလိုကျလသေညျ၊ သေးကငျြသော ခါးလေး အောကျမှ စှံကားတကျလာပွီး လုံးကဈြ ဝိုငျးစကျနသေော ဖငျဖှေးဖှေးကွီး က မိုးအောငျသူ့ မာနသေော လိငျခြောငျး ကွီး ကို မထိနျးနိူငျလောကျအောငျတဆတျဆတျ တုနျလာစခေဲ့သဖွငျ့ အခြိနျမဆိုငျးတော့ ပဲ ဝငျးပပ အနောကျ မှာ နရောယူ၊ ဝငျးပပ ပေါငျနူဈလုံးကွားမှ အဖုတျဖေါငျးဖေါငျး အ၀ မှ တကေ့ာ ဖိသှငျး လိုကျလတေော့သညျ။ …စှိ…စှတျ… ..အား…အငျး… နူဈယောကျစလုံး က အသံ ကယျြကယျြ မထှကျရဲ ကွသျောလညျး ကာမစညျးဇိမျ အရသာ ကောငျးလှသောကွောငျ့ တိုးတိုး လေး ညှီး ညူရငျး တကျညီလကျညီ လိုးနကွေရာ၊
အခနျးလေး တှငျးထဲ အရညျရှမျးနသေော အဖုတျကွီးထဲ လိငျခြောငျးကွီး ဝငျထှကျနသေံ၊ မိုးအောငျသူ ပေါငျခွံနူငျ့ ဒျေါဝငျးပပ ဖငျလုံးကွီး မြား ရိုကျခတျမိသံ တဖတျဖတျ တို့သာ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျကွီး ပျေါထှကျလာနလေတေော့သညျ။ ….အား ကောငျးလိုကျတာ အမဝငျးရယျ..အမ အဖုတျကွီး က အီစိမျ့နတောပဲ လိုးရတာ.. .အငျး…တို့ လညျး ကောငျးတာပါပဲ ကှယျ… နောကျဆုံး မိုးအောငျသူ က သူ့ လိငျခြောငျးကွီး ကို အဆုံးထိ ဖုနျးကနဲ ဆောငျ့ခလြိုကျပွီး ဒျေါဝငျးပပ စောကျခေါငျးထဲ သုတျရညျတှေ တထုတျထုတျ ပနျးထညျ့ ပဈလိုကျတော့သညျ။ ဝငျးပပ ရုံးရောကျ ခလြာတော့ မိုးအောငျသူ အံသွသှားသညျ၊ မနကေ့ ပွောတော့ ဒီနေ့ ကိုတငျထှတျကို သှားကွိုရမှာ မို့ မလာတော့ဘူးတဲ့၊ အခု တော့ ရုံး ထဲ ရောကျခလြာ လိုကျတာ အပါး လှလှခွလေား၊ ဒီနေ့ အပွာရောငျ မငျးသမီးလေး ပါလား၊
အပျေါက မိုးပွာရောငျ ဗွောငျ ကို လကျပွတျမကြ လကျစကလောကျလညျး မရှညျ ခတျေဟောငျးတုနျးက စတိုငျမြိုးကို ခတျေဆနျဆနျပွနျ ပွငျထားတဲ့ ရငျစိ၊ ကျောလာထောငျလေးနဲ့ ခါးတို အောကျက ထမိနျအထကျဆငျ ဖုံးရုံလေး၊ အောကျကတော့ အပွာခံမှာ ကနျလနျ့ဖွတျ လှိုငျးတှနျ့ အလုံးကွီးတှေ ပုံစံ အခြိတျ ထမိနျ နဲ့ အဲဒီ လှိုငျးကွီး က ဒူးဆဈ လောကျမှာပဲ ပတျတယျ ရှမျးထမိနျတှေ လိုမြိုး၊ ဆိုတော့ တငျသားနရော မှာက အပွာဗွောငျလေး ပဲ၊ ဖွဈနတေယျ၊ ခါးမှာတငျးတငျးလေး ပတျဝတျထားတဲ့ ထမိနျ ကွောငျ့ စှငျ့ကား လုံးကဈြနတေဲ့ တငျသားတှကေ ထငျးထငျးကွီးဖွဈနေ တယျ၊ မိုးအောငျသူ မနကေ့ တနေ့ လုံး စိတျတိုငျးကြ လုပျပွီးတာတောငျ သူညီတျောမောငျက ခကျြခငျြးခေါငျးထောငျထ လာတယျ။
အမဝငျး ဒီနေ့ မလာတော့ဘူးမှတျလို့..ဆရာ့ လယောဉျက ဘယျအခြိနျဆိုကျမှာလဲ… …နလေ့ညျမှလေ အဲဒါကွောငျ့ အိမျမှလညျး နရေမှာ ပငျြး..ဒီမှာလညျးလုပျစရာလေး တှေ ရှိ လို့ ထှကျလာတာ.. ဝငျးပပ သူ့ အခနျးထဲ ဝငျသှားပွီး လုပျစရာရှိတာတှေ လုပျနတေော့သညျ၊ မိုးအောငျသူ မှာသာ ငေါငျတောငျတောငျ ဖွဈ နပွေီး ၊ တကယျလို့ ကိုတငျထှတျ ပွနျရောကျလာ လြှငျ သူ ဘယျလို နရေ ထိုငျရ မလညျး ဆိုတာကို စဉျးစား ဦးနှောကျစားနလေသေညျ။ …ဟေး မောငျမိုး ဒီဖိုငျ ထဲ မှာ လိုနတေဲ့ အငျဗှိုကျတှေ ရှာပွီး ဖွညျ့လိုကျအုနျး.. ရုတျတရကျ သူ့ စားပှဲရှရေ့ောကျလာပွီး ပွောလိုကျတဲ့ ဒျေါဝငျးပပ အသံကွောငျ့ မိုးအောငျသူ ရုတျတရကျ လနျ့သှားပွီး အတှေးပကျြသှား၏၊ ရုတျတရကျ မကျြနှာပကျြသှားသော ၊ဆပျကနဲ တုနျသှားသော၊ မိုးအောငျသူ ကိုကွညျ့ပွီး ဒျေါဝငျးပပ လညျး တမြိုးကွီး ခံစားလိုကျရသညျ၊
..မောငျမိုး နကေောငျးရဲ့လား… …ကောငျးပါတယျ အမဝငျး ..ဖိုငျ တှေ ဆိုမှ ကနြျော တခု ပွစရာရှိသေးတယျ အဲဒါ အရေးကွီးမယျ ထငျတယျ ဟို ဖိုငျအခနျးထဲမှာ..ခနလောကျ လိုကျကွညျ့ပါအုနျး.. မိုးအောငျသူက ပွောပွောဆိုဆို ထထှကျသှားလိုကျ၏၊ ဝငျးပပ တယောကျ ခြီတုံခတြုံ ဖွဈကနျြခဲ့သညျ၊ သူတို့ မိုးအောငျသူ သူငယျခငျြး ဆီက ဘိ ရပွီးကတဲက ထိုဖိုငျခနျးလေး ကို လုံးဝ မသှားကွတော့ အန်တာရယျ အလှနျမြား ၍ ဖွဈသညျ၊ အခု တော့ မိုးအောငျသူ တခုခု ပွောခွငျလို့ထငျသညျ၊ ဟု တှေးကာ ဒျေါဝငျးပပ လိုကျသှားလိုကျလသေညျ၊ ဝငျးပပ အခနျးထဲ ဝငျလိုကျသညျနူငျ့ မိုးအောငျသူက အခနျးတံခါးကို ဂကျြခလြိုကျပွီး ဒျေါဝငျးပပ ကို အတငျး ပှဖေ့ကျကာ အသညျးအသနျ နမျးပဈလိုကျသညျ၊ ဝငျးပပ က အတငျးတှနျးထားပွီး၊ …မိုးလေး..မနေ့ က ပဲ ကိုယျတို့ သဘောတူခကျြရပွီးပွီလေ အနအေထိုငျ ဆငျခွငျပါမယျ ဆိုတာ..
..အငျးလေ အမဝငျးရယျ..ကိုတငျထှတျ လာရငျ လို့ပွောထားတာလေ ကိုတငျထှတျမှ မရောကျသေးပဲဟာ.. …မိုးလေးက ရဈပွီကှာ..ကိုယျ ဒီကနေ သှားကွိုမှာ အဝတျအစားတှေ ကွလေို့ မရဘူးလေ.. …အငျးပါ အမဝငျးရယျ အမဝငျးက အရမျးလှလှနျးတော့ ကနြေျာ့ကောငျကွီးပေါကျကှဲတော့မယျဗြ ဒီမှာကွညျ့.. ပွောပွောဆိုဆိုနှငျ့ မိုးအောငျသူ က သူ့လုံခွညျကို ကှငျးလုံးပုံခြှတျလိုကျပွီး အတှငျးခံကို ပေါငျလညျဆှဲခလြိုကျသညျ၊ သူ့ ဖှားဘကျတျော လိငျတနျကွီး က ထောငျကနဲ ထှကျလာသညျ၊ အကွောပွိုငျးပွိုငျး နှငျ့ ဖေါငျးကား တငျးမာနသေော လိငျခြောငျးကွီးက တလုံးထဲသော မကျြစဖွေ့ငျ့ ဝငျးပပ ကို ကွညျ့နေ၏၊ ..ကဲ ဒါဆိုလဲ လာ မမ စုပျပေး မယျ မွနျမွနျလေး စိတျလြှော့လိုကျနျော မထိနျးထားနဲ့ … ဝငျးပပ က ပွောပွော ဆိုဆို မိုးအောငျသူ ကို လိငျတနျကွီး မှ ဆှဲ ဆုပျကိုငျ ချေါသှားပွီး အခနျးထောငျ့က စက်ကူ ပုံးပျေါထိုငျခလြိုကျသညျ၊
မိုးအောငျသူ မတျတပျရပျလြှကျ ဝငျးပပ အထိုငျ ၊ မိုးအောငျသူ လိငျခြောငျးကွီးနဲ့ ဝငျးပပ ပါးစပျပေါကျနဲ့ က တညျ့နပေတေော့ရာ၊ ဝငျးပပ က ထုံစံအတိုငျး ပုလှေ ပညာပွကာ မိုးအောငျသူ လီးကွီး ကို စစုပျလတေော့သညျ၊ လီးကွီး သူ့ပါးစပျထဲ ရောကျလာသညျ နှငျ့ ဒျေါဝငျးပပ တယောကျ အပွငျလောက ကို မလေ့ပွေီ ၊ သူကိုယျတိုငျလညျး ဖီးတှေ တကျလာပွီး အားတကျသရော စုပျသလို သူ့ အဖုတျတှငျးကလညျး အရညျကွညျ စိမျ့ ထှကျကလြာပွီ၊ ဆယျမိနဈမြှ စုပျပေးသျောလညျး မိုးအောငျသူ တယောကျ ပွီးမဲ့ ပုံမမွငျ၊ ဘယျပွီးမလဲ မနေ့ က တနကေုနျ တနခေနျး ဆျောထားတာ ဆိုတော့ တခြီပွီးဖို့ တျောတျောကွာနတောပေါ့၊ ဒျေါဝငျးပပ လညျး မထူးတော့ ဟု စိတျဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
မိုးအောငျသူ လီးကွီးကို သူ့ပါးစပျမှ ပွှတျ ကနဲနအေောငျ ဆှဲထုတျပွီး မတျတတျရပျလိုကျသညျ၊ ..ကဲ မိုးလေး လာလာ ငါ့အဝတျအစားတှေ မကအြေောငျလုပျနျော … ဒျေါဝငျးပပ သူ့ ထမိနျကို ကှငျးလုံးခြှတျပွီး ကုလားထိုငျနောကျမှီမှာ ခေါကျတငျလိုကျသညျ၊ နောကျ သူ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ခွကေငျြးဝတျထိ ဆှဲခကြာ ခွထေောကျတဘကျကို မထုတျလိုကျသညျ၊ နောကျတော့ စားပှဲခုံကို လကျနူဈဘကျဖွငျ့ထောကျကိုငျကာ ဖငျကို နောကျသို့ ကော့ပေးလိုကျသညျ၊ မိုးအောငျသူ တယောကျ ကမနျးကတနျး ပငျ ဒျေါဝငျးပပ အနောကျမှာ နရောယူ ပွီး သူ့ လီးကွီးကို သူလကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျကာ ဒျေါဝငျးပပ ပေါငျနူဈလုံးကွားမှ အနောကျသို့ ပွူနဟေနျရှိသညျ့ နူဈခမျးထူထူ အဖုတျကွီး အဝတှငျ တလေို့ကျလသေညျ၊ နောကျတော့ ဖွေးဖွေးခငျြး ဇိမျခံသှငျး ရာမှ အရှိနျတကျလာတော့သညျ၊ နောကျတော့လညျး ဒျေါဝငျးပပ ဖငျလုံးမြားနှငျ့ မိုးအောငျသူ ပေါငျခွံတို့ တဖတျဖတျ ရိုကျသံ မြားနဲ့ အတူ အသကျရူသံတှလေညျး မွနျလာကွသညျ။
မကွာခငျ အတှငျးမှာပငျ တယောကျနှငျ့တယောကျ အထာသိနကွေပွီ ဖွဈသော သူနှဈဦးတို့ ပွိုငျတူ ကာမ အရသာ အထှတျ အထိပျ သို့ ရောကျရှိသှားကွလတေော့သညျ။အခဈြ ကွညျ့စမျး မတှရေ့တာ ကွာ လို့ ပိုမိုကျလာတော့တာပဲ.. …အငျး ပါ တှမှေ့ ခြှဲပွီ တခါထဲ အဝေး မှာတုနျးကတော့ ဖုနျးကို တပတျတခါ အနိူငျနိူငျ ဆကျပွီးတော့.. ကိုတငျထှတျက ဝငျးပပ ကိုယျလုံးလေး ကို ထှေးဖကျပွီး နူတျခမျးအစုံကို ဖမျးစုပျလိုကျသညျ၊ မတှရေ့တာ ကွာနပွေီ ဖွဈသော မယားခြော လေးမို့ ကိုတငျထှတျ ပစ်စညျးကွီးက မာတာတာ ဖွဈလာပွီး ဝငျးပပ ပေါငျ ရှပေို့ငျး ကို သှားထောကျမိလသေညျ၊ ဝငျးပပ စိတျထဲ ကိုယျ့ကို ကိုယျ မလုံ မလဲ တော့နညျးနညျး ဖွဈသှားသညျ၊ အခုန နာရီပိုငျးလေး က မှ မိမိ နူတျခမျးတှေ က မိုးအောငျသူ လီးကွီး ကို စုပျခဲ့သေးသညျ၊ ပွီးတော့ မိုးအောငျသူ က လညျး လိုးလိုကျသေးသညျ၊
မိုးအောငျသူ က တျောတျော နဲ့ မပွီးနိူငျလို့ လဆေိပျ ထှကျဖို့ အခြိနျကပျသှားခဲ့ရသညျ၊ ပလုပျကငျြးဖို့ အဖုတျဆေး ဖို့ အခြိနျမရတော့၊ မိမိ အဖုတျကို တဈရူး ဖွငျ့ သုတျကာ သနျ့စငျခဲ့သျောလညျး မိုးအောငျသူ သုတျရညျတှကေ အတှငျးထဲ မှာကနျြနသေေးသညျ၊ သူ လဆေိပျကို ကမနျးကတနျးမောငျးလာတော့သူ့ အဖုတျတှငျးက တစိမျ့စိမျ့ ပွနျထှကျလာသဖွငျ့ သူ့ ပငျတီ မှာ စိုစိုစှတျစှတျ ဖွဈနရေသေးသညျ၊ လဆေိပျရောကျတော့လညျး သူအတှငျးဝငျလို့ ရအောငျ လုပျပေးမညျ့ အဆကျအသှယျကို လိုကျရှာရ နောကျ လယောဉျ ကလညျး ဆိုကျလာပွီ ဆိုတော့ အခြိနျမရတော့ခွေ။
ကိုတငျထှတျ နူငျ့ ဝငျးပပ အခနျးတှငျး ရောကျသညျနှငျ့ ကိုတငျထှတျ က ကွမျးတော့သညျ၊ ဝငျးပပ လညျး လငျတျော မောငျ ဆိုတော့ မငွငျးဖယျနိူငျ၊ ကိုတငျထှတျ အကိုငျ အတှယျ အပှတျအသပျမြား ဖွငျ့ ဆန်ဒရမကျ တှေ ပွနျလညျ နိူးထ လာရသညျ၊ ကိုတငျထှတျ သူ့အတှငျးခံကို ဆှဲခြှတျတော့ မှ ဝငျးပပ သတိရသညျ၊ ဒုက်ခ ပဲ ငါ ဆေးဖို့ မသှေ့ားပွီ၊ သူမြားသိသှားမလား၊ ရငျ ထဲ မှာ တထိတျထိတျ နှငျ့၊ …အငျး အခဈြ လညျး ကို့ ကို စောငျ့နရေတာ ကွာနပွေီ ထငျတယျ ဟငျးဟငျး..အခဈြ အရညျ ဒီလောကျရှဲ တာ တခါမှ တောငျ မတှဘေူ့းသလိုပဲ .. ….အို..ကိုကလညျး… ကိုတငျထှတျ က အားရဝမျးသာ စှာဖွငျ့ သူ့ လိငျခြောငျးကွီး ကို စှပျကနဲ ဝငျးပပ အဖုတျဝ တှငျတကေ့ာ စသှငျးကထဲက အားကုနျ ဆောငျ့လတေော့သညျ၊ ဝငျးပပ မှာလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ နာရီပိုငျးလေး ကမှ မိုးအောငျသူ လီးကွီး ဝငျထှကျသှားခဲ့သော သူ့ အဖုတျတှငျးသို့ ကိုတငျထှတျလီး ကွီး ဝငျထှကျလာခဲ့ သညျမှာ စိတျထဲ တမြိုး ဖွဈသျောလညျး သူ့ စိတျတှကေ ပိုမို တကျကွှ သလို ဖွဈနခေဲ့ရလသေညျ၊
ထိုအတှကျ ကွောငျ့လညျး သူ့ကိုယျတိုငျက ကိုတငျထှတျ ကိုယျကွီး ကို တအားဖကျတှယျလြှကျ သူ့ ဖငျကွီးကို ကော့ကာကော့ကာ အားရ ပါးရ တုနျ့ပွနျ နမေိလတေော့သညျ၊ ကိုတငျထှတျမှာ ယောက်ခမ ကွီးထကျစာလြှငျ ပိုမိုကဈြလဈ ကာ နုပြို တောငျ့တငျး သော ကိုယျခန်ဓာ ပိုငျရှငျ ဇနီးခြောလေး ကို မလုပျရတာ ကွာပွီ မို့ စိတျအရမျး တကျကွှနရော မြား မကွာခငျမှာပငျ၊ သုတျရညျမြား ပနျးထှကျပွီး တခြီပွီးသှားရလသေညျ၊ ဝငျးပပ မှာလညျး သူ့ စောကျခေါငျးတှငျးထဲ မှာ ယောကျကြား နူဈယောကျ ၏ သုတျရညျတှေ ရောနှော သှားပွီး သူ့ အဖုတျတှငျးမှ ပငျ လြှံကလြာကာ ဖငျကွားသို့ စီးဝငျသှားတာ ခံစားသိနရေ လရော မကွုံစဖူး အတှေ့ အကွုံကွောငျ့ အကွောလေး တှေ တဆတျဆတျတုနျကာ ကာမ အရသာ အထှတျအထိပျ ရောကျသှားရ လတေော့သညျ။ဝငျးပပ တယောကျ လညျး စိတျရှုတျထှေးနရေသညျ ဘာမှနျး တော့ မသိ၊
ကိုတငျထှတျ ပွနျရောကျ တော့ သူ့ငယျခဈြ လညျး ဖွဈ လငျလညျး ဖွဈသူ နူငျ့ အတူတူ ပွနျနလေိုကျရ လြှငျ မိမိ ဘ၀ ပုံမှနျ ပွနျဖွဈသှား လိမျ့မညျ ဟု ထငျထားခဲ့သျောလညျး တကယျ တမျးကွ တော့ ထငျသလို မဖွဈ နိူငျတော့မှနျး တဖွေးဖွေး ရိပျမိလာခဲ့ ရသညျ၊ ကိုတငျထှတျ နူငျ့ သူ ခှဲနရေတာ ကွာ လို့ ညတိုငျး လိုလို အလုပျဖွဈခဲ့ကွသညျ၊ သူ ကလညျး မိုးအောငျသူ နှငျ့ အတှေ့ အကွုံအသဈမြား ရလာခဲ့ သလို၊ ကိုတငျထှတျ ကလညျး ဒျေါဒျေါလှ ဆီ က အတှအေ့ကွုံ မြား ရခဲ့တာကို တော့ သူ သတိမထားမိ၊ ည ဘကျ ကို တငျထှတျ နဲ့ ကောငျးကောငျး အလိုးခံ ခဲ့ရပွီး အလုပျရောကျ လာတော့ မိုးအောငျသူ နှငျ့ မကျြနှာခငျြး ဆိုငျ စစေ့ေ့ မကွညျ့ရဲ မကျြနှာပူ သလို ဖွဈ နရေသညျ၊ မိုးအောငျသူ ၏ မကျြလုံး မကျြနှာထား တှကေ ကွကှေဲ ဆှေးမွနေ့ေ သလိုလို ၊ နှမွောနေ သလိုလို ဖွဈနသေညျဟု ဝငျးပပ စိတျထဲ မှာ ထငျနေ ခဲ့သညျ၊
တကယျက မိုးအောငျသူ နှငျ့ သူ က ကို တငျထှတျ အပျေါ ဖေါကျပွနျ ခဲ့ သျောလညျး၊ အခု ဝငျးပပ စိတျထဲ မှာတော့ သူ မိုးအောငျသူ အပျေါမှာ သစ်စာဖေါကျမိ နသေလို ခံစားနရေ၏၊ ဝငျးပပ နှငျ့ ကိုတငျထှတျက လညျး ရုံးကို အတူတူ လာနကွေတာမို့ မိုးအောငျသူ အတှကျ က လညျး အနားကပျ ဖို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိူငျတော့ခွေ၊ ထို့ အပွငျ မိုးအောငျသူ ကို လညျး အလုပျမှာ စိတျခြ အားကိုးရပွီမို့ ကိုတငျထှတျ လုပျခဲ့သညျ့ မွို့ ကို လှတျ ဖို့ အစီအစဉျ ပငျ လုပျနပွေီ ဖွဈလသေညျ၊ မိုးအောငျသူ က လညျး ဒီအတိုငျး ရုံးမှာ စိတျဆငျးရဲ နရေမညျ့ အတူတူ စိတျပွလေကျပြောကျ နယျ ကို သှားတာက ပိုကောငျးမညျ ဟုတှေးကာ အမွနျ ဆုံးသှားနိူငျအောငျ ပွငျဆငျတော့သညျ၊ မိုးအောငျသူ နယျ မသှားခငျ အမဝငျး နဲ့ တရကျလောကျ အားရအောငျ ခဈြပါရစေ လို့ တောငျး ဆိုလာပွနျတော့ နဂိုလျထဲ က မှ စိတျယိုငျနသေညျ့ ဝငျးပပ တယောကျ သူကွိုးစား ကွညျ့မယျ လို့ ပွောလိုကျရလသေညျ။
မိုးအောငျသူ နယျမသှားခငျ တရကျ ဝငျးပပ က သူ့ သူငယျခငျြး တယောကျကို အကူညီတောငျး ပွီး ကိုတငျထှတျ ကို လိမျခိုငျးရလသေညျ၊ သူတို့ ငယျသူငယျခငျြး တှေ မဆုံရတာ ကွာလို့ ဟု အကွောငျးပွ ပွီး မိုးအောငျသူ နှငျ့ သူ အခဈြစခနျး ဖှငျ့ လရှေိ့သညျ့ ဘိ လေး ကို ရောကျလာခဲ့ရလတေော့သညျ၊ မိုးအောငျသူ နှငျ့ ဝငျးပပ မှာ အခနျးထဲ ရောကျတာနှငျ့၊ ခနတာ ဝေးနကွေရတာကို ပငျ တနှဈတာလောကျ ထငျနကွေ သူမြား ဖွဈနကွေရာ မီးတောကျလုမတတျ အနမျးတှေ ဖွငျ့ နမျးစုပျ ပှဖေ့ကျ မိကွလသေညျ၊ ဝငျးပပ မှာ ကိုတငျထှတျ နှငျ့ ညတိုငျး လုပျဖွဈနကွေသဖွငျ့ မထောငျးသာသျောလညျး မိုးအောငျသူ တယောကျမှာ ကား နတေို့ငျး သူလုပျနကြေ ဘော့ဈမမ ကို ရုံးမှာ မွငျသာ မွငျရ မကွငျရ ဖွဈနရှောသညျမှာ ကွာပွီ ဖွဈရာ မအောငျ့အီးထားနိူငျတော့၊ ထမိနျ အတငျး ဆှဲခြှတျကာ ဖွူဖွူ ဖှေးဖှေး ပေါငျနှဈလုံးကို ဖွဲကာ အဖုတျဖေါငျးဖေါငျး ကို ကုနျးရကျ တော့သညျ၊
နောကျတော့လညျး လူပြို ရိုငျး ပီပီ အားအငျ အပွညျ့နှငျ့၊ တနျအောငျ ဆိုပွီး ထပျသောကျလာခဲ့တဲ့ အားဆေးတှနေဲ့ ဆိုတော့ ဝငျးပပ တယောကျ ကိုတငျထှတျ တလလောကျ လိုးသလောကျ ကို ခံရလသေညျ၊ နောကျ ဆုံး အနနှေငျ့ သူတောငျးဆိုထားသော ဝငျးပပ ၏ ဖငျပေါကျ လေးကို ပါ ခှငျ့ပွုခကျြရ သဖွငျ့ ခရပေနျးဦး ဆှတျခူးလိုကျရလေ သညျ၊ ခရပေနျးကို တော့ သူ သခွော လလေ့ာထားသလို အရမျး မလုပျပါ၊ အသငျ့ယူလာသော ကဝေိုငျ ဂယျြ နှငျ့ အပေါကျ သခွော ခြောဆီလကျနှငျ့ ထိုးပေး၊ ပွီး အဆငျပွလောမှ ကှနျဒနျ စှတျထားသော သူ့ လီး ကွီး ကို ဖွေးဖွေးခငျြး ထညျ့ လသေညျ၊ ဝငျးပပ ၏ လှပ အခြိုးပွပေဈလှသော ဂဈတာရှိတျ ကိုယျလုံး ကွောငျ့ စှံကားနသေညျ့ တငျသား လုံးကွီး တှကေို လကျ ဝါး နှဈဖကျဖွငျ့ တဘကျတခကျြ ဆုပျနှယျကာ စကျဝိုငျးပုံ လိမျ့ပေးနရေငျးက ဝငျးပပ ခရပှေငျ့လေးထဲ သူ့လိငျခြောငျး ကွီး တဖွေးဖွေး ဝငျသှားတာ ကွညျ့ရတာ အရသာရှိနရေုံ တငျ မက ခရပှေငျ့လေး ၏ တငျးကပျြစှာ ညှဈထားပေးမှုကွောငျ့ ကွာကွာ ထိနျးမထားနှိငျတော့ပဲ ခနလေး ဖွငျ့ သူ့ကှနျဒနျ ထဲ သုတျရညျတှေ ပနျးထှကျပွီး ပွီးသှားခဲ့ရလသေညျ၊
ဝငျးပပ ခမြာလညျး ပထမ ဆုံးအကွိမျ ဖငျခံဖူးတာမို့ နညျးနညျး တောာ့ ကြိမျးစပျစပျ နှငျ့ အခံရခကျခဲ့လသေညျ၊ သို့သျောလညျး မိုးအောငျသူ ကို သနားသော စိတျ ဖွငျ့ ဒါ နောကျဆုံးပဲ လေ ဟူသော အသိဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ သူကိုယျတိုငျက လညျး ဖငျအလိုးခံရတာ ဘယျလိုနေ မလဲ သိခငျြစိတျ အငုံ့လေး ကွောငျ့လညျးကောငျး ခံဖွဈသှားခွငျးသာ ဖွဈလသေညျ၊ ကဝေိုငျဂယျြ မြားကွောငျ့လညျးကောငျး မိုးအောငျသူ ၏ ညှာတာ ကွငျနာမှုကွောငျ့ လညျးကောငျး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သူထငျသလောကျတော့ မဆိုးဟု တှေးနမေိပါသညျ၊ မိုးအောငျသူက ခှဲခါနီး ဝငျးပပ နှုတျခမျးလေး ကို အားရပါးရ စုပျနမျးရငျး …မမ ကို အရမျးခဈြတယျ ဗြာ…ကနြျော တို့ တှတေ့ာ နောကျကသြှားတယျနျော… …မမ လညျး မိုးလေး ကို ခဈြပါတယျကှယျ..ဒါပမေဲ့ ဘ၀ ကို လကျတှေ့ ကကြ မွငျပွီး ဖွဈသငျ့တဲ့ အမှနျတရားကိုတော့ တို့တှေ လကျခံကွ ရမှာပေါ့နျော… ….မ မ နောကျ တကယျလို့ အခှငျ့ရ မယျ ဆိုရငျရော ကနြေျာ့ ကို အခု လို ခဈြခှငျ့ပေး မလားဟငျ… ဝငျးပပ တယောကျ မိုးအောငျသူ မကျြနှာကို ပွုံးပွုံးလေး ကွညျ့ရငျး ခေါငျးလေး ညိမျ့ပွလိုကျမိလတေောသညျ..ပွီး။
မိုးအောင်သူ မှာ မကြာသေးမှီက မှ သချာင်္ အဓိက နူင့် ကျောင်းပြီး ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဘာလုပ်စားရမည်မှန်း မသိ၊ နဂိုလ် ထဲက သူ့ အကို ကိုမောင်ဟန် တို့ လို စာလည်း မတော်၊ ရသည့်အမှတ်နဲ့ ရရာ မေဂျာ ယူ လိုက်ရတော့ ဘာမှန်း မသိသည့် သချာင်္ အဓိက နူင့် ကျောင်းပြီး ခဲ့သည်၊ ကျောင်းတက်တုန်းက လည်း ဟေးလားဝါးလားနူင့် အချိန်ကုန်ခဲ့ ရသည်၊ အခု ကျောင်းလည်း ပြီးရော အဖေက အစိုးရဝန်ထမ်း ရုံးစာရေး လောက် အဆင့်က နေ အငြိမ်းစားယူ၊ အမေက နဂိုလ်ထဲက ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဖူးဘူး၊ အဖေ တယောက်လုပ်စာနူင့်၊ သူတို့ မိသားစု အလျှင်မှီ အောင်စားသောက် နေရသည်၊ သူ့အကို မောင်ဟန်က စာတော်သည်၊ အာအိုင်တီ ရောက်သွားသည်၊ သူ့ အဖေ ညီ ဦးလေး တော်သူ က ထောက်ပန့် ပေးရှာလို့သာ မောင်ဟန် ကျောင်းတက် နိူင်သည်၊ အခု သူ့ အဖေလည်း အငြိမ်းစား၊ သိတဲ့ အတိုင်း လစာက ဘာမှ ကို ပြောပလောက်စရာ မရှိ၊ မောင်ဟန်က အလုပ်ထဲ ရောက်နေ တော့ ဝင်ငွေလေး ရှိလာလို့ တော်တော့သည်၊ သူလည်း ကျောင်းပြီးတော့ ယောင်ခြာခြာ မဖြစ်ခင် မောင်ဟန်က သူ့ အထက်အရာရှိ ဒေါ်မျိုးမမ ၏ ညီမ ဒေါ်ဝင်းပပ အလုပ်မှာ ခေါ်ခိုင်းဖို့ သွင်းပေးထားလိုက်၏၊
ပထမ ကတော့ မောင်ဟန့် မျက်နှာနူင့် မို့ တိုလီမှုတ်စ ခိုင်းရုံသာ ရည်ရွယ်ပြီး ခေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ လုပ်ရည် ကိုင်ရည်လေး ရှိ၊ ကျိုးကျိုးနွံနွံ လည်း ရှိတော့၊ အခု ကိုတင်ထွတ်သွား နေရသော ဒေသ ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမျိုး လုပ်ခိုင်း လျှင်ရမည့် အခြေအနေရှိတော့၊ ဒေါ်ဝင်းပပ က စပြီး သင်ပေးလာ၏၊ အဆင်ပြေလို့ မျက်နှာလွဲ ရလျှင်၊ ကိုတင်ထွတ် ကို ရုံးချူပ် ပြန်ခေါ်ထားပြီး မိုး အောင်သူ ကို အစား လွတ် ဖို့ ရည်ရွယ်ထားလေသည်။ ထိုကဲ့ သို့ အနီးကပ် အလုပ်အတူတူ လုပ် နေရတော့ လူပျို လူလွတ် မိုးအောင်သူ တယောက် စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်လာ၏၊
မဖေါက်ပြန်ပဲ လည်း ခံနိူင်မလား၊ ရုပ်ရည်ကလည်း ချောမော၊ဘော်ဒီကလည်း မယ်ဘွဲ့ ရဘူးသူ အမေနူင့် အပြိုင် တောင့်တောင့် ထွားထွား၊ သူဌေးသမီး ငယ်ငယ်ထဲက အလုပ်ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ပင်တခါမှ မလုပ်ဘူး၊ ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ဘတ်စ်ကားတောင်တခါမှ တိုးမစီးဘူးခဲ့ လို့ နုဖတ်နေတဲ့ အသားအရည် နဲ့ ကြွေရုပ်ကလေး လိုလှသူ၊ ဒီကုမ္ပဏီ တခုလုံး၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး၊ ဘိုလိုမှုတ်ရရင်၊ ဗြူတီ အန် ပါဝါ တွဲထားတော့ တွေ့တဲ့ ယောက်ကျားတွေအဖို့ အရမ်းကို ဆက်ဆီဖြစ်နေတဲ့သူ၊ ထိုကဲ့ သို့သော် အမျိုးသမီး နူင့် နူစ်ယောက်ထဲ ရုံးခန်းတခုထဲ မှာ တခါတရံ လူတွေ အများကြီး နဲ့ တခါတခါ လူတွေ တယောက်မှ မရှိတော့တဲ့ အချိန်အထိ၊တပူးတွဲတွဲ လုပ်နေရတော့၊ ကာမ စိတ်တွေက အမြဲ တက်ကြွနေခဲ့ရသည်။
ရှေ့မှာတော့ ပေါ်တင် မကြည့်ရဲ၊ ခိုးခိုးပြီး ကြည့်ပြီးတော့သာ တံတွေးတွေ မြိုမြိုချ နေရသည်၊ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့၊ မျက်စေ့ထဲ မှတ်မိသမျှ ပုံဖေါ်ပြီး မှန်းထုတော့သည်။ တခါတရံ ညဖက်အိပ်ယာဝင် ချိန် လုပ်ပြီးတာတောင် မနက် ရုံးသွားကာနီး ရေချိုးခန်းထဲ ဆွဲတတ်သေးသည်၊ သုတ်ရည်တွေ ထွက်ပြီးကာစ လောက်မှာ စိတ်ငြိမ် သွားသော်လည်း အလုပ်ထဲ ရောက်လို့ ပြန်တွေ့ရတာနဲ့ သူ့ကောင်ကြီးက အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအောက်မှာ မာတင်း နေ တတ်သည်၊ တနေ့ ထက်တနေ့ ရောဂါက မသက်သာပဲ ပိုပိုဆိုးလာခဲ့ရသည်။ဝင်းပပ အလုပ်သွားခါနီး အခန်းထဲ က ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ထဲ မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တပတ်ပြန်လှည့် ကြည့်လိုက်သည်၊ လက်စက ရင်စေ့ ကော်လာတိုတို လေး နူင့် ခေတ်ပေါ် စတိုင် အသား ပါးပျော့ပျော့အင်္ကျီ က သူမ ရွှေရင် အစုံ ကို မပိုမလို၊ အမို့ အဖောင်း တိတိကျကျ လေး ပြထားသလိုဖြစ်နေသည်၊
အရောင်တူ ထမိန် အသားပျော့ပျော့ ကို သေးကျင်သော ခါးလေး မှာ တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် စည်း ဝတ်လိုက်တော့ ကားစွံ့ တဲ့ တင်လုံးကြီး တွေက ဖွံ့ဖွံ့ ထွားထွား မို့မောက်ထနေသည်၊ အောက်က အတွင်းခံက ယောက်ကျားလေး အတွင်းခံ စတိုင်၊ ကတ်သလောက်ထဲ က အခေါ်ကတော့ဘွိုင်းရှော့ ဆိုလား၊ နိူင်ငံခြားရောက် တူမလေး တယောက်က ဝတ်လို့ ကောင်းသည် ဆိုလို့ မှာပြီး ဝယ်ထားလိုက်တာ အရောင်စုံ၊ ဝတ်လို့လည်း တကယ်ကောင်းသည်၊ အသားကလည်း ပျော့အိနေသည်မှာ ဝတ်လို့ ဝတ်ထားမှန်းပင်မသိရ၊ နောက်ချူပ်ရိုး ပျောက် သူတို့ အခေါ်တော့ စင်း(မ)လက်စ် ဆိုလား၊ ဆိုတော့ ထမိန် တင်းတင်းဝတ်လို့တောင် ဘောင်းဘီ အနား မပေါ်၊
အတွင်းခံ ဝတ်ထားသည်လို့ ပင် မထင်ရ၊ မိမိ တင်ပါးဆိုင် များ၏ ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် ရှိမှု ကို မှန်အတွင်း နောက်ပြန်ကြည့်ပြီး ကျေနပ်သွားမှ ရှနဲဖိုက် ရေမွေးလေးကို လည်တိုင်၊ နဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေ မှာ ဖြန်း လိုက်တယ်၊ နောက်တော့ ဗိုက်ကလည်း ဆာလာတာနဲ့ အောက်က မီးဖိုချောင်ရှိရာ ကိုဆင်းလာခဲ့သည်၊ ဝင်းပပ က မနက်ဆို အိပ်ယာထ တာနူင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည်၊ မယ်ဘွဲ့ ရ ခဲ့ဘူးသည့်မေမေ က မိန်းခလေး ဆိုတာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် အချိုးကျ ဖို့က အရေးကြီး သလို လွယ်လွယ်နဲ့ မရနိူင်ဟု၊ သူတို့ ညီအမ ကို ငယ်ငယ်ထည်းက ပြောဆိုပြီး သူနူင့် အတူတူ လေ့ကျင့်စေသည်၊ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းကို မေမေ ကိုယ်တိုင် သင်ပေးသည်။
သူတို့ မှာလည်း ပစ္စည်းကိရိယာ အစုံအလင် ရှိသည်၊ အပျို ဘ၀ ထဲ က နေ့စဉ်လိုလို လုပ်လာခဲ့တော့လည်း အကျင့်ပါနေပြီ မနက်အိပ်ယာထ လို့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်လိုက်ရရင်တောင် ညှောင်းညာ သလို ဖြစ်နေတတ်သည်၊ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်တဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးကတော့ တကယ်ခံစားရသည်၊ တခြား မိန်းခလေး တွေနူင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် ယောက်ကျားတွေ ရဲ့ မျက်လုံးက သူ့ အပေါ်မှာ အများဆုံးရောက်နေတာ ကို အမြဲတမ်း သတိထားမိနေသည်၊ လူကလည်း အမြဲတမ်း လန်းဆန်းနေသလို၊ ယောက်ကျားများ၏ အာသာငမ်းငမ်း အကြည့်တွေကို လည်း သာယာမိသည်၊
သွေးသား လှုပ်ရှားမှုအား ကောင်းသလို ကာမဆန္ဒ နိူးကြွမှု မှာလည်း အားမသေး ခြေ၊ သူ နူင့် ကိုတင်ထွတ် အိမ်ထောင်ကျ ပြီး ကထဲက ည တိုင်းလိုလို အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်၊ ကိုတင်ထွတ် အလုပ်ကိစ္စ နူင့် ခရီး ထွက်ရသည့် အခါ၊ ပထမ ဆုံး အကြိမ်က တခါမှ မခွဲ ဘူးတော့ တော်တော်လေး ခံစားရသည်၊ သို့သော်လည်း တဖြေးဖြေး တော့အသားကျ သွားသည်၊ ဒါပေမဲ့ တပတ်လောက်ဆိုရင် မနေနိူင်တော့ သူ့ဘာသာ သူ လက်နူင့် အယားဖျောက် ပစ်ရသည်၊ အခု တခေါက်က တော့ တော်တော့် ကိုကြာသည်၊ ရာသီက လည်းပြောင်းတော့ပစ္စည်း ကောက်ရတာ နောက်ကျ ပြီး အလျှင်မမှီ ၍ ကိုတင်ထွတ် လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး နေနေရတော့ ဝင်းပပ အဖို့ နွေရာသီ က သစ်ရွက်ခြောက်လို မီးဖွားကျ တာ နူင့် မီးထလောင်နိူင်သည့်အခြေအနေရောက် နေ သည်၊ ညအိပ်ရာဝင် တိုင်း သူမ လက်ခလေး နူင့် အစေ့ လေးကို နာနာ ပွတ် ရင်း တချီလောက်ပြီး မှ ပဲ အိပ်လို့ ပျော်တော့သည်။
အလုပ်ထဲ မှာကလည်း ဖေဖေ က လွဲလျှင် သူက အကြီးဆုံးမဟုတ်လား၊ ဖေဖေ ကလည်း အထိန်းအကွပ် ရရုံ လောက် နာမည်သာ ခံထားတော့သည်၊ သူကသာ အရာရာ ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်နေ ရခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်း အကုန်လုံးက ကြောက်ရွံ့ ရိုသေ ကြရသည်၊ နောက်ပြီး ကျောင်းမပြီး မှီထဲက စ အလုပ်ထဲ ခြေစုံပစ် ဝင်ခဲ့ ရသဖြင့် သူ့မှာက အလုပ်နူင့် ပတ်သက်သော အသိုင်းအဝိုင်း က ပိုကြီးစိုးခဲ့သည်၊ အတိုချူပ်ပြော ရလျှင် သူ့ဘ၀ လောလော ဆယ်မှာ အိမ်၊ အလုပ်၊ နူင့် ကိုတင်ထွတ် ပဲ ရှိသည်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက် ၍ တွေ့ဆုံ ဆက်ဆံ နေခဲ့ ရသော ယောက်ကျားသနာ တွေကလည်း သူ့ကို လန့်ကြသဖြင့် လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မိန်းမတယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရဲ့ သားဖြင့် သူမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားကြသည်။
အင်း ဒီကောင်လေး တယောက်ပဲ၊ ဝင်းပပ အတွေးထဲမိုးအောင်သူ ဝင်လာသည်၊ မိုးအောင်သူ ကို မမျိုး ပြောပေး၍ ခန့်လိုက်ပြီးမှ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လေး သဘောကျပြီး အဆင့်ဆင့် တိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့သည်၊ ထိုအခါမှ စ၍ သူ့ကို အဓိက အရေးကြီးလုပ်ငန်း အရေးအရာ များကို ဝင်ပါစေ ပြီး ထရိမ်နင် သဘောမျိုးမောင်း လာခဲ့သည်၊ မိုးအောင်သူ ကလည်း အချိန်ပိုတွေ ဘာတွေ အဓိက မထား လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးလေ့ရှိတော့ဝင်းပပ လည်း သဘောကျလာခဲ့သည်၊ ကိုတင်ထွတ် နေရာကို လွှတ်ပြီး ကိုတင်ထွတ်ကို သူ့ အနားပြန်ခေါ်ထား တော့ မည်ဟုတွေးထားသည်၊ သို့ သော် အခု တလော သူပဲ စိတ်ထင်လို့ လား မသိကောင်လေး အကြည့်တွေက နည်းနည်း ဆန်းသလိုလို၊ သူက မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး မှန်ထဲ မှ ဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံး ဒေါင့်ကပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခါ တလေ ကြည့်လိုက်လျှင် သူ့ ကို ခိုးခိုး ကြည့်နေတတ်တာ သတိထားမိနေ၏။
ပထမတော့ သူ့ စိတ်ထဲ မှာ တမျိုး ဖြစ်နေသော်လည်း နောက်ပိုင်း သာယာသလို ဖြစ်မိ၏၊ တခါတလေ မျက်လုံး စူးစူး တွေက သူ့ ရင်ကို ပါ ဖိုလာစေ၏၊ အခုလို၊ ကိုတင်ထွတ် အဝေးသွား နေပြီး သူ့ အလိုဆန္ဒ တွေ လစ်ဟာနေသော အချိန်မှာ ဆိုလျှင်၊ ထိုအကြည့် နောက် ကွယ် မှာ ဘာတွေ တွေးနေမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင်း သူ့ ရတနာ ရွှေကြုပ်လေး မှာ စိုတိုတို ဖြစ်လာရသည်။ ဒီနေ့ အောက်ဆင်းလာတော့ မနော် တယောက်ထဲ မီးဖိုချောင်မှာ တွေ့ရသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်မြ နေမကောင်း ဟု ဆိုသည်၊ မနော် တယောက်ထဲ အလုပ်များနေ တာတွေ့တော့၊ နေလည်စာ မထည့်ခိုင်းတော့၊ဒီနေ့ တော့ ဝယ်စား လိုက်မည်ဟုတွေးသည်၊ နောက် အလုပ်လည်း ဒီနေ့ များအုန်းမှာဆိုတော့ ညနေစာ ပါ သူ့ အတွက်မလုပ်နဲ့တော့ လို့ မှာထားခဲ့လိုက်သည်။
မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ မှာ ဒေါ်ဝင်းပပ တယောက် ဒီနေ့ ပိုလှနေတယ်လို့ တွေး နေမိပြီး ၊သူ ပုဆိုးခြုံအောက် မှ လီးကလည်း မမာတမာ ဖြစ်နေသည်၊ အခု မနက်ကလေးကတင် ထုလာသေးတယ် ရှီး၊ လို့သူ့ကိုယ်သူ အပြစ် တင်ရမလို ဂုဏ်ယူရလို ဝေခွဲ မရ ဖြစ်နေရသည်၊ သူက တကယ်တော့ ကာမ ကိစ္စ မှာ ဖျံ မဟုတ်ပေမဲ့ လည်း အရိုင်းလေး တော့ မဟုတ်ပေ၊ ၁၀ တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ တုန်းကက ကျူရှင် ယူဖို့ ငွေကြေးလည်း မတတ်နိူင် တော့ သူ့ အဖေ ရုံးက တပည့် တယောက် ၏၊ သမီး အပျိုကြီး ကျောင်းဆရာမ အားသည့် အချိန် ထိုအိမ်သို့ သွား စာလုပ်ရသည်၊ ထိုအပျို ကြီးမှာ အလယ်တန်းပြသာ ဖြစ် သဖြင့် ခလေးများကို ကျူရှင်ပေးသည်၊ မိုးအောင်သူ က ဝိုင်းကူ သင်ပေးရင်း သူ့စာကို သူကျက်သည်၊ မသိတာ ကို အပျိုကြီး မမမြတ် ကရှင်းပြပေးသည်၊ တကယ်တော့ များသော အားဖြင့် အချိန်တွေမှာ သူတို့ အိမ်မှာက လူမပြတ်ခြေ၊ ကျူရှင်လာသော ခလေးတွေနူင့် မမမြတ် အမေကလည်း အိမ်မှာပဲ ချက်ပြုတ်ရင်း ရှိနေတတ်သည်၊
မိုးအောင်သူ လူပျိုပေါက်ပီပီ ဂွင်းထု တတ်တော့မိန်းမ မြင်ဘူးသမျှ မှန်း တော့ နီးနီး စပ်စပ် နေရသည့် မမမြတ်က လည်း ဘယ်လွတ်မလဲ ၊ မှန်းပြီးတော့ သာ ထု နေတာ တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မတွေးမိခဲ့၊ တနေ့ မှာ ဘာမှန်း မမှတ်မိတော့ ခလေးတွေ ကျောင်းပိတ်လို့လား ဘာလားမသိ ကျောင်းသား တယောက်မှ မရှိ၊ မမမြတ် အမေ ကလည်း မရှိ နယ်ပြန်သွားတာလား ဘာလား မသိ၊ မမမြတ် အဖေက အလုပ်သွားသည်၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ပဲ ဇာတ်လမ်းက ဖြစ်ချင်တော့ မိုးကလည်း စဲလိုက် သည်းလိုက် ရွာနေသည်၊ မမမြတ်ကလည်း သူ့ ကို တံခါးဖွင့်ပေးပြီး ခေါင်းနည်းနည်း နှောက်လို့ ဆိုပြီး အိပ်ယာထဲ ဝင်လှဲနေသည်၊ ဖိုနဲ့မ နူစ်ယောက် ထဲ လွတ်လပ် နေတော့ မိုးအောင်သူ စိတ်ရိုင်း ဝင်ပြီ၊ မမမြတ် လှဲ နေသော အိပ်ခန်းထဲ လိုက်ဝင်ပြီး မမမြတ် ကိုယ်ပူနေသလား ဘာညာ နဖူးစမ်း ပါးစမ်းရင် ဖက်နမ်း တော့သည်၊
မမမြတ်ကလည်းနဂိုလ်ထဲက ပျော့ချင်နေသော ဖယောင်းလေးမို့ မီးနားကပ်လိုက်တော့ ပျော်ကျသွားသည်၊ အို့ မကောင်းပါဘူးကွယ်၊ ဘာညာ ကနေ မ ကိုသနားပါအုန်း မောင်မိုးရယ်၊ ကနေ၊ အားအင့်အင့် မောင်မိုး ဖြစ်သွားရသည်၊ မမမြတ်က အပျိုကြီးသာပြောသာ အသက် အစိတ်လောက်ပဲ ရှိသေးသည်၊ မိုးအောင်သူက အသက် ၁၈ နူစ်ပင် မပြည့်သေး၊ နူစ်ဦး စလုံး၏ ပထမ ဆုံး အတွေ့ အကြုံ များ ဖြစ်ကြသည်၊ထိုနေ့ က လို လွတ်လပ်မှု မျိုးမှာ တော်တော် နူင့် ပြန်မပေါ်တော့၊ မမမြတ် အမေက အမြဲ ရှိနေသည်၊ တခါတော့ မမမြတ် အမေ မရှိ ကျောင်းသားတွေ ရှိနေသည်၊ ခလေးတွေကို သချာင်္ပုစ္ဆာတွေ ပေးခဲ့ ပြီး အခန်းထဲ ဝင်ကာ လုပ်ဖြစ်ကြသည်၊ မိုးအောင်သူ ၁၀တန်းအောင် သွားတော့ မရောက်ဖြစ်တော့ပြီ၊ မမမြတ်လည်း အိမ်က ပေးစားတဲ့ သူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်သည်၊ မိုးအောင်သူ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ အိမ်နားက ချာတိတ်မ မြီးကောင်ပေါက်စ လေးနူင့် ရီးစားဖြစ်သည်၊ ကောင်မလေးက ကိုးတန်းပဲ ရှိသေးသည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဆိုတော့ အထင်ကြီး သည်၊ ရီးစားစာ တစောင်နူင့် ပင် သမီးရီးစား ဘဝရောက်ခဲ့ ကြသည်၊ ထိုကောင်မလေးကို တော့ မိုးအောင်သူ ပါကင် ဖွင့်လိုက်ရသည်၊ ကောင်မလေး အိမ်မှာ လူကြီးတွေ မရှိချိန် အိမ်နောက်ဖေး ပေါက်က ပတ်ဝင်ပြီး ကောင်မလေး ကို အခန်းထဲအတင်းဆွဲခေါ် ဖက်နမ်းရင်း ပါကင်ဖွင့်လိုက် သည်၊ နောက် တော့ လစ်ရင်လစ် သလို ဝင်ဝင်ဆွဲသည်၊ သိပ် အကြာကြီးတော့ မခံလိုက်၊ ကောင်မလေး မိသားစု နယ်ပြောင်းသွားတော့ ဝေးသွားကြရသည်၊ တက္ကသိုလ်တက် နေတုန်း ထိုကဲ့ သို့ အိမ်ဘေးမှ ကောင်မလေး နူင့် ညိနေ သဖြင့် မိုးအောင်သူ တယောက် ကျောင်းမှာ ရီး စား မထားဖြစ်လိုက်ခြေ၊ တယောက်နူစ်ယောက် စမ်းလိုက်သော်လည်း အဆင်မပြေ၊ အိမ်ဘေးမှာ စားစရာက လည်း ရှိနေတော့ သိပ်လည်း မကျိုးစားချင်တော့ တာလည်း ပါလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
ကျောင်းပြီးသွားတော့ လည်း သူများ တွေလိုဟေးလားဝါးလား လုပ်ဖို့ အချိန်မရ တော့ အိမ်က စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် ရသည့် အလုပ်ကလေး ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်နေရ သဖြင့် ရီးစားသနာလည်း မထားဖြစ်သေး၊ လောလော ဆယ် သူ့ရောဂါကတော့ သူ့ လက်ရှိ ဘောစိ၊ သူ့သူဌေးမ ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုသာ အသားကုန် လုပ်ချင် နေသည်။ ဝင်းပပ အလုပ်ထဲ ရောက်တော့ ဒီနေ့ ခေါက်ရိုးကျ ရှပ်အင်းကျီ သပ်သပ်ယပ်ယပ်နဲ့ ပလေကပ် ပုဆိုး အပျော့ ၊ နဲ့ သားနားနေသော မိုးအောင်သူ ကိုတွေ့လိုက်ရ ၏၊ ဆံပင်ရှည်ရှည် ဂုတ်ဝဲ လေးနူင့် နုပျိုသေးသော မျက်နှာလေး နူင့် စူးရဲသော မျက်လုံး အစုံက သူ့ရင် တချက်ဖိုသွားသည်၊ အင်း ငါလည်း ကိုတင်ထွတ် နဲ့ ဝေးနေရတာ ကြာလို့ထင်တယ်၊ စိတ်တွေ လေနေတယ်၊ ဟု ကိုယ့်ဘာသာ သတိချူပ် ရင်း အလုပ်စလုပ်တော့သည်၊ စာရင်းတွေပေါင်း ဖုန်းတွေ ခေါ်စရာရှိတာတွေ ကြောင့် မိုးအောင်သူ ကို သူ့ရုံးခန်းထဲ လာပြီး ကူလုပ်ခိုင်းထားလေသည်။ ..ဟောတော့ ထမင်းစားချိန်တောင် လွန်နေပြီ၊ မောင်မိုးအောင်သူ ရော ဆောရီးနော် ဗိုက်ဆာနေပလား.. …ရတယ် မမဝင်း ဒီလောက်လဲ မဟုတ်သေးပါဘူး.. …မင်း ထမင်းဘူး ပါလာလား၊
ဒီနေ့ မပါဘူး မမဝင်း..ကျနော် ဒီနားပဲ ထွက်စားမလားလို့.. ..အော်ဟုတ်လား မမ လည်း ဒီနေ့ အိမ်က ဘာမှ မပါလာဘူး ထွက်စားရအောင် မမ တို့နဲ့ လိုက်ခဲ့.. ရွှေစင်..ရေ..ဟေ့ ရွှေစင် တို့ တခုခု သွားစားရအောင်ဟေ့.. ဒေါ်ဝင်းပပ က တဆက်တည်း သူနဲ့ အဖေါ်လိုက်နေကြ ကောင်မလေး တယောက်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ …ဟင်..မမ က ကြိုမပြောထားလို့ ရွှေစင် အိမ်က ပါလာတဲ့ ထမင်းဘူး စားလိုက်ပြီ၊ အဟီး..လိုက်ခဲ့မယ်လေ မမ အဖေါ်ရအောင်.. …အော်အော် အေး ငါလည်း မေ့သွားလို့ ..စားပြီးရင်လည်း နေခဲ့တော့ မိုးအောင်သူလည်း ပါမှာပဲ မမ ခနထွက်သွားလိုက်အုန်းမယ်..ဟို လူတွေဖုန်းခေါ်ရင်…….. ဒေါ်ဝင်းပပ က မှာစရာရှိတာလေးတွေ မှာခဲ့ပြီး မိုးအောင်သူနဲ့ အတူ သူ့ကားလေး ရပ်ထားတဲ့နေရာကို ဆင်းလာခဲ့ကြသည်။ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ ဒီနေ့ အလုပ်တခု ပြီး ရင် အလုပ်က နည်းနည်း ပြန် အားသွားမှာမို့ စိတ်ပေါ့ပါး နေ၏၊ မိုးအောင်သူ နူင့် စားသောက်ဆိုင်တခု တွင် ဝင်စား ကြရင်းက မှစကားစမြည် ပြောဖြစ်ကြသည်၊
..ဟူး ငါတို့ မှာလည်း အလုပ်တွေ ပိနေတာနဲ့ စကားတောင် ကောင်းကောင်း မပြောဖြစ်ကြဘူးနော်.. …ဟုတ်ကဲ့ မမဝင်း..မမဝင်းက အလုပ်တအားလုပ်တာကိုး.. ..အဲလောက်လဲ ဟုတ်ပါဘူးကွာ ဖေဖေ က မျက်နှာလွဲထားတယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်လက်ထဲ မှာ မကျဆင်းသွားစေချင်ဘူးလေ..မောင်မိုး ရဲ့ အကူညီလည်း ပါပါတယ်၊ မောင်မိုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ..ဟာမဟုတ်တာ မမဝင်းကလည်း မမဝင်း တို့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျနော် ဒီအလုပ်လုပ်ရတာပါ.. ..ကဲ ပါ အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောမနေပါနဲ့ ကဲ မင်း အကြောင်းလေး ဘာလေးပြောပါအုန်း.. ..ဟာ မမဝင်းက လည်း ကျနော့် အကြောင်းက ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပါဘူး၊ .. …အံမယ် မင်းလို အရွယ် ရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ များ၊ ပြောစမ်းပါအုန်း ကောင်မလေး ဘယ်နူစ်ယောက် အသဲကွဲ ပြီးပလဲ.. ..အာ မမဝင်း ကလည်း လုပ်ပြီ၊ ကျနော့်မှာ ရီးစားတောင် မရှိသေးပါဘူး..ပေါက်ကရတွေ၊ ဟဲဟဲ.. …မယုံပါဘူးကွာ..ဘာလည်း ..ကြိုက်စရာကောင်း တာ မတွေ့သေးလို့လား.. …ဟီးဟီး မမဝင်း ခြေဖျားလောက်မှီအောင် ချောတဲ့သူ တွေ့ရင်တောင် ကျနော်က လိုက်မှာ.. ဟိုက်..မိုးအောင်သူ တယောက် သူ့ပါးစပ်က စွပ်ရွတ်ထွက်သွားပြီးမှ ကိုယ့်ပါးကိုယ်ပြန်ရိုက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားသည်၊ လခွီးမှ ပဲ ဒီစောက်ပါးစပ်နဲ့ တော့ အလုပ်ပြုတ်တော့မှာပဲ၊ ဟုလန့်သွားသည်။
သို့သော် ဒေါ်ဝင်းပပ က အပြုံးမပျက် ရီမောရင်း၊ …ကဲကဲ ..စားပါကွာ မမကျွေးပါ့မယ် ငါ့မောင်က ဒီလောက်တောင် မြှောက်နေစရာမလိုပါဘူး၊ကွာ ဟင်းဟင်း… အဲတော့လည်း ချော်လဲ ရာ ရောထိုင်လိုက်တာပေါ့။ …တကယ်ပြောတာ ပါ မမဝင်း ရဲ့ မမဝင်း လိုမျိုး ချောပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှတဲ့သူမျိုး မိန်းခလေး တထောင်မှာ တယောက်ရှာလို့တောင် မတွေ့နိူင်ပါဘူး၊ …. ….တော်ပါပြီ ကိုပိုရယ် ..ဟင်းတွေ အေးကုန်မယ် စားလိုက်ပါအုန်း…ညနေဘက် အလုပ်ဆင်းတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ စာရွက်စာတမ်း များ ကို စက္ကူပုံးတလုံး နဲ့ ထည့် ပြီး မိုးအောင်သူ က ကားနား အထိလိုက်ပို့ရင်းမှ …မမဝင်း ကျနော် အိမ်အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ ကျနော် အဲဒီဖက် ပိုင်းလည်း သွားစရာရှိတယ်၊ အဟီး မမဝင်းကားနဲ့ လိုက်ရတော့ ဘတ်စ်ကား တွယ် မစီးရတော့ဘူးပေါ့၊.. မိုးအောင်သူ က ဘာရယ်မဟုတ်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ နားကပ် ရေမွေးနံ့လေးရူ ၊သူ့ဘော်ဒီကို မသိမသာ ခိုးကြည့် ရတာ ဖီးတက်နေလို့ ကြံဖန် ရမယ်ရှာနေတာ၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ကလည်းခေါ်သွားခဲ့သည်။
ကောင်လေး ခိုးခိုးကြည့်နေတာ လည်း သူသိသည်၊ ဘာမှန်းမသိ သူ့ရင်မှာ ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်ရုံ မက သူပိပိ လေးမှာလည်း စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေရပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့ မနော် က တံခါးလာဖွင့်ပေးရင်း၊ ..အဝင်း စားတော့ မလား မနော် ပြင်ထားလိုက်၇မလား.. ..မစားသေးဘူး မနော်ရေ မနော် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပါ နောက်မှ ခေါ်လိုက်မယ်၊.. …အင်းအင်း ..ဒါဆို မနော် ရေချိုးလိုက်အုန်းမယ်၊ ခနနေရင် ကိုတင့် ပြန်ရောက်တော့မှာပါ.. …အော် သူဇာနဲ့ ဖိုးသက် ကို သွားကြိုတာလား…ကဲ မောင်မိုးရေ အဲဒီစက္ကူပုံးလေး တခါထဲ အပေါ်ထပ်လိုက်တင်ပေးပါအုန်း၊.. …ဟုတ်ကဲ့ မမဝင်း.. မိမိ ရှေ့မှ လှေခါးပေါ် တက်သွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ နိမ့်တုန် မြင့်တုန် တင်ပဆုံနူင့် သေးကျင်သော ခါးက မိုးအောင်သူ ၏ ငတ ကို မာတင်းလာစေပြီး ဒူးတောင် ညွတ်ခွေကျချင်လာခဲ့ရသည်။ အိမ်ကြီးတလုံးလုံးက လည်း တိတ်ဆိတ် နေတော့ မိုးအောင်သူ စိတ်တွေ ထကြွလာခဲ့ရသည်။
ဝင်းပပ မှာလည်း သူ့နောက်က နေ မိုးအောင်သူ တယောက်သရည်တမြှားမြှား ဖြစ်နေမည်ဆိုတာကို သိနေသည်၊ သူကိုယ်တိုင်က ပင် ပြချင်နေသည်၊ သူ့ပိပိ လေးထဲမှ အရည် တချို့ ပင် သူဝတ်ထားသော ပင်တီ ပေါ် စိုလာခဲ့သည်၊ တ ကယ်ဆို ဒီစက္ကူ ပုံးကို အောက်မှာပဲ ထားခိုင်းပြီး နောက်မှ ဦးလေး တင့်ကို တင်ခိုင်းလိုက်လည်း ရသည်၊ အခုတော့ သူကိုယ်တိုင်က ပင် ခပ်ကဲကဲ ဖြစ်နေသလားမသိ၊ သူ့အခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့် ဝင်လိုက်တော့ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုံနေသည်၊ မိုးအောင်သူ မှာလည်း အိစက်ညက်ညောလှသည့် ဝင်းပပ တို့ လင်မယား ကုတင်ကြီး ကိုတွေ့ရတော့ ရင်တဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်၊ ဒီအပေါ်မှာသာ မမဝင်း ကို လိုးလိုက်ရရင် ဟူသောအတွေးဖြင့် လက်တွေ ပင်တုန်လာ၏၊ ဒေါ်ဝင်းပပ က ..ကြမ်းမှာ ခနချထားလိုက်ပါအုန်းကွ မောင်မိုး ရဲ့ မလေးဘူးလား နေအုန်း ပြီးမှ ဒီနားမှာ တင်မလို့.. ဒေါ်ဝင်းပပ က တံခါး အနောက်ဘက်နားက ဘီရိုတခုကို ဖွင့်လို့ရအောင်တံခါးကို ပြန်စေ့လိုက်သည်၊
ထိုဘီရို အနားကို အသွား သူခြေထောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်က ဒေါက်ဖိနပ် တရံကိုသွားတက်နင်းမိပြီး ခြေခေါက်ကာ ချော်လဲ မလိုဖြစ်သွား၏။ …အမေ့…အို… ခြေမြန်လက်မြန် မိုးအောင်သူ တယောက် လှမ်းထိန်းကာ ပွေ့လိုက်လို့ ကြမ်းပြင်နူင့် မျက်နှာ မအပ်မိခြင်း ဖြစ်လေသည်။ …မမဝင်း..ဘာဖြစ်သွားလည်းဟင်.. ..ခြေခေါက်သွားတယ် ထင်တယ်..အား…ခြေထောက် နည်းနည်း နာ သွားတယ်.. ..ရတယ် မမဝင်း ခြေမထောက်နဲ့ ကျနော် ကုတင်ပေါ် သွားတင်ပေးမယ်.. မိုးအောင်သူ က သူ့ရင်ခွင်ထဲ အိစက်နေသော ဒေါ်ဝင်းမမ ကိုယ်လုံးလေး ကို မလွတ်ချင်လို့ အသာပွေ့ပြီး ကုတင်ဆီသယ်လာခဲ့သည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ရှက်သွေးဖြန်းပြီး လှချင်တိုင်းလှနေသော မျက်နှာလေး ကိုငုံ့ ကြည့်ရင်း မနေနိူင်တော့သော၊ မိုးအောင်သူ တယောက် ဒေါ်ဝင်းပပ ကို ကုတင်ပေါ် တင်လိုက်ရင်း တဆက်ထည်း နူတ်ခမ်းနုနု လေးကိုငုံ့ကာ နမ်းစုပ်လိုက်မိတော့သည်။
ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ နူတ်ခမ်းလေး များက အမြင်မှာတင် အလွန်အမင်း လှ ရုံမက၊ သူ့နူတ်ခမ်းနူင့် ဖိကပ်လိုက်တော့ အတွေ့ မှာလည်း နူးညံ့ ပျော့ပြောင်းလှ ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ အောက်နူတ်ခမ်းလုံးလုံးလေး ကို ငုံခဲ လိုက်တော့ အရသာ မှာလည်း ချိုမြိန် လှပေသည် ဟု မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ ထင်မိလေသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ ရှက်လို့ လားမသိ မျက်လုံးလေး မှေး စင်းထားသော်လည်း၊ သူ့ နူတ်ခမ်းတွေကတော့ မိုးအောင်သူ ရဲ့ အစုပ် အနမ်းတွေကို ရမက် ပြင်းပြင်းနဲ့ တုန့်ပြန် နေလေရဲ့၊ သူ့လက်တွေကလည်း မိုးအောင်သူရဲ့ လည်ဂုတ် ကို တွဲလဲ ခိုဆွဲထားသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ရဲ့ ခါးကျင်ကျင်လေး ကို ဖက်ထားတဲ့ မိုးအောင်သူရဲ့ လက်တွေကလည်း အောက်ဘက် ကို လျောချ ပြီး သူ့တင်ပါးထွား အိအိ ကို ဆုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်၊ မိုးအောင်သူ က ကျပ်ကျပ် ကလေး စည်းထားတဲ့ ဒေါ်ဝင်းပပ ထမိန်ကို ဖြေလျှော့ ပြီး ချွတ်ချလိုက်တော့ ဒေါ်ဝင်းပပ အလိုက်သင့် ဖင်ကြီး ကို ကြွပေးရှာ၏၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ရဲ့ ပေါင်တန် တွေက ဆင်စွယ် နူစ်ချောင်းလို အဆစ် အမြစ် မရှိ စင်းဖြောင့် ပြီး ဖြုဝင်း နေသည်၊
မိုးအောင်သူ က အာသာ ငမ်းငမ်း နဲ့ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး လေး တွေကို နေရာမလပ် အောင် နမ်းရှုံ့ နေမိသည်၊ ကုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်ကလေး ဒူးထောင် ပေါင်ကား ဖြစ်နေရှာတဲ့ ဒေါ်ဝင်းပပ ရဲ့ ပေါင် နူစ်လုံးကြား မိုးအောင်သူ တယောက် ရောက်နေရှာပေါ့၊ မိုးအောင်သူက သူ့ လက်ဖဝါးလေး တွေနဲ့ ပေါင် အောက်ပိုင်း သားလေး တွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေရင်းက ဒေါ်ဝင်းပပ ရဲ့ ပေါင် အတွင်း အရင်းကျ ဆုံး မိုးခိုသား လေး တွေကို ရက်ပေးနေမိသည်။ ( လူတွင် မိုးခိုသား ဆိုသည်မှာ မိုးရွာထဲ မတ်တပ် ရပ်နေပါက မိုးရေ မစိုနိူင်သော နေရာ ကို ဆိုလိုပါသည်၊ ဤကား စာရေးသူ၏ အတွေးဖြစ်၏။ ) ဒေါ်ဝင်းပပ မှာလည်း မိုးအောင်သူ ၏ နူးညံ့ ပူနွေးနွေး လျှာကြီးက သူ့ အတွင်းသားအကျ ဆုံးနေရာတွေကို ရက်ပေးနေ သဖြင့် ကြက်သည်း တဖြန်းဖြန်း ထ လောက်အောင် အရသာထူး နူင့် တွေ့နေရလေရာ၊ နဂိုလ် ထဲက စိမ့်နေသော စောက်ရည်ကြည် များမှာ အခုတော့ အဖုတ်အပြင်သို့ ပင် လျှံကျ ကာ သူဝတ်ထားသော ဘွိုင်းရှော့ စတိုင် ဗစ်တိုးရီးယား စီးခရက် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး ကို ရွှဲနစ် စေပါတော့သည်။
စောက်ရည်ကြည်များ စိုရွှဲ နေသဖြင့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ လေးမှာ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ် ကို ကပ်လျှက် အဖုတ် ကွဲကြောင်းရာ ကို ထင်းထင်း ကြီး မြင်နေရပေရာ၊ မိုးအောင်သူက သူ့လက်ချောင်း ထိပ်ကလေး ဖြင့်၊ အကွဲကြောင်း တလျှောက် ပွတ်သပ်ပေးနေမိပြန် ပါသည်။ မိုးအောင်သူ က တဆင့်တက်ကာ ဒေါ်ဝင်းပပ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး ကို ခါးသရေ မျှော့ကြိုး မှ တဘက်တချက် ဆွဲ ကိုင် ချွတ်လိုက်ရာ ဒေါ်ဝင်းပပ ကလည်း အလိုက်သင့် ဖင်ကြီး ကို ကြွပေးလိုက်သဖြင့်၊ အမွှေးအမြှင် ရိတ်ထား၍ ပြောင်နေသော အဖုတ် ကြီး မှာ ဖောင်းကားလျှက် ပေါ်လာတော့သည်၊ စောက်ရည်ကြည်များဖြင့် ရွှမ်းပြောင်လက် နေသော ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်ကြီး ကို မိုးအောင်သူ တယောက် အငမ်းမရ သူ့ပါးစပ်ဖြင့် ဖိကပ်ကာ စုပ်ယူလိုက်ရာ၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ ထူထဲထဲ အဖုတ်နူတ်ခမ်း တဖတ် မှာ သူ့ ပါးစပ်တွင်းသို့ ပါလာခဲ့လေသည်။
…အင့်…အားးးး ..အို့ …အိုးးကွယ်….. ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်နူတ်ခမ်းဖတ် လေးကို မိုးအောင်သူက သူ့ နူတ်ခမ်းဖြင့် အသာဖိညှပ် ဆွဲ လိုက်ရာ ထွန့်ထွန့် လူးအောင် ခံစားလိုက်ရသဖြင့် အသံလေး ထွက် ငြီး ရုံ မက မိုးအောင်သူ ၏ ခေါင်းမှ ဆံပင်များကို ပင် အားမလို အားမရ ဆုပ်ကိုင် ဆွဲ လိုက် မိလေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကလည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ ကြောင်မ ကဲ့သို့ ငြီး သံလေးကြောင့် ပို စိတ် ထက်သန်လာပြီး သူ့ လျှာကို ရှည်နိူင်သမျှ ရှည်အောင် ဆန့် ကာ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်တွင်း ထုတ်သွင်း ကစားလေတော့သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ ပြတ်နေတာ ကြာပြီ ဖြစ်သော ကိုယ် ကြိုက်နူစ်သက်လှသည့် အစာ ကို ပြန်အမြည်း စားလိုက်ရ သူလို ဖြစ်နေပေရာ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက် ပြီး ပေါင်တန်လေး နူစ်ချောင်း ဆန့်တန်းလျှက် တချီ ပြီးသွားရရှာတော့သည်။ ထိုအခါမှာ မိမိ လိင်တန်ကြီး တခုလုံးကလည်း မခံ မရပ်နိူင်အောင် တင်းမာ နေပြီ ဖြစ်သော မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမျာ ဒူးထောက် ထိုင်လျှက် သူ့ ပုဆိုးကို ဖြည်ချလိုက်လေသည်။
မိုးအောင်သူက ထောင်မတ် တင်းမာနေသော သူ့ လိင်တန်ကြီး ကို ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်လှလှ အကွဲ ကြားမှာ အထဲ နားထိ ခေါင်းကို ဒစ်မြုပ်သည့် အထိ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ လက်လက်နူစ်ဖက်ကို မြှောက်ကာ မျက်လုံးများပေါ် အုပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။ အင်း ဒီတချီတော့ ရှိပါစေ ဦးပေါ့လေ၊ နောက်တခါဆိုရင် တော့ အဲ လို နေလို့ မရတော့ဘူး ငါ့ဒုတ်ကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ ထည့်နေတာကို ကြည့်ကို ကြည့်ခိုင်းရမယ်လို့ တေးထားလိုက်၏၊ မိုးအောင်သူ မှာ အသား ညို သူဖြစ်ရာ သူ့ လိင်တန် ညိုညို ကြီး က ဖွေးဖြူ ဥ နေသော ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်လေး ထဲ ဖြေးဖြေး ခြင်း တိုးဝင် သွားသည် မှာ ကြည့်ရတာနူင့် ပင် အရသာရှိသည်ဟု ထင်မိလေသည်။
မိုးအောင်သူ အဖို့ မှာ လပေါင်း များစွာ စိတ်ကူးနူင့် မှန်းခဲ့ ရပြီး ဒီတသက်တော့ ဖြစ်နိူင်ခြေ မရှိ ဟု ထင်ထားခဲ့ ရသော သူ့ ဘောစိ မမ ကို လုပ်နေရ ခြင်း ဆိုသည့် အတွေးက ပင်လျှင် သုတ်ရည်များ ချက်ခြင်း ပန်းထွက် သွားရလှအောင် စိတ်လှုပ်ရှား မိနေပေသည်၊ ထို့ အတွက် ကြောင့်လည်း တလက်မ ဆို တလက်မ တအိအိ တိုးဝင် သွားသော သူ့ လိင်တန် မှ ခံစားရသည့် အရသာ ကို အပြည့် အ၀ ခံစားနေလေတော့သည်။ တချီပြီး သွား ခဲ့ သည့် ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ် တွင်း မှ အရည် များကြောင့် မိုးအောင်သူ၏ လိင်ချောင်းကြီး မှာ အခက် အခဲ မရှိ တိုးဝင် သွားသော်လည်း ၊ ခလေး လည်း မမွေး ဘူး၊ လင် နဲ့ လည်း ဝေး နေတာ ကြာ၊ နေပြီ ဖြစ်သော ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်တွင်း တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ပြည့်နှက် သွားသည်ဟု ခံစားနေရလေသည်။
မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ စေးစေးပိုင်ပိုင် တိုးဝင်လာတော့ သူ့ ဘိုက်မှာ နစ် နေအောင် အရသာ ရှိလှပြီး ၊ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ အဖုတ်ထဲ မှ ဆွဲ ထုတ်လိုက် ချိန် ရင်ထဲ မှာ ဟာကနဲ ဖြစ် သွားရ၏၊ မိုးအောင်သူက သူ့ ပေါင် နူစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်ထမ်း တင်ပြီး အားရ ပါးရ ဆောင့်သည့် အချိန်မှာတော့ သူ့ အဖုတ် အတွင်းသား နံရံ များမှာ မိုးအောင်သူ ဒစ်ကြီး ပွတ်သတ်မှု ကြောင့် ကာမ ဆိပ် ဒီရေလို တက်လာပြီး သူ့ဖင်ကြီး ကို ပါ ကြွကြွ ကော့ပေးနေမိတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကလည်း လူငယ် ပီပီ ဖန်းကနဲ ဖန်းကနဲ နေအောင် ပစ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဒေါ်ဝင်းပပ ခမျာ အင့် ကနဲ အင်းကနဲ နေအောင် ခံစားနေရလေသည်၊ အခုတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ တယောက် မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်လျှက် သူ့လက်နူစ်ဘက်က အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ဆွဲ ကာ မိုးအောင်သူ ၏ အလိုး အဆောင့်ကို အံကြိတ်ခံစားနေလေသည်၊
မိုးအောင်သူကလည်း သူ့ လီးကြီး ကို ဒစ်ပေါ်ခါနီး ထိ ဆွဲ ထုတ်ထုတ်ပြီး မှ အားရ ပါးရ ဖင်ကော့ ကာ ဆောင့်ဆောင့်ချသဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ အိပ်ခန်းထဲ တွင် တဖန်းဖန်း တပြွတ်ပြွတ် အသံ များဖြင့် ညံစီ နေပေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူမှာ မကြာခင် ပြီးတော့မယ် ဆိုတာ သိသော်လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ကို သူနူင့် ပိုပွင့်လင်း စေလိုသဖြင့် ဆောင့်လိုးနေရာ မှ ခနနားလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်နှာလေး ကို ငုံနမ်းလိုက်ကာ၊ …မမဝင်း..ပြီးတော့ မလား ကျနော်တို့ ပြိုင်တူပြီးကြရအောင်လေ… ဟုကပ်ပြောလိုက်ရာ၊ မျက်စေ့လေး မှိတ်ကာ ကြိတ်ခံနေရှာသော ဒေါ်ဝင်းပပ က မျက်လုံး မဖွင့် ပဲ ခေါင်းလေး ငြိမ့် ပြီး …အင်း…ဟုသာ ဆိုလေသည်။ မိုးအောင်သူ က အားမလို အားမရ ဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ နူတ်ခမ်း အစုံ ကို ဆွဲ ငုံ စုပ်ပစ်လိုက် လေရာ ဒေါ်ဝင်းပပ ခမျာ အဖုတ်ထဲ မှာလည်း ဆန့်တငန့်ငန့် နူင့် အရှိန်တက် နေတုန်း မို့ မိုးအောင်သူ လည်ကုတ် ကို သူ့ လက်များဖြင့် ဆွဲယူသိုင်း ဖက်ပြီး ပြင်းပြသော ရမက် အနမ်းများဖြင့် တုန့်ပြန်လာ တော့သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်တန် နူစ်ချောင်းကလည်း မိုးအောင်သူ ခါးကို ညှပ်ကာ သူ့ခြေကျင်းဝတ်ခြင်းခြင်း မိုးအောင်သူ ဖင်အနောက်ဖက်ကို ချိတ်လျှက် သူ့ အဖုတ်ဆီ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး အဆုံးထိဝင်နိူင်အောင် ဆွဲ ယူ နေလေတော့သည်။
မိုးအောင်သူ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မအောင့် နိူင်တော့ပဲ အပြီး သတ်ခါနိး တိုက်သည့် မုန်တိုင်း လို တဖုန်းဖုန်း ပစ်ဆောင့်နေမိတော့သည်။ ..ဖွတ်..ဖတ်..ဖွတ်..ဖတ်.. ….ဗြွတ်..ဗျိ..စွတ်..ဖတ်…… ….အား…အား…. အိ..အိ… ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုယ်လုံးတခုလုံးလည်း တောင့်တင်း တုန်ခါ သွားပြီး မိုးအောင်သူ ကို တင်းတင်းကြီး ဖက်ထားလိုက်သလို၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်အတွင်း နံရံများက လည်း လှုပ်စိလှုပ်စိ ဖြင့် မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်း တချောင်း လုံးကို ဖျစ်ညှစ် ပေးသလို ဖြစ်နေတော့ ၊ မိုးအောင်သူ လိင်တန်ကြီး မှာ မခံနိူင်တော့ပဲ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ သုတ်ရည်များ ဒေါ်ဝင်းပပ စောက်ခေါင်း အတွင်းသို့ ပန်းထည့် ပစ် နေမိလေတော့သည်။
ဒေါ်ဝင်းပပ မှာ သူ့ အဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်ပူပူ နွေးနွေး များပန်းထုတ်လိုက်ပြီး တဖြးဖြေး ပျော့ သွားသော မိုးအောင်သူ လီး ကြီးကြောင့် အဖုတ် အတွင်း မှ အရည်များ စီး ထွက်လာရာ အိပ်ယာပေါ်ကျ ပြီး ကွက်ကုန် မှာ စိုး၍ ထမိန်ကို လုံးထွေး ကာ အဖုတ် ပေါ် အုပ်လျှက် ရေချိုးခန်းဆီသို့ ပြေးထွက်ခဲ့လေသည်။ မိုးအောင်သူ မှာ ရေချိုးခန်း ထဲ ပြေးဝင်သွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ နောက်ပိုင်း အလှ ကို ကြည့် ရင်း ရင်တွင်း မှာ ပီတိ တမျိုး ခံစားလိုက် ရလေသည်၊ အရင်က ထမိန်ဝတ်ထား သော ဤ ဖင်လုံးကြီး များ ကို ကြည့်လျှက် အံကြိတ် ခဲ့ ရသူ၊ အခုတော့ ဖင်ပြောင်ပြောင် ကို မြင်နေရခြေပြီ၊ တချီ တောင် လိုးပြီး သွားပြီ ဆိုတော့ နောင် အလားအလာ များက လည်း ကောင်းမည့် သဘောရှိနေသဖြင့်၊ မိုးအောင်သူ တယောက် သူ့ ကံ ကို ပင် သူ မယုံနိူင်အောင် ဖြစ်ရသည်။
ဒေါ်ဝင်းပပ ရူးပေါက် ပြီး သူ့ အဖုတ်လေးကို ဆပ်ပြာ သုံး ရေဆေး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်သည်၊ ထမိန် ကတော့ အရည်တွေ ပေ နေပြီမို့ အဝတ်လျှော်မည့် ခြင်းထဲ ပစ်ထည့် လိုက်သည်၊ နောက်တော့ အမွေးပွ တဘက်တထည် ဘေစင်အောက် ဘီရိုလေး မှ ထုတ်ကာ ခါးအောက်ပိုင်း ကို ပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ မှထွက်လာခဲ့လေသည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ထွက်လာတာမြင် ၍မိုးအောင်သူ ကရေချိုးခန်းထဲ ဝင် ပြီး သူ့ ကောင်ကြီး ကိုလည်း ဆပ်ပြာမွှေးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်သည်။ မိုးအောင်သူ ရေချိုးခန်း ထဲ မှ အိပ်ခန်း အတွင်း သို့ ပြန်ဝင်လာတော့၊ အဝတ် ဘီဒိုရှေ့ မှာ ဝတ်စရာ တခုခု ရှာနေသော ဒေါ်ဝင်းပပ ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အပေါ်ပိုင်း မှာ အင်းကျီချွတ်ထားပြီး အသားရောင် ဘရာဇီယာ ပျော့လေး ကို ဝတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်း မှာတော့ အမွှေးပွ သဘက်ကြီး ကို ပတ်ထား၏၊ မိုးအောင်သူ ထွက်လာတာ တွေ့လို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့၊ မိုးအောင်သူ မှာ ပုဆိုး မဝတ်ရသေးသဖြင့် လောလော လတ်လတ် ရေ ဆေး ထားသော မိုးအောင်သူ ၏ လိင်ချောင်းကြီး မှာ မပျော့ မ မာဖြစ်နေသ ဖြင့် လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း နာရီ ချိန်သီး ကဲ့သို့ ရမ်းရမ်း ရမ်းရမ်း ဖြစ်နေသည် ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။
…ဟေ့…လုံချည် ဝတ်တော့ တခါထဲ အရှက် ကို မရှိဘူး…. …ဟီး..အမဝင်း ကလည်း ဘယ်သူရှိ တာမှတ်လို့…ကျနော်တို့ ချည်းပဲ ဟာကို.. …အေးလေ ငါရှိနေလို့ ပေါ့ မျက်စေ့ထဲ မှာ ကိုးယိုး ကားယားကြီး…. မိုးအောင်သူ က ပြုံးလိုက်ပြီး အဝတ်ဘီဒိုရှေ့ ရပ်နေသော ဒေါ်ဝင်းပပ နောက်သွားရပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ တို့ အဝတ်ဘီဒို မျာ ခေတ်မှီ လှသော ကလော့ဆက် ဖြစ်ပြီး တံခါးမှာ ဘေးတိုက် ရှောတွန်းပိတ်ရသော မှန်တံခါး ဖြစ်လေသည်၊ မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ အနောက် မှာ ကပ်ရပ်ပြီး ဘီဒိုတံခါးကို ကြည့်လိုက်တော့ မှန်သားပြင်ပေါ်မှာ သူတို့ နူစ်ယောက် မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြလေသည်၊ မိုးအောင်သူ က မှန်သားပေါ်မှာ မြင်နေရသည့် ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ ဘရာဇီယာက အောက်က လျှံထွက်တော့ မလို မို့မေါက် ထွားဖွံ့ လှသည့် ရင်သားအစုံ ကို အနောက်ဘက်မှ သိုင်းဘက် ကာ သူ့ လက်ဝါး နူစ်ဘက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။
…ဟေး.. ဒေါ်ဝင်းပပ က မျက်ခုံးလေး ပင့်ပြီး ပြုံးစေ့စေ့ ဖြင့် တချက်လှမ်းတား သလို အသံပေးရင်း မိုးအောင်သူ့ လက်ကောက်ဝတ်နူစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်၊ သို့ သော်လည်း မိုးအောင်သူ ၏ လက်ဝါး နူစ်ဘက်ကတော့ အားရ ပါးရ ဆုပ်နှယ်နေပြီ ဖြစ်ရာ ဒေါ်ဝင်းပပ ပါးစပ် မှ ငြီးသံလေး တချက်ထွက်လာ ခဲ့သည်၊ ဖြေချထားသဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးလည်ခန့် ရောက်နေသည့် နက်မှောင်ထူထဲ သော ဆံပင်အုပ်ကို မိုးအောင်သူ က သူ့မေးဖြင့် အသာ ဖယ်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ လည်တိုင်လေး ကို ငုံနမ်းလိုက်သည်၊ သူ့ဖဝါး အောက်မှာလည်း မာတောင်ထလာသော ဒေါ်ဝင်းပပ နိူ့သီးခေါင်း နူစ်လုံး ပို သတိထား မိလိုက် သည်နူင့် သူ့လိင်တန်ကြီး ကလည်း တဖြည်းဖြည်း မာတင်း လာခဲ့ ပြန်ပါလေသည်၊ မှန်ထဲ မှာ ဒေါ်ဝင်းပပ မျက်လုံးလေး စင်းနေတာ တွေ့ရတော့ မိုးအောင်သူက ဒေါ်ဝင်းပပ ဘရာဇီယာကို ဂျိတ်ဖြုတ် ပြီး ပုခုံးနူစ်ဘက်မှ ကြိုးပါဖြုတ် ပြီး ကြမ်းပေါ် ပစ်ချလိုက်သည်၊
အိုး လှလိုက်တာ နည်းတဲ့ နိူ့ကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး၊ ဟု မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ မှာဖြစ်သွားရသည်၊ အခုမှ လွတ်လွတ် လပ်လပ် နိူ့ကြီး နူစ်လုံးကို အားရပါးရ ဆုပ်နှယ်ရင်း မာတောင်နေသော နိူ့သီးခေါင်း လေး များကို လက်ဖျားလေး များဖြင့် ကျစ်လိမ့်လိုက်တော့ ၊ ဒေါ်ဝင်းပပ ကြောင်မလေး ငြီးသံ မျိုး ငြီးလာပြီး သူ့ ခေါင်းကို လည်ပြန်လှည့်ကာ မိုးအောင်သူ နူတ်ခမ်းများ ကို အငမ်းမရ ပြန်နမ်းလာခဲ့သည်၊ မိုးအောင်သူ က သူ့လက်တဘက်ဖြင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးမှာပတ်ထားသည့် သဘက်ကို ဖြေချလိုက်သည်၊ လုံးဝန်း စွံကား ဖေါင်းအိလှသည့် ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးကြီး နူစ်ခု ၏ အထိအတွေ့က က အေးစက် အိတင်းနေသဖြင့် သူ့ လိင်တန်ကြီး မှာ အရမ်း ကို မာတင်း လာခဲ့ရသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ အဖို့ မှာလည်း ပူနွေးမာတောင်နေသည့် မိုးအောင်သူ ၏ လိင်ချောင်းကြီး သူ့ဖင်ကြားမှာ တိုးဝင်လာခဲ့သဖြင့် အိုကနဲ ပင် ဖြစ်သွားရပြီး သူ့ အဖုတ်တွင်း မှ အခုန ကထဲက စိုထိုင်းထိုင်း စဖြစ်နေရာက အခုတော့ အရည်လေးပင် စီးကျ ချင်လာခဲ့ရလေတော့သည်။
မိုးအောင်သူ က သူ့ကျောပြင်လေး ကိုတွန်းလိုက်တော့ အတွေ့ အကြုံ ရှိသော ဒေါ်ဝင်းပပ က သူ့ ဘီဒို မှန်တံခါးကို သူ့လက်နူစ်ဘက်ဖြင့် လှမ်းထောက် ပြီး သူ့ ဖင်ကြီး ကို ကော့ပေးလိုက်လေသည်၊ မိုးအောင်သူက လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ ကားစွင့်နေသော ဖင်ကြီး နူစ်လုံးကြား အောက်မှ ဖေါင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ်ကြီး အ၀ ကို သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို တေ့ ကာ ဖိသွင်းလိုက်လေသည်။ …အား..ကျွတ်စ်..ကျွတ်စ်.. ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ်ကြီးထဲ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီး ဆွိ ကနဲ ဝင်သွားတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ ဆီ မှ ငြီးသံလေး ထွက်လာခဲ့သည်၊ နာလို့ မဟုတ် အရသာရှိလှလွန်းလို့ပဲ ဖြစ်သည်၊ ငတ်နေတာ ကြာပြီမို့လား၊ မိုးအောင်သူ က ဒေါ်ဝင်းပပ ခါးကျင်ကျင်လေး ကိုကိုင်ကာ တချက်ချင်း အားပါပါဖြင့် ဆောင့်လေတော့သည်၊ သူ ကော့ဆောင့်လိုက်တိုင်း ရမ်းခါနေသော နိူ့ကြီး များကို သူတို့ ရှေ့ မှန်သားပြင်ပေါ် မှာ တွေ့နေရလေရာ၊ သူ့အတွက်တော့ ဗီဒီယို လည်းကြည့် ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ရသည့် အရသာ တွေ့နေရလေတော့သည်၊ ..စွီ…ဖတ်..ဖတ်..ဖွတ်.ဖတ်…ဖတ်… ..အား…အား…အင့်…အင့်….မိုးအောင်သူ ဒီနေ့ အလုပ် ကို အစောကြီး ရောက် နေသည်၊ အရင် အပတ်က သူ့ ဘောစိ ဒေါ်ဝင်းပပ နူင့် ရမက်နယ် လွန် ကျွံ သွားခဲ့ ရပြီး ၊ ဒါ ပထမ ဆုံး အကြိမ် ပြန်တွေ့ ရမှာမို့ အရမ်း ပျော်နေသည်။
သူ့ ကောင်ကြီး ကလည်း အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အောက် မှာ အတင်းတိုးထောင်ထ နေသဖြင့် ကျပ် ပြီး နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းဖြစ်နေရသည်၊ ဟောလာပါပြီ မမဝင်း၊ လှလိုက်တာ မမဝင်းရယ် လို့ မိုးအောင်သူ စိတ်ထဲ ရေရွတ်မိလေသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ လို့သာ ခေါ်နေကြတာ ဝင်းပပ က အသက် ၃၀ သာ ရှိသေးသည်၊ အလုပ်ထဲ မှာ လူကြီး ပုံပေါက် အောင် ဒီဂရီ သိပ်မရှိသော လိပ်ခွံကိုင်း မျက်မှန်တလက် ကို တတ်ထားရာ မိုးအောင်သူ မျက်စေ့ထဲ မှာတော့ မျက်မှန်ကြော်ငြာတွေထဲ က မော်ဒယ် နဲ့ တောင် တူသေးတယ် လို့ တွေးမိသည်၊ ရုံးခန်း ထဲ ဝင်လာတော့ နူတ်ဆက်ကြတဲ့ သူတွေ ကို စကားပြောရင်း သူ့ အခန်းရှိရာ သူလျှောက်လာရင်း လမ်းမှာ မိုးအောင်သူ နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆိုင်မိ ပြီး မျက်နှာလေး ရဲ ကနဲ ဖြစ်သွား၏၊ ..ဂွတ်မောနင်း အမဝင်း.. …အေးအေး ဂွတ်မောနင်း မောင်မိုး… ဟု ဆို ပြီး သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် နူင့် သူ့ အခန်းထဲ ဝင်သွားတော့သည်။
ဝင်းပပ ပေါင်ခွဆုံ မှာတော့ စိုတိုတို ဖြစ်လာခဲ့သည်၊ တကယ်တော့ တနင်္ဂနွေ တရက်လုံး အိမ်မှာ တယောက်ထဲ နေရင်း အိမ်မှာ ဟိုနေ့ က မိုးအောင်သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာ ပြန်စဉ်းစားရင်း သူ့ အဖုတ်လေး သူ ပွတ်နေခဲ့ မိသည်၊ ကိုတင်ထွတ် ဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ကိုတင်ထွတ်တို့ ဆီ မေမေ ရောက်နေသည်၊ မေမေ က သူတို့ မြို့ မှာ နေရတာ ပျင်းလို့ တဲ့ ဖေဖေ့ ကို ထားခဲ့ ပြီး ကိုတင်ထွတ် ရှိရာမြို့ လာလည် နေသည်တဲ့၊ နေကောင်းလား ဘာညာမေးပြီး ဖုန်းချလိုက်သည်၊ ဝင်းပပ အဖုတ်လေး ကတော့ ရွစိရွစိ နဲ့၊ အရှိန်ရ နေပြီလေ၊ ဟိုနေ့ က မိုးအောင်သူ ၃ ချီ ဆွဲ လိုက်တာ ဝင်းပပ တောင် တော်တော်လေး နူံးသွားသည်၊ ဒါတောင် ကိုယ်တော်ချော က နှပ်ပြီး နောက်တချီ လုပ်ဖို့ ကြံနေသေးသည်၊ အိမ်က လူတွေ ရိပ်မိကုန်မှာ စိုးလို့ နှင်လွတ်လိုက်ရသည်၊ လူပျို လူငယ် ဆိုတော့ တချိန်လုံး မာနေသလား မသိ၊ ဝင်းပပ တောင် တော်ပါပြီ ဖြစ်သွားရသည်၊ သို့သော်လည်း မိုးအောင်သူ ပြန်သွားပြီး ခနနေတော့ သူ့ အဖုတ် က ပြန် တောင်းဆိုလာပြန်သည်၊ နောက်နေ့ စနေ အလုပ်မသွားတော့ အိမ်မှာပဲ နားလိုက်သည်၊ သူ့ အလုပ်က တော့ နေ့တဝက် ဖွင့်သဖြင့် မိုးအောင်သူ ရောက်နေမယ် ဆိုတာ သိသည်၊
ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ မှန်းမသိ ရင်မဆိုင်ချင် သေးတာရယ်၊ သူ့အတွက် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေး ကို ဘယ်လို ဆက်ထိန်း ရ မလဲ ဆိုတာ လည်း မစဉ်းစားတတ် ဘူး ဖြစ်နေတာရယ် ပါသည်၊ ဝင်းပပ မှာ ဒါမျိုး အတွေ့ အကြုံလည်း မရှိ၊ တခါမှ လည်း မဖေါက်ပြန်ဖူး၊ ကိုယ့် ယောက်ကျား ကလွဲရင်၊ ဒါ ပထမဆုံး တစိမ်း ယောက်ကျား တယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ဖူးတာ ပဲ၊ အင်းလေ ကိုယ့်ဘာသာ ခတ်တည်တည် နေရင် ကောင်လေး မစ ရဲ လောက်ပါဘူးလို့တွေးရင် သူ့ စားပွဲ ပေါ်က စာရွက်စာတမ်းတွေ လှန်လှောရင်း အလုပ်ထဲ စိတ်မြုပ် ဖို့ ကြိုးစားနေ လိုက်သည်။ …အမဝင်း..ဒီမှာ အမဝင်းအတွက် ကော်ဖီ.. ခေါင်းငုံ့ အလုပ်လုပ်နေသော ဝင်းပပ တယောက် မိုးအောင်သူ အသံကြားတော့ မော့ကြည့်မိသည်၊
ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ ဂုတ်ထောက်နူင့် မျက်နှာနုနု မိုးအောင်သူ ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ရင်ထဲ လှပ်ကနဲ ဖြစ် သွားသည်၊ ဒီနူတ်ခမ်း တွေ ပဲ ဟိုနေ့ က သူ့ နိူ့သီးခေါင်း တွေ ကို အငမ်းမရ စို့ ခဲ့တာ၊ သူ့ အဖုတ် ကိုလည်း ယုယုယယ နမ်းရူံ့ရက်ပေးခဲ့တာ ၊ ဝင်းပပ မျက်နှာ ပန်းရောင် တချက် ဖြန်းသွားသည်၊ …အေးအေး ကျေးဇူးပါကွယ် မောင်မိုး… ဝင်းပပ က သူ့အလုပ်စားပွဲ ကြီးကိုပတ်ကာ သူ့ သားရေကုလားထိုင် ဘေးနားလာရပ်ပြီး ကော်ဖီခွက်ကို စားပေါ်ပေါ်လာချ ပေးသော မိုးအောင်သူ ကို တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်၏၊ သူ့လည်ချောင်း မှာ နည်းနည်း ကပ်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် လည်း ဟင်းဟင်း ဆိုပြီး လည်ချောင်းတချက် ရှင်းလိုက်မိသည်။
သူကော်ဖီခွက်ကို ယူပြီး တငုံ သောက်လိုက်ချိန်ထိ မိုးအောင်သူ မလှုပ်မရှားရပ်နေသေးတာ တွေ့လိုက်ရ ၍ မော့်ကြည့်လိုက် မိသည်၊ ..အမဝင်း နေကောင်းလား.. …အင်း ကောင်းပါတယ်..ဘာဖြစ်လို့လဲ ..မောင်မိုးရော… ….အင်း ဟိုနေ့ က အမဝင်းဆီက ပြန်လာပြီးကတဲ ကနေလို့ မကောင်းတော့ဘူး.. …ဟင် ဟုတ်လား…ဘာဖြစ်လို့လဲ… ….ဒီမှာလေ ကြည့်ပါလား..တချိန်လုံး အဲလိုဖြစ်နေလို့… …အို…. ဒေါ်ဝင်းပပ အိုဖြစ်လောက်စရာပါပဲ၊ မိုးအောင်သူ ပြနေတာက သူ့ ပုဆိုးအောက် က ထိုးထောင်ထ နေသော ဒုတ်ကြီး၊ ဝင်းပပ အာတောင် ခြောက်သွားရသည်၊ သူ့ ပေါင်ခွဆုံ မှ စိုစွတ်စွတ် က အခု တော့ ပိုရွဲလာသလို ဖြစ်သွားရသည်၊ ..ဟဲ့ မောင်မိုး..လူတွေ မြင်ကုန်မယ်နော်.. ..အမဝင်း ..ကျနော် ဖိုင် စတိုခန်းမှာ စာရွက်သွားရှာမယ်နော် အမဝင်း ခနလေး လိုက်ခဲ့ ငါးမိနစ် ပဲ နော် .. မိုးအောင်သူက ပြောပြောဆိုဆို လှည့်ထွက်သွား၏၊ ဝင်းပပ ဘာပြောရမှန်းပင် မသိကြောင်ပြီးကျန်ခဲ့သည်။ သူတို့ ရုံးဖိုင်စတိုခန်းမှာ ကျဉ်းကျဉ်း ရှည်ရှည်နူင့် စာကြည့်တိုက် လို ဖိုင်တွေကို စင်တွေနဲ့ တင်ထားသည်၊
တော်ရုံလူတွေ ဝင်ခွင့်မပေး အမြဲ သော့ခတ်ထားလေ့ရှိသည်၊ သူတို့ မိန်းအော့ဖစ်၏ အပေါ်ထပ် အလွှာမှာ ရှိတော့ လူလစ် လို့ တယောက်ချင်းဝင်လျှင် အထဲ မှာ လူရှိနေမှန်းပင် မသိရပေ၊ မိုးအောင်သူ အတွင်းဘက် ဖိုင်စင်တွေ ကြားထဲ မှာ တယောက်ထဲ စောင့်ရင်း ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရသည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ လာမှ လာပါ့မလား၊ စောင့်နေရသည်မှာ သူ့အတွက် ကြာလှသည်ဟုထင်မိလေသည်၊ နာရီကို ကြည့်တော့ ၁၀ မိနစ်တောင် မရှိသေး တံခါးသံ ချက်ကနဲ ကြားပြီး လူဝင်လာသံ ကြားမှ သူ့ ကောင်ကြီးလည်း ဒိန်းကနဲ ပြန်ထောင် ထလာသည်၊ …မောင်မိုး..ဘယ်မှာလဲ.. မိုးအောင်သူက အတွင်း ထောင့်နား မှာ ဆိုတော့ ဝင်းပပ မမြင်ရခြေ၊ သူ အတွင်းဘက် လျှောက်ဝင်လာမှ မိုးအောင်သူ ၏ ရုတ်တရက် သိမ်းကျူံး ပွေ့ဖက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသည်၊ သူတို့ နူစ်ဦးသား ၏ မွတ်သိပ်လှသော အနမ်းတွေ က နူစ်ဦး စလုံးကို သွေးတွေ ဆူဝေ လာစေခဲ့သည်၊ မိုးအောင်သူ က သူ့ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံချွတ်ချလိုက် သဖြင့် မတ်ထောင်နေသော လိင်ချောင်းကြီး က ဝင်းပပ ဗိုက်သားလေး ကို သွားထောက်မိသည်၊
မိုးအောင်သူ လက်ဖဝါးတွေ က ဒေါ်ဝင်းပပ ၏ မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်း ရင်အုံပေါ် ကို ရောက်သွားတော့ ဝင်းပပ က လှမ်းဆုပ်ကိုင် ဖမ်းထားလိုက်သည်၊ …မလုပ်နဲ့ မောင်မိုး အင်းကျီတွေ ကြေကုန်မယ်.. မိုးအောင်သူက မချင့်မရဲ နူင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ထမိန်ကို ဖြေချွတ်တော့ ဒေါ်ဝင်းပပ မငြင်း ပါ အသာဖြေ ချွတ်လိုက်ပြီး ဘေးနားက ကုလားထိုင်တလုံး နောက်မှီပေါ် လှမ်းတင်လိုက်သည်၊ ဖြောင့်စင်းပြိး လုံးကျစ် လှပလှသည့် ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်တန်တွေ က ဝင်းကနဲ ပေါ်လာပြီး အသားရောင် ပင်တီလေးက ပေါင်ခွကြားမှာ စို ကပ်နေ၏၊ မိုးအောင်သူက ဒေါ်ဝင်းပပ ပင်တီလေး ကို သားရေကြိုးမှ ကိုင်ကာ ဆွဲချွတ်တော့လည်း မငြင်းရှာပါ၊ အိုး လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်လေး၊ မိုးအောင်သူ မျက်လုံးရှေ့မှာ အမွှေးအမြှင် မရှိ ဖွေးနု ဖေါင်းမို့ နေသော်လည်း ညိုတိုတို နူတ်ခမ်းအဖတ်လေး ဟ နေပြီး ပန်းရောင်ရင့်ရင့် အတွင်းသားလေး စိုတိုတို ကို တစွန်းတစတွေ့ နေရသည်။
မိုအောင်သူက ဒေါ်ဝင်းပပ ရှေ့မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လိုက်သည်။ ဒေါ်ဝင်းပပ ခြေထောက်တဖက်ကို မ ပြီး ဘေးနားက ကုလားထိုင်ပေါ်တင်လိုက်ကာ ကားသွားသော ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်ခွဆုံ ကြား သူ့မျက်နာကို အပ် လိုက်တော့သည်။ မိုးအောင်သူ ၏ လျှာကြီး သှူုအဖုတ်နူတ်ခမ်း ကို စိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ နွေးကနဲလာ ထိတော့ ဒေါ်ဝင်းပပ တကိုယ်လုံး နွေး ကနဲဖြစ် သွားပြီး အကြောတွေတောင်တောင့်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲပြိုမသွားအောင် မိုးအောင်သူ ဆံပင်ကို ဆွဲဆုပ်ကာ ကိုင်ထိန်းထား လိုက်မိပြီး မျက်လုံးကို လည်းတင်းတင်း ကြီး ပိတ်ထားမိ လေတော့သည်။ မိုးအောင်သူ ကတော့ သူ သွားရည် တမြှားမြှား ကျခဲ့ ရသော ဝင်းပပ ဖင်လုံးကြီး များ ကို လက်ဝါး နူစ်ဖက်က ဆုပ်နှယ်ပြီး သူ့ လျှာကြီး က ဒေါ်ဝင်းပပ အဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်း ကြီး ကို အားရ ပါးရ တပြတ်ပြတ် ကုန်းရက်နေမိလေတော့သည်၊ ဒေါ်ဝင်းပပ မှာလည်း မိုးအောင်သူ ဘာဂျာ အပေးကောင်းမှုကြောင့် မကြာခင်ပဲ တွန့်တက်ကာ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် သို့ ရောက်သွားရလေသည်၊
ဝင်းပပ က မိုးအောင်သူ ကို အသာ ဆွဲထူရင်း …မောင်မိုး ဒီထဲ မှာ တို့ သိပ်ကြာလို့ မရဘူး နော်… …ဟုတ်..အမဝင်း..ဟို စားပွဲ ကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးမလား ကျနော် အနောက်က လုပ်လိုက်မယ် နော်.. ဒေါ်ဝင်းပပ စကား ဆက်မရှည်တော့ပါ၊ မိုးအောင်သူ ကို ကျောပေးပြီး စားပွဲခုံစွန်းလေး ကို လက်နူစ်ဘက်ဖြင့် ထောက်ကိုင်ကာ သူ့ ဖင် ကြီးကို အနောက်ဖက် ကော့ပေးလိုက်လေသည်၊ သေးကျင်သော ခါးလေး အောက်မှ စွံကားတက်လာပြီး လုံးကျစ် ဝိုင်းစက်နေသော ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး က မိုးအောင်သူ့ မာနေသော လိင်ချောင်း ကြီး ကို မထိန်းနိူင်လောက်အောင်တဆတ်ဆတ် တုန်လာစေခဲ့သဖြင့် အချိန်မဆိုင်းတော့ ပဲ ဝင်းပပ အနောက် မှာ နေရာယူ၊ ဝင်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမှ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း အ၀ မှ တေ့ကာ ဖိသွင်း လိုက်လေတော့သည်။ …စွိ…စွတ်… ..အား…အင်း… နူစ်ယောက်စလုံး က အသံ ကျယ်ကျယ် မထွက်ရဲ ကြသော်လည်း ကာမစည်းဇိမ် အရသာ ကောင်းလှသောကြောင့် တိုးတိုး လေး ညှီး ညူရင်း တက်ညီလက်ညီ လိုးနေကြရာ၊
အခန်းလေး တွင်းထဲ အရည်ရွမ်းနေသော အဖုတ်ကြီးထဲ လိင်ချောင်းကြီး ဝင်ထွက်နေသံ၊ မိုးအောင်သူ ပေါင်ခြံနူင့် ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးကြီး များ ရိုက်ခတ်မိသံ တဖတ်ဖတ် တို့သာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီး ပေါ်ထွက်လာနေလေတော့သည်။ ….အား ကောင်းလိုက်တာ အမဝင်းရယ်..အမ အဖုတ်ကြီး က အီစိမ့်နေတာပဲ လိုးရတာ.. .အင်း…တို့ လည်း ကောင်းတာပါပဲ ကွယ်… နောက်ဆုံး မိုးအောင်သူ က သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို အဆုံးထိ ဖုန်းကနဲ ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ စောက်ခေါင်းထဲ သုတ်ရည်တွေ တထုတ်ထုတ် ပန်းထည့် ပစ်လိုက်တော့သည်။ ဝင်းပပ ရုံးရောက် ချလာတော့ မိုးအောင်သူ အံသြသွားသည်၊ မနေ့က ပြောတော့ ဒီနေ့ ကိုတင်ထွတ်ကို သွားကြိုရမှာ မို့ မလာတော့ဘူးတဲ့၊ အခု တော့ ရုံး ထဲ ရောက်ချလာ လိုက်တာ အပါး လှလှခြေလား၊ ဒီနေ့ အပြာရောင် မင်းသမီးလေး ပါလား၊
အပေါ်က မိုးပြာရောင် ဗြောင် ကို လက်ပြတ်မကျ လက်စကလောက်လည်း မရှည် ခေတ်ဟောင်းတုန်းက စတိုင်မျိုးကို ခေတ်ဆန်ဆန်ပြန် ပြင်ထားတဲ့ ရင်စိ၊ ကော်လာထောင်လေးနဲ့ ခါးတို အောက်က ထမိန်အထက်ဆင် ဖုံးရုံလေး၊ အောက်ကတော့ အပြာခံမှာ ကန်လန့်ဖြတ် လှိုင်းတွန့် အလုံးကြီးတွေ ပုံစံ အချိတ် ထမိန် နဲ့ အဲဒီ လှိုင်းကြီး က ဒူးဆစ် လောက်မှာပဲ ပတ်တယ် ရှမ်းထမိန်တွေ လိုမျိုး၊ ဆိုတော့ တင်သားနေရာ မှာက အပြာဗြောင်လေး ပဲ၊ ဖြစ်နေတယ်၊ ခါးမှာတင်းတင်းလေး ပတ်ဝတ်ထားတဲ့ ထမိန် ကြောင့် စွင့်ကား လုံးကျစ်နေတဲ့ တင်သားတွေက ထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေ တယ်၊ မိုးအောင်သူ မနေ့က တနေ့ လုံး စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပြီးတာတောင် သူညီတော်မောင်က ချက်ချင်းခေါင်းထောင်ထ လာတယ်။
အမဝင်း ဒီနေ့ မလာတော့ဘူးမှတ်လို့..ဆရာ့ လေယာဉ်က ဘယ်အချိန်ဆိုက်မှာလဲ… …နေ့လည်မှလေ အဲဒါကြောင့် အိမ်မှလည်း နေရမှာ ပျင်း..ဒီမှာလည်းလုပ်စရာလေး တွေ ရှိ လို့ ထွက်လာတာ.. ဝင်းပပ သူ့ အခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်နေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူ မှာသာ ငေါင်တောင်တောင် ဖြစ် နေပြီး ၊ တကယ်လို့ ကိုတင်ထွတ် ပြန်ရောက်လာ လျှင် သူ ဘယ်လို နေရ ထိုင်ရ မလည်း ဆိုတာကို စဉ်းစား ဦးနှောက်စားနေလေသည်။ …ဟေး မောင်မိုး ဒီဖိုင် ထဲ မှာ လိုနေတဲ့ အင်ဗွိုက်တွေ ရှာပြီး ဖြည့်လိုက်အုန်း.. ရုတ်တရက် သူ့ စားပွဲရှေ့ရောက်လာပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ဒေါ်ဝင်းပပ အသံကြောင့် မိုးအောင်သူ ရုတ်တရက် လန့်သွားပြီး အတွေးပျက်သွား၏၊ ရုတ်တရက် မျက်နှာပျက်သွားသော ၊ဆပ်ကနဲ တုန်သွားသော၊ မိုးအောင်သူ ကိုကြည့်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ လည်း တမျိုးကြီး ခံစားလိုက်ရသည်၊
..မောင်မိုး နေကောင်းရဲ့လား… …ကောင်းပါတယ် အမဝင်း ..ဖိုင် တွေ ဆိုမှ ကျနော် တခု ပြစရာရှိသေးတယ် အဲဒါ အရေးကြီးမယ် ထင်တယ် ဟို ဖိုင်အခန်းထဲမှာ..ခနလောက် လိုက်ကြည့်ပါအုန်း.. မိုးအောင်သူက ပြောပြောဆိုဆို ထထွက်သွားလိုက်၏၊ ဝင်းပပ တယောက် ချီတုံချတုံ ဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်၊ သူတို့ မိုးအောင်သူ သူငယ်ချင်း ဆီက ဘိ ရပြီးကတဲက ထိုဖိုင်ခန်းလေး ကို လုံးဝ မသွားကြတော့ အန္တာရယ် အလွန်များ ၍ ဖြစ်သည်၊ အခု တော့ မိုးအောင်သူ တခုခု ပြောခြင်လို့ထင်သည်၊ ဟု တွေးကာ ဒေါ်ဝင်းပပ လိုက်သွားလိုက်လေသည်၊ ဝင်းပပ အခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည်နူင့် မိုးအောင်သူက အခန်းတံခါးကို ဂျက်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်ဝင်းပပ ကို အတင်း ပွေ့ဖက်ကာ အသည်းအသန် နမ်းပစ်လိုက်သည်၊ ဝင်းပပ က အတင်းတွန်းထားပြီး၊ …မိုးလေး..မနေ့ က ပဲ ကိုယ်တို့ သဘောတူချက်ရပြီးပြီလေ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပါမယ် ဆိုတာ..
..အင်းလေ အမဝင်းရယ်..ကိုတင်ထွတ် လာရင် လို့ပြောထားတာလေ ကိုတင်ထွတ်မှ မရောက်သေးပဲဟာ.. …မိုးလေးက ရစ်ပြီကွာ..ကိုယ် ဒီကနေ သွားကြိုမှာ အဝတ်အစားတွေ ကြေလို့ မရဘူးလေ.. …အင်းပါ အမဝင်းရယ် အမဝင်းက အရမ်းလှလွန်းတော့ ကျနော့်ကောင်ကြီးပေါက်ကွဲတော့မယ်ဗျ ဒီမှာကြည့်.. ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် မိုးအောင်သူ က သူ့လုံခြည်ကို ကွင်းလုံးပုံချွတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံကို ပေါင်လည်ဆွဲချလိုက်သည်၊ သူ့ ဖွားဘက်တော် လိင်တန်ကြီး က ထောင်ကနဲ ထွက်လာသည်၊ အကြောပြိုင်းပြိုင်း နှင့် ဖေါင်းကား တင်းမာနေသော လိင်ချောင်းကြီးက တလုံးထဲသော မျက်စေ့ဖြင့် ဝင်းပပ ကို ကြည့်နေ၏၊ ..ကဲ ဒါဆိုလဲ လာ မမ စုပ်ပေး မယ် မြန်မြန်လေး စိတ်လျှော့လိုက်နော် မထိန်းထားနဲ့ … ဝင်းပပ က ပြောပြော ဆိုဆို မိုးအောင်သူ ကို လိင်တန်ကြီး မှ ဆွဲ ဆုပ်ကိုင် ခေါ်သွားပြီး အခန်းထောင့်က စက္ကူ ပုံးပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်၊
မိုးအောင်သူ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ဝင်းပပ အထိုင် ၊ မိုးအောင်သူ လိင်ချောင်းကြီးနဲ့ ဝင်းပပ ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ က တည့်နေပေတော့ရာ၊ ဝင်းပပ က ထုံစံအတိုင်း ပုလွေ ပညာပြကာ မိုးအောင်သူ လီးကြီး ကို စစုပ်လေတော့သည်၊ လီးကြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာသည် နှင့် ဒေါ်ဝင်းပပ တယောက် အပြင်လောက ကို မေ့လေပြီ ၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖီးတွေ တက်လာပြီး အားတက်သရော စုပ်သလို သူ့ အဖုတ်တွင်းကလည်း အရည်ကြည် စိမ့် ထွက်ကျလာပြီ၊ ဆယ်မိနစ်မျှ စုပ်ပေးသော်လည်း မိုးအောင်သူ တယောက် ပြီးမဲ့ ပုံမမြင်၊ ဘယ်ပြီးမလဲ မနေ့ က တနေကုန် တနေခန်း ဆော်ထားတာ ဆိုတော့ တချီပြီးဖို့ တော်တော်ကြာနေတာပေါ့၊ ဒေါ်ဝင်းပပ လည်း မထူးတော့ ဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
မိုးအောင်သူ လီးကြီးကို သူ့ပါးစပ်မှ ပြွတ် ကနဲနေအောင် ဆွဲထုတ်ပြီး မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်၊ ..ကဲ မိုးလေး လာလာ ငါ့အဝတ်အစားတွေ မကျေအောင်လုပ်နော် … ဒေါ်ဝင်းပပ သူ့ ထမိန်ကို ကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ကုလားထိုင်နောက်မှီမှာ ခေါက်တင်လိုက်သည်၊ နောက် သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခြေကျင်းဝတ်ထိ ဆွဲချကာ ခြေထောက်တဘက်ကို မထုတ်လိုက်သည်၊ နောက်တော့ စားပွဲခုံကို လက်နူစ်ဘက်ဖြင့်ထောက်ကိုင်ကာ ဖင်ကို နောက်သို့ ကော့ပေးလိုက်သည်၊ မိုးအောင်သူ တယောက် ကမန်းကတန်း ပင် ဒေါ်ဝင်းပပ အနောက်မှာ နေရာယူ ပြီး သူ့ လီးကြီးကို သူလက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ဒေါ်ဝင်းပပ ပေါင်နူစ်လုံးကြားမှ အနောက်သို့ ပြူနေဟန်ရှိသည့် နူစ်ခမ်းထူထူ အဖုတ်ကြီး အဝတွင် တေ့လိုက်လေသည်၊ နောက်တော့ ဖြေးဖြေးချင်း ဇိမ်ခံသွင်း ရာမှ အရှိန်တက်လာတော့သည်၊ နောက်တော့လည်း ဒေါ်ဝင်းပပ ဖင်လုံးများနှင့် မိုးအောင်သူ ပေါင်ခြံတို့ တဖတ်ဖတ် ရိုက်သံ များနဲ့ အတူ အသက်ရူသံတွေလည်း မြန်လာကြသည်။
မကြာခင် အတွင်းမှာပင် တယောက်နှင့်တယောက် အထာသိနေကြပြီ ဖြစ်သော သူနှစ်ဦးတို့ ပြိုင်တူ ကာမ အရသာ အထွတ် အထိပ် သို့ ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။အချစ် ကြည့်စမ်း မတွေ့ရတာ ကြာ လို့ ပိုမိုက်လာတော့တာပဲ.. …အင်း ပါ တွေ့မှ ချွဲပြီ တခါထဲ အဝေး မှာတုန်းကတော့ ဖုန်းကို တပတ်တခါ အနိူင်နိူင် ဆက်ပြီးတော့.. ကိုတင်ထွတ်က ဝင်းပပ ကိုယ်လုံးလေး ကို ထွေးဖက်ပြီး နူတ်ခမ်းအစုံကို ဖမ်းစုပ်လိုက်သည်၊ မတွေ့ရတာ ကြာနေပြီ ဖြစ်သော မယားချော လေးမို့ ကိုတင်ထွတ် ပစ္စည်းကြီးက မာတာတာ ဖြစ်လာပြီး ဝင်းပပ ပေါင် ရှေ့ပိုင်း ကို သွားထောက်မိလေသည်၊ ဝင်းပပ စိတ်ထဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မလုံ မလဲ တော့နည်းနည်း ဖြစ်သွားသည်၊ အခုန နာရီပိုင်းလေး က မှ မိမိ နူတ်ခမ်းတွေ က မိုးအောင်သူ လီးကြီး ကို စုပ်ခဲ့သေးသည်၊ ပြီးတော့ မိုးအောင်သူ က လည်း လိုးလိုက်သေးသည်၊
မိုးအောင်သူ က တော်တော် နဲ့ မပြီးနိူင်လို့ လေဆိပ် ထွက်ဖို့ အချိန်ကပ်သွားခဲ့ရသည်၊ ပလုပ်ကျင်းဖို့ အဖုတ်ဆေး ဖို့ အချိန်မရတော့၊ မိမိ အဖုတ်ကို တစ်ရူး ဖြင့် သုတ်ကာ သန့်စင်ခဲ့သော်လည်း မိုးအောင်သူ သုတ်ရည်တွေက အတွင်းထဲ မှာကျန်နေသေးသည်၊ သူ လေဆိပ်ကို ကမန်းကတန်းမောင်းလာတော့သူ့ အဖုတ်တွင်းက တစိမ့်စိမ့် ပြန်ထွက်လာသဖြင့် သူ့ ပင်တီ မှာ စိုစိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေရသေးသည်၊ လေဆိပ်ရောက်တော့လည်း သူအတွင်းဝင်လို့ ရအောင် လုပ်ပေးမည့် အဆက်အသွယ်ကို လိုက်ရှာရ နောက် လေယာဉ် ကလည်း ဆိုက်လာပြီ ဆိုတော့ အချိန်မရတော့ခြေ။
ကိုတင်ထွတ် နူင့် ဝင်းပပ အခန်းတွင်း ရောက်သည်နှင့် ကိုတင်ထွတ် က ကြမ်းတော့သည်၊ ဝင်းပပ လည်း လင်တော် မောင် ဆိုတော့ မငြင်းဖယ်နိူင်၊ ကိုတင်ထွတ် အကိုင် အတွယ် အပွတ်အသပ်များ ဖြင့် ဆန္ဒရမက် တွေ ပြန်လည် နိူးထ လာရသည်၊ ကိုတင်ထွတ် သူ့အတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်တော့ မှ ဝင်းပပ သတိရသည်၊ ဒုက္ခ ပဲ ငါ ဆေးဖို့ မေ့သွားပြီ၊ သူများသိသွားမလား၊ ရင် ထဲ မှာ တထိတ်ထိတ် နှင့်၊ …အင်း အချစ် လည်း ကို့ ကို စောင့်နေရတာ ကြာနေပြီ ထင်တယ် ဟင်းဟင်း..အချစ် အရည် ဒီလောက်ရွဲ တာ တခါမှ တောင် မတွေ့ဘူးသလိုပဲ .. ….အို..ကိုကလည်း… ကိုတင်ထွတ် က အားရဝမ်းသာ စွာဖြင့် သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို စွပ်ကနဲ ဝင်းပပ အဖုတ်ဝ တွင်တေ့ကာ စသွင်းကထဲက အားကုန် ဆောင့်လေတော့သည်၊ ဝင်းပပ မှာလည်း ပြီးခဲ့သည့် နာရီပိုင်းလေး ကမှ မိုးအောင်သူ လီးကြီး ဝင်ထွက်သွားခဲ့သော သူ့ အဖုတ်တွင်းသို့ ကိုတင်ထွတ်လီး ကြီး ဝင်ထွက်လာခဲ့ သည်မှာ စိတ်ထဲ တမျိုး ဖြစ်သော်လည်း သူ့ စိတ်တွေက ပိုမို တက်ကြွ သလို ဖြစ်နေခဲ့ရလေသည်၊
ထိုအတွက် ကြောင့်လည်း သူ့ကိုယ်တိုင်က ကိုတင်ထွတ် ကိုယ်ကြီး ကို တအားဖက်တွယ်လျှက် သူ့ ဖင်ကြီးကို ကော့ကာကော့ကာ အားရ ပါးရ တုန့်ပြန် နေမိလေတော့သည်၊ ကိုတင်ထွတ်မှာ ယောက္ခမ ကြီးထက်စာလျှင် ပိုမိုကျစ်လစ် ကာ နုပျို တောင့်တင်း သော ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုင်ရှင် ဇနီးချောလေး ကို မလုပ်ရတာ ကြာပြီ မို့ စိတ်အရမ်း တက်ကြွနေရာ များ မကြာခင်မှာပင်၊ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ပြီး တချီပြီးသွားရလေသည်၊ ဝင်းပပ မှာလည်း သူ့ စောက်ခေါင်းတွင်းထဲ မှာ ယောက်ကျား နူစ်ယောက် ၏ သုတ်ရည်တွေ ရောနှော သွားပြီး သူ့ အဖုတ်တွင်းမှ ပင် လျှံကျလာကာ ဖင်ကြားသို့ စီးဝင်သွားတာ ခံစားသိနေရ လေရာ မကြုံစဖူး အတွေ့ အကြုံကြောင့် အကြောလေး တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက်သွားရ လေတော့သည်။ဝင်းပပ တယောက် လည်း စိတ်ရှုတ်ထွေးနေရသည် ဘာမှန်း တော့ မသိ၊
ကိုတင်ထွတ် ပြန်ရောက် တော့ သူ့ငယ်ချစ် လည်း ဖြစ် လင်လည်း ဖြစ်သူ နူင့် အတူတူ ပြန်နေလိုက်ရ လျှင် မိမိ ဘ၀ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွား လိမ့်မည် ဟု ထင်ထားခဲ့သော်လည်း တကယ် တမ်းကြ တော့ ထင်သလို မဖြစ် နိူင်တော့မှန်း တဖြေးဖြေး ရိပ်မိလာခဲ့ ရသည်၊ ကိုတင်ထွတ် နူင့် သူ ခွဲနေရတာ ကြာ လို့ ညတိုင်း လိုလို အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်၊ သူ ကလည်း မိုးအောင်သူ နှင့် အတွေ့ အကြုံအသစ်များ ရလာခဲ့ သလို၊ ကိုတင်ထွတ် ကလည်း ဒေါ်ဒေါ်လှ ဆီ က အတွေ့အကြုံ များ ရခဲ့တာကို တော့ သူ သတိမထားမိ၊ ည ဘက် ကို တင်ထွတ် နဲ့ ကောင်းကောင်း အလိုးခံ ခဲ့ရပြီး အလုပ်ရောက် လာတော့ မိုးအောင်သူ နှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင် စေ့စေ့ မကြည့်ရဲ မျက်နှာပူ သလို ဖြစ် နေရသည်၊ မိုးအောင်သူ ၏ မျက်လုံး မျက်နှာထား တွေက ကြေကွဲ ဆွေးမြေ့နေ သလိုလို ၊ နှမြောနေ သလိုလို ဖြစ်နေသည်ဟု ဝင်းပပ စိတ်ထဲ မှာ ထင်နေ ခဲ့သည်၊
တကယ်က မိုးအောင်သူ နှင့် သူ က ကို တင်ထွတ် အပေါ် ဖေါက်ပြန် ခဲ့ သော်လည်း၊ အခု ဝင်းပပ စိတ်ထဲ မှာတော့ သူ မိုးအောင်သူ အပေါ်မှာ သစ္စာဖေါက်မိ နေသလို ခံစားနေရ၏၊ ဝင်းပပ နှင့် ကိုတင်ထွတ်က လည်း ရုံးကို အတူတူ လာနေကြတာမို့ မိုးအောင်သူ အတွက် က လည်း အနားကပ် ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိူင်တော့ခြေ၊ ထို့ အပြင် မိုးအောင်သူ ကို လည်း အလုပ်မှာ စိတ်ချ အားကိုးရပြီမို့ ကိုတင်ထွတ် လုပ်ခဲ့သည့် မြို့ ကို လွတ် ဖို့ အစီအစဉ် ပင် လုပ်နေပြီ ဖြစ်လေသည်၊ မိုးအောင်သူ က လည်း ဒီအတိုင်း ရုံးမှာ စိတ်ဆင်းရဲ နေရမည့် အတူတူ စိတ်ပြေလက်ပျောက် နယ် ကို သွားတာက ပိုကောင်းမည် ဟုတွေးကာ အမြန် ဆုံးသွားနိူင်အောင် ပြင်ဆင်တော့သည်၊ မိုးအောင်သူ နယ် မသွားခင် အမဝင်း နဲ့ တရက်လောက် အားရအောင် ချစ်ပါရစေ လို့ တောင်း ဆိုလာပြန်တော့ နဂိုလ်ထဲ က မှ စိတ်ယိုင်နေသည့် ဝင်းပပ တယောက် သူကြိုးစား ကြည့်မယ် လို့ ပြောလိုက်ရလေသည်။
မိုးအောင်သူ နယ်မသွားခင် တရက် ဝင်းပပ က သူ့ သူငယ်ချင်း တယောက်ကို အကူညီတောင်း ပြီး ကိုတင်ထွတ် ကို လိမ်ခိုင်းရလေသည်၊ သူတို့ ငယ်သူငယ်ချင်း တွေ မဆုံရတာ ကြာလို့ ဟု အကြောင်းပြ ပြီး မိုးအောင်သူ နှင့် သူ အချစ်စခန်း ဖွင့် လေ့ရှိသည့် ဘိ လေး ကို ရောက်လာခဲ့ရလေတော့သည်၊ မိုးအောင်သူ နှင့် ဝင်းပပ မှာ အခန်းထဲ ရောက်တာနှင့်၊ ခနတာ ဝေးနေကြရတာကို ပင် တနှစ်တာလောက် ထင်နေကြ သူများ ဖြစ်နေကြရာ မီးတောက်လုမတတ် အနမ်းတွေ ဖြင့် နမ်းစုပ် ပွေ့ဖက် မိကြလေသည်၊ ဝင်းပပ မှာ ကိုတင်ထွတ် နှင့် ညတိုင်း လုပ်ဖြစ်နေကြသဖြင့် မထောင်းသာသော်လည်း မိုးအောင်သူ တယောက်မှာ ကား နေ့တိုင်း သူလုပ်နေကျ ဘော့စ်မမ ကို ရုံးမှာ မြင်သာ မြင်ရ မကြင်ရ ဖြစ်နေရှာသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်ရာ မအောင့်အီးထားနိူင်တော့၊ ထမိန် အတင်း ဆွဲချွတ်ကာ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲကာ အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်း ကို ကုန်းရက် တော့သည်၊
နောက်တော့လည်း လူပျို ရိုင်း ပီပီ အားအင် အပြည့်နှင့်၊ တန်အောင် ဆိုပြီး ထပ်သောက်လာခဲ့တဲ့ အားဆေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဝင်းပပ တယောက် ကိုတင်ထွတ် တလလောက် လိုးသလောက် ကို ခံရလေသည်၊ နောက် ဆုံး အနေနှင့် သူတောင်းဆိုထားသော ဝင်းပပ ၏ ဖင်ပေါက် လေးကို ပါ ခွင့်ပြုချက်ရ သဖြင့် ခရေပန်းဦး ဆွတ်ခူးလိုက်ရလေ သည်၊ ခရေပန်းကို တော့ သူ သေခြာ လေ့လာထားသလို အရမ်း မလုပ်ပါ၊ အသင့်ယူလာသော ကေဝိုင် ဂျယ် နှင့် အပေါက် သေခြာ ချောဆီလက်နှင့် ထိုးပေး၊ ပြီး အဆင်ပြေလာမှ ကွန်ဒန် စွတ်ထားသော သူ့ လီး ကြီး ကို ဖြေးဖြေးချင်း ထည့် လေသည်၊ ဝင်းပပ ၏ လှပ အချိုးပြေပစ်လှသော ဂစ်တာရှိတ် ကိုယ်လုံး ကြောင့် စွံကားနေသည့် တင်သား လုံးကြီး တွေကို လက် ဝါး နှစ်ဖက်ဖြင့် တဘက်တချက် ဆုပ်နှယ်ကာ စက်ဝိုင်းပုံ လိမ့်ပေးနေရင်းက ဝင်းပပ ခရေပွင့်လေးထဲ သူ့လိင်ချောင်း ကြီး တဖြေးဖြေး ဝင်သွားတာ ကြည့်ရတာ အရသာရှိနေရုံ တင် မက ခရေပွင့်လေး ၏ တင်းကျပ်စွာ ညှစ်ထားပေးမှုကြောင့် ကြာကြာ ထိန်းမထားနှိင်တော့ပဲ ခနလေး ဖြင့် သူ့ကွန်ဒန် ထဲ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားခဲ့ရလေသည်၊
ဝင်းပပ ခမျာလည်း ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဖင်ခံဖူးတာမို့ နည်းနည်း တောာ့ ကျိမ်းစပ်စပ် နှင့် အခံရခက်ခဲ့လေသည်၊ သို့သော်လည်း မိုးအောင်သူ ကို သနားသော စိတ် ဖြင့် ဒါ နောက်ဆုံးပဲ လေ ဟူသော အသိဖြင့် လည်းကောင်း၊ သူကိုယ်တိုင်က လည်း ဖင်အလိုးခံရတာ ဘယ်လိုနေ မလဲ သိချင်စိတ် အငုံ့လေး ကြောင့်လည်းကောင်း ခံဖြစ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်၊ ကေဝိုင်ဂျယ် များကြောင့်လည်းကောင်း မိုးအောင်သူ ၏ ညှာတာ ကြင်နာမှုကြောင့် လည်းကောင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သူထင်သလောက်တော့ မဆိုးဟု တွေးနေမိပါသည်၊ မိုးအောင်သူက ခွဲခါနီး ဝင်းပပ နှုတ်ခမ်းလေး ကို အားရပါးရ စုပ်နမ်းရင်း …မမ ကို အရမ်းချစ်တယ် ဗျာ…ကျနော် တို့ တွေ့တာ နောက်ကျသွားတယ်နော်… …မမ လည်း မိုးလေး ကို ချစ်ပါတယ်ကွယ်..ဒါပေမဲ့ ဘ၀ ကို လက်တွေ့ ကျကျ မြင်ပြီး ဖြစ်သင့်တဲ့ အမှန်တရားကိုတော့ တို့တွေ လက်ခံကြ ရမှာပေါ့နော်… ….မ မ နောက် တကယ်လို့ အခွင့်ရ မယ် ဆိုရင်ရော ကျနော့် ကို အခု လို ချစ်ခွင့်ပေး မလားဟင်… ဝင်းပပ တယောက် မိုးအောင်သူ မျက်နှာကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်ရင်း ခေါင်းလေး ညိမ့်ပြလိုက်မိလေတောသည်..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခံရခကျလသေညျ